“Shut your eyes and see.” - James Joyce, Ulysses
စာရေးဆရာ၊ ကဗြာစာဆိုတှကေို စာဖတျသူတှကေ ဘယျလို ဂုဏျပွုကွသလဲ။ စာဆိုဗိမာနျတညျမညျ။ သူ့ စာတှအေကွောငျး ကမျြးပွုမညျ။ ဋီကာရေးမညျ။ သူ့ မှေးနေ့ နှဈပတျလညျမှာ သူ့ဘဝ၊ သူ့စာအကွောငျး ဟောကွပွောကွမညျ။ ပွီးတော့ အမှတျတရစာအုပျ ထုတျမညျ။ သူ့ရဲ့ ရာပွညျ့မှေးနပှေဲ့ ကငျြးပမညျ။
စာရေးဆရာတဈဦးကတော့ အမြားသူငါနှငျ့မတူ ထူးထူးကဲကဲ ဂုဏျပွုခွငျးခံရသညျ။ သူကတော့ အိုငျယာလနျစာရေးဆရာ ဂြိမျးဈဂြှိုကျဈ။ သူ၏ အကောငျးဆုံးလကျရာဖွဈသညျ့ ယူးလီဆီးဈ (Ulysses) (၁၉၂၂) ထဲက အဓိကဇာတျကောငျ လီယိုပိုးဘလှနျးကို အစှဲပွုပွီး ဘလှနျးနရေ့ယျလို့ ရကျတဈရကျ သတျသတျမှတျမှတျထားပွီး ဂုဏျပွုခံရတာ။ နှဈစဉျနှဈတိုငျး ဒဗ်ဗလငျသားတှရေော၊ ကမ်ဘာအနှံ့က ဂြိမျးဈဂြှိုကျခဈြသူတှရေော ဇှနျလ ၁၆ ရကျနကေို့ Bloomsday အဖွဈ ဆငျနှဲကွတာ။
ဘာ့ကွောငျ့ ဇှနျလ ၁၆ ရကျကို ရှေးခယျြခဲ့ပါလိမျ့။ ယူးလီဆီးဈဝတ်ထုက ဘလှနျးနှငျ့ စတီဖငျဒဲဒလပျဈတို့ ၁၉၀၄ ခုနှဈ ဇှနျလ ၁၆ ရကျနေ့ တဈနတေ့ာလုံး ဒဗ်ဗလငျအနှံ့လြှောကျသှားရငျး သူတို့တှရေ့မွငျရ ကွုံရ လငျးပှငျ့ရတာတှကေို သရုပျဖျောထားတဲ့ဝတ်ထု။ သိစိတျအလဉျြရေးနညျး၊ ဇာတျကောငျရဲ့စိတျအတှငျး ဖွတျစီးသှားတဲ့ အတှေးအလဉျြကို ပုံဖျောရေးနညျးစတဲ့ ဘာသာစကား စမျးသပျမှုတှလေုပျထားတဲ့ ဝတ်ထု။ ဝတ်ထုတဈအုပျလုံးက တဈနတေ့ာအတှငျး ဖွဈပကျြခဲ့သမြှကို ခွယျမှုနျးထားခွငျး။ ဒါ့ကွောငျ့ ဇှနျလ ၁၆ ရကျကို သူတို့ရှေးခယျြခဲ့ခွငျး ဖွဈပါသတဲ့။ စာပသေမိုငျးတလြှောကျလုံး ဒီလိုဂုဏျပွုခံရတာမြိုး ဘယျစာရေးဆရာမြား ရခဲ့ဖူးပါသလဲခငျဗြာ။
ဂြိမျးဈဂြှိုကျဈ၏ ပုဂ်ဂလဘဝကို ဖှဲ့နှဲ့ထားတဲ့စာတှထေဲ ယူးလီဆီးဈကို ပထမဆုံးထုတျဝပေေးခဲ့တဲ့ အမရေိကနျသူ ဆီးလျဗီယာဘိချြ (Sylvia Beach) ရေးထားတာ လှမျးစရာကောငျးသညျ။ ဘိချြက ၁၉၁၉ ခုနှဈ ပွငျသဈနိုငျငံ ပါရီမွို့တျောမှာ "ရှိတျစပီးယားနှငျ့ အပေါငျးအပါမြား" (Shakespeare and Company) အမညျနှငျ့ စာအုပျဆိုငျဖှငျ့သညျ။ ဖှငျ့ပွီးမကွာခငျမှာပဲ သူ့စာအုပျဆိုငျက စာရေးဆရာတှေ၊ စာပသေမားတှေ စကျကရြာ၊ ကှနျးခိုရာ ဖွဈလာသညျ။ ၁၉၂၀ခုနှဈ ပါရီက စာပမေိတျဆှတှေရေဲ့အိမျပှဲတဈခုမှာ ဂြှိုကျဈကို သူမ စတှဖေူ့းသညျ။
'ဒါ နာမညျကြျော ဂြိမျးဈဂြှိုကျဈလား' ဟု ကြှနျမ တုနျတုနျယငျယငျ မေးမိသညျ။
'ဂြိမျးဈဂြှိုကျဈပါ' သူက ဖွသေညျ။
အရပျက အနတေျော။ ပိနျပိနျ။ ခါးနညျးနညျးကိုငျးသညျ။ ခံ့ညားသညျ။ သူ့လကျတှကေို သတိမပွုဘဲ မနနေိုငျ။ လကျခြောငျးတှကေ သှယျသှယျလေးတှေ။ ဘယျလကျခြောငျးမှာ ကြောကျစီလကျစှပျခပျထူထူ ဝတျထားသညျ။ မကျြလုံးတှကေ ပွာလဲ့နသေညျ။ အသိဉာဏျနှငျ့ လငျးလကျနသေညျ့ သူ့မကျြလုံးတှကေ အလှနျကွညျ့ကောငျးသညျ။ ညာဘကျမကျြလုံးက တဈခုခု ထူးခွားနသေလိုလို။ ညာဘကျ မကျြမှနျသားက ဘယျဘကျထကျ ပိုထူနတော သတိထားမိသညျ။ ဆံပငျက ထူထူ။ နီဝါဝါ။ လှိုငျးထနေ။ အရေးအကွောငျးထူထူနဖူးကယျြကယျြကနေ ဆံပငျကို နောကျလှနျဖီးထားသညျ။
သူ့ အာရုံထကျမွကျမှုက ကြှနျမတှဖေူ့းသမြှလူတှထေဲ လကျဖြားခါလောကျသညျ။ အသားရောငျ လတျလတျ။ မကျြနှာမှာ မှဲ့ခွောကျနညျးနညျးရှိ။ နီရောငျသမျးနေ။ မေးစမှေ့ာ မုတျဆိတျမှေးတိုနံ့နံ့။ နှာတံပျေါပျေါ။ နှုတျခမျးပါးပါး၊ ပိပိပွားပွား။ ငယျတုနျးက တျောတျောခြောမယျ့သူဟု ကြှနျမ တှေးမိသညျ။"
သူစကားပွောတဲ့အခါ အိုငျးရဈလသေံပေါကျတာကလှဲလို့ ရှငျးရှငျးလငျးလငျးရှိသညျ။ ဘိချြက သို့ကလို အမှတျရသညျ။
"သူပွောတဲ့စကားက ရိုးရိုးပဲ။ စကားလုံးတှေ၊ အသံတှကေို ဂရုစိုကျတာ ကြှနျမ သတိပွုမိတယျ။ ဘာသာစကားကို ခုံမငျခဈြခငျတာရော၊ နားကောငျးတာရောကွောငျ့ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ နှဈပေါငျးမြားစှာ အင်ျဂလိပျစာသငျတဲ့ ဆရာလုပျခဲ့တာလညျး ပါမယျ။"
"ကြှနျမတို့ စကားဆကျပွောကွတယျ။ ဂြှိုကျဈက အလှနျရိုးရှငျးတယျ။ ကြှနျမတို့ခတျေရဲ့ အကွီးကယျြဆုံး စာရေးဆရာကွီးတဈယောကျရဲ့ ရှမှေ့ောကျမှာရောကျနလေို့ စိတျလှုပျရှားရပမေယျ့ သူနဲ့ပွောရဆိုရတာ သကျသောငျ့သကျသာဖွဈတယျ။ ဒီ ပထမဆုံးအကွိမျ တှရေ့တာရော၊ နောကျနောငျ တှရေ့တာရောပဲ။ သူနဲ့ဆုံတိုငျး သူဉာဏျကွီးတာကို အမွဲသတိတရရှိတဲ့ကွားထဲကပဲ သူနဲ့ စကားပွောရတာ သိပျအဆငျပွတေယျ။ သူနဲ့ပွောရတာလောကျ အဆငျပွတောမြိုး ကြှနျမတဈခါမှ မကွုံဖူးဘူး။"
"သူ့မှာ သငျကွားရေးအတှအေ့ကွုံတှေ အမြားကွီးရှိကွောငျး ဂြှိုကျဈကပွောသညျ။ အီတလီနိုငျငံ ထရီအကျဈမွို့နှငျ့ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံ ဇူးရဈမွို့မှာနစေဉျက သူကြောငျးဆရာ လုပျဖူးသညျ။ ကြူရှငျပွဖူးသညျ။
'ဘယျဘာသာစကားတှေ သငျပေးတာလဲ' ဟုမေးတော့ 'အင်ျဂလိပျစာပါ' ဟုဖွသေညျ။
'ဤအရာသညျ စားပှဲဖွဈပါသညျ။ ဤအရာသညျ ဖောငျတိနျဖွဈပါသညျ စသဖွငျ့ပေါ့။ ဂြာမနျရော၊ လကျတငျရောပဲ။ ပွငျသဈတောငျ ပါသေးတယျ။'
'ဂရိရော ပါသေးလား' ဟု ကြှနျမက မေးလိုကျသညျ။ ရှေးဟောငျးဂရိဘာသာစကားတော့ သူမတတျပါတဲ့။ ခတျေသုံးဂရိစကားတော့ သူကောငျးကောငျးပွောနိုငျသညျ။ ထရီအကျဈမှာနတေုနျးက ဂရိသင်ျဘောသားတှဆေီက ရခဲ့တာ။
ဘာသာစကားတှထေဲ စူးဝငျမှုက ဂြှိုကျဈအနှဈသကျဆုံး ဝါသနာဖွဈမညျ။ ဘာသာစကား ဘယျနှမြိုးလောကျ တတျသလဲဟု ကြှနျမ သူ့ကိုမေးကွညျ့သညျ။ ကြှနျမတို့ ရတှေကျကွညျ့တော့ အနညျးဆုံး ၉ မြိုးခနျ့ရှိသညျ။ အင်ျဂလိပျဘာသာစကားအပွငျ သူက အီတလီလို၊ ပွငျသဈလို၊ ဂြာမနျလို၊ ဂရိလို၊ စပိနျလို၊ ဒတျချြလို ပွောနိုငျသညျ။ စကငျဒီနေးဗီးယား ဘာသာစကား သုံးမြိုး တတျသညျ။ နျောဝေ စာရေးဆရာကွီးအဈဘျဆငျရဲ့ စာတှဖေတျခငျြလို့ နျောဝဘောသာစကား သူသငျသညျ။ နောကျတော့ ဆှီဒငျနှငျ့ ဒိနျးမတျဘာသာစကားတှေ ဆကျသငျသညျ။ ဂြူးဘာသာစကား နှဈမြိုးလုံး သူပွောတတျသညျ။ တရုတျနှငျ့ ဂပြနျဘာသာ အကွောငျးတော့ သူစကားမစ။ သူငယျခငျြး အကျဇရာပေါငျးအတှကျ ခနျြခဲ့တာဖွဈမညျ။"
ဆီးလျဗီယာဘိချြနှငျ့ ခငျမငျသှားပွီး သူမ၏ "ရှိတျစပီးယားနှငျ့ အပေါငျးအပါမြား" မှာ သူ မကွာမကွာ လာထိုငျသညျ။ ဆိုငျမှာ ဟဲမငျးဝေးလို၊ စကော့ဖဈဂြဲရယျလို လူငယျစာရေးဆရာတှနှေငျ့ဆုံပွီး မိတျဆှဖွေဈသှားသညျ။ သူတို့အဖို့ ဂြှိုကျဈက ဘုရားတဈဆူ။ သို့ပမေဲ့ သူတို့တတှေ ဂြှိုကျဈကိုဆကျဆံတဲ့အခါ ရိုသသေမှုထကျ ခငျမငျမှုက အလေးသာတာ တှရေ့သညျ။
ဂြှိုကျဈကတော့ လူတိုငျးကို တနျးတူရညျတူဆကျဆံသညျ။ စာရေးဆရာဖွဈဖွဈ၊ ကလေးသူငယျဖွဈဖွဈ၊ စားပှဲထိုးဖွဈဖွဈ၊ တျောဝငျမငျးသမီးဖွဈဖွဈ၊ အိမျဖျောဖွဈဖွဈ သူ့အဖို့တော့ အားလုံးအတူတူ။ သူတို့တတှေ ပွောသမြှဆိုသမြှ သူစိတျဝငျစားသညျ။ သူ့အနနှေငျ့ ငွီးငှစေ့ရာကောငျးတဲ့လူ မတှဖေူ့းသေးဘူးဟု ဘိချြကိုပွောဖူးသညျ။ စာအုပျဆိုငျမှာ ဘိချြအလာကို ထိုငျစောငျ့ရငျး ဆိုငျအကူပွောပွတဲ့ပုံပွငျကို သူစိတျဝငျတစား နားထောငျနတေတျသညျ။ ဆိုငျကို တက်ကစီနှငျ့လာတဲ့အခါ ဆိုငျရှရေ့ောကျသညျ့တိုငျ ဒရိုငျဗာပွောတာ ဆုံးအောငျနားထောငျပွီးမှ ကားပျေါက ဆငျးသညျ။ သူ့ကို လူတိုငျးခငျမငျသညျ။ သူ့နှဈလိုဖှယျရှိမှုကို မညျသူမြှ တောငျ့မခံနိုငျ။
သူစကားပွောတဲ့အခါ မကွာမကွာ အာမဋေိတျသံ ပွုတတျသညျ။ သို့ပမေဲ့ သုံးတဲ့စကားလုံးတှကေ ယဉျကြေးသညျ။ အဆဲအဆို မပါ။ အကွမျးပတမျး မပါ။ သကျပွငျးခတြာ ဝါသနာပါသညျ။ သူ့အကွောငျးပွောတဲ့အခါ ရိုးရိုးလေးပွောသညျ။ ဖှဲ့တာနှဲ့တာ မရှိ။ နာမဝိသသေန၊ ကွိယာဝိသသေန အပွငျးစားတှေ သုံးလမေ့ရှိ။ အဆိုဝါးဆုံးအဖွဈအပကျြသညျပငျလြှငျ သူ့အတှကျက"စိတျပကျြစရာပါပဲ" ဖွဈသှားသညျ။ "သိပျစိတျပကျြစရာကောငျးတာပဲ" အဆငျ့ထိ မရောကျ။ သူက "အလှနျ" တို့ "အရမျး" တို့ မကွိုကျ။ တဈခါက "ဘာ့ကွောငျ့ 'အလှနျလှတယျ' ပွောရတာလဲ။ 'လှတယျ' ဆို တျောရောပေါ့" ဟု သူပွောနတော ဘိချြကွားလိုကျရသညျ။ လူတိုငျးအပျေါ သူယဉျယဉျကြေးကြေး ဆကျဆံသညျ။ အမြားနှငျ့ ဆကျဆံရာတှငျ အလှနျအလိုကျသိသညျ။
သူ့ဇနီးလောငျး နိုရာဘာနကယျကို ၁၉၀၃ ခုနှဈ သူ ဒဗ်ဗလငျမှာနစေဉျ စတှသေ့ညျ။ ၁၉၀၄ ခု ဇှနျလ ၁၆ ရကျနမှေ့ာ သူတို့နှဈဦးသား 'ပထမဆုံးအကွိမျ' ဒဗ်ဗလငျမွို့ထဲလမျးလြှောကျထှကျခဲ့ကွသညျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ယူးလီဆီးဈကို အဲဒီနတေ့ညျတာ။
ဘိချြက ဂြှိုကျဈတို့အိမျ မကွာခဏရောကျသညျ။ နိုရာတို့မိသားစုနှငျ့ ရငျးနှီးသညျ။ ဂြှိုကျဈက စိတျကူးယဉျသလောကျ နိုရာက လကျတှကေ့သြညျ။ သူ့ယောကျြားကို စသညျ။ နောကျသညျ။ ကလိသညျ။ ဗဈြတောကျဗဈြတောကျ ဆူသညျ။ ဘာမှသုံးစားမရတဲ့လူ ဟုပွောသညျ။ သူမ၏ အဆူအပူ အကွိမျးအမောငျးတှကေို သူသဘောကသြညျ။ လူတှေ တလေးတစားလုပျလှနျးလို့ သူ ငွီးငှနေ့တောကို နိုရာက ဖွဆေေးပေးလိုကျသလို ဖွဈသှားသညျ။
စာအုပျတှကေို နိုရာသဘောမတှေ့။ ဒါကလညျး ဂြှိုကျဈအဖို့ သဘောခှစေ့ရာ။ ယူးလီဆီးဈစာအုပျကို တဈခါမှလှနျမကွညျ့ဖူးဘူး ဟုနိုရာက ဘိချြကို ပွောဖူးသညျ။ တကယျတော့လညျး ဒီဝတ်ထုကို နိုရာဖတျစရာ လိုမညျမထငျ။ ဒီဝတ်ထုက နိုရာ့ကိုအကွောငျးပွုပွီး ပျေါလာခဲ့ရတဲ့ ဝတ်ထုလေ။ သူ့ယောကျြားအကွောငျး နိုရာညညျးပွောလေး ပွောတတျသညျ။ "တခြိနျလုံး စာရေးနတောပဲ။ နားတယျမရှိဘူး။ မနကျမနိုးတဈဝကျ နိုးတဈဝကျဖွဈတာနဲ့ အိပျရာဘေး ကွမျးပျေါခထြားတဲ့ စာရှကျနဲ့ခဲတံ ကောကျကိုငျတော့တာ။ ဘယျအခြိနျဆိုတာ မသိဘူး။ နလေ့ယျစာပွငျနတေဲ့အခြိနျ သူက ခေါကျခနဲ ထထှကျသှားခငျြ သှားတာ။ ဒီလိုလူမြိုးနဲ့နရေတာ ဘယျအိမျဖျော မွဲပါ့မလဲ . . .။ "သူဆူလေ၊ သူ့ယောကျြားနှငျ့ ကလေးတှကေ ရယျလေ။
စာရေးဆရာအစား တောငျသူနှငျ့ ဖွဈဖွဈ၊ ဘဏျလုပျငနျးရှငျနှငျ့ ဖွဈဖွဈ၊ ဆိုရစတေော့ အစုတျပလုတျကောကျတဲ့သူနှငျ့ ဖွဈဖွဈ လကျထပျခဲ့ရမှာဟု နိုရာက ပွောတတျသညျ။ ဒီလိုပွောတဲ့အခါ သူမက နှုတျခမျးကိုတှနျ့ပွီး ပွောသညျ။ နိုရာဂြှိုကျဈကိုရှေးခယျြခဲ့တာ ဂြှိုကျဈကံကောငျးဖို့ပါပဲ။ နိုရာသာ သူ့ဘဝမှာမရှိခဲ့ရငျ သူဘာလုပျနိုငျမလဲ။ နိုရာသာမရှိခဲ့ရငျ ယူးလီဆီးဈ ဖွဈလာပါ့မလား။ နိုရာနှငျ့စုံဖကျရတာ ဂြှိုကျဈရတဲ့ ကောငျးကွီးမင်ျဂလာတှထေဲက အကောငျးဆုံး မင်ျဂလာတဈပါးဟု ဆိုရမညျ။ သူသိတဲ့ စာရေးဆရာတှထေဲ သူတို့ဇနီးမောငျနှံ အိမျထောငျရေးက အပြျောရှငျဆုံးတဈခုပဲဟု ဘိချြက ရေးသညျ။
အနုပညာနှငျ့ပတျသကျ၍ သူ့မှာအကွောကျအလနျ့မရှိသလောကျ တကယျ့လောကကွီးထဲက ဟာတှကေတြော့ သူက ကွောကျနေ လနျ့နပွေနျသညျ။ မိုးသကျမုနျတိုငျးကတြဲ့အခါ မုနျတိုငျးပွီးတဲ့အထိ သူ့အခနျးထဲ ကုပျနတေတျသညျ။ သူက အမွငျ့ကွောကျသညျ။ ပငျလယျကွောကျသညျ။ ကူးစကျရောဂါ ကွောကျသညျ။
အစှဲကလညျး ကွီးသေးသညျ။ သီလရှငျနှဈပါးလမျးပျေါတှရေ့ငျ ဒါ ကံဆိုးတဲ့လက်ခဏာပဲ။ (တခါက သီလရှငျနှဈပါးရှိတဲ့လမျးပျေါမှာ သူစီးလာတဲ့တက်ကစီနှငျ့ အခွားတက်ကစီတဈစငျး တိုကျဖူးသညျ။) နံ ပါတျတှေ၊ နတှေ့မှော ကံကောငျး၊ ကံဆိုးရှိသညျ။ အိမျထဲ ထီးဖှငျ့မိတာ၊ ခုတငျပျေါ ယောကျြားဦးထုပျတငျထားမိတာတှကေ ကံဆိုးမယျ့ နိမိတျလက်ခဏာတှေ။ ကွောငျမညျးမညျးကတြော့ သူ့အတှကျ ကံကောငျးတဲ့ နိမိတျ။ တခါ သူတို့အိမျ ဘိချြသှားလညျတုနျး နိုရာက သူ့ယောကျြားလဲလြောငျးနတေဲ့အခနျးထဲ ကွောငျမညျးမညျးတဈကောငျ ဝငျသှားအောငျ ကွိုးစားနတောတှရေ့သညျ။ ဇနီးသညျရဲ့လုပျရပျ အောငျမွငျ/မအောငျမွငျကို ဂြှိုကျဈက အခနျးထဲကနေ စိတျပူပငျစှာ စောငျ့ကွညျ့နသေညျ။ သူ့နားမှာ ကွောငျတှရှေိတာ သဘောကသြညျ။ တခါက သူ့သမီးရဲ့ကွောငျပေါကျလေးတဈကောငျ မီးဖိုခြောငျပွတငျးပေါကျကနေ အောကျပွုတျကသြှားသညျ။ သူ့သမီးပွာသလောကျ သူလညျး ပွာနတောတှရေ့သညျ။
ခှေးကိုတော့ သူအလှနျကွောကျသညျ။ ခှေးဆိုရငျ သူ့ကိုကျမယျခညျြး ထငျနတော။ သူတို့စာအုပျဆိုငျ ဂြှိုကျဈရောကျလာတိုငျး ဘိချြက သူ့ခှေးဖွူလေးကို ခပျမွနျမွနျ အပွငျထုတျထားရသညျ။ ဟိုးမားရဲ့ယူးလီဆီးဈထဲက သွဒီးဆီးယပျဈတဈယောကျ အိမျပွနျအရောကျ သူ့ရဲ့အခဈြတျောခှေးအားဂေါ့ဈ အပြျောလှနျပွီး ခေါကျခနဲ သသှေားတဲ့အကွောငျး အစဖျောပေးတော့လညျး သူ့ခှေးကွောကျစိတျက ဘယျ့နှယျမှမနေ။ 'ဂီးယား' ဟုမွညျတမျးပွီး ရယျပဲရယျနသေညျ။
သူ့မှာ သားတဈယောကျ သမီးတဈယောကျရှိသညျ။ ကလေးတဈကြိပျလောကျရခငျြတာဟု ပွောဖူးသညျ။ သူက အလုပျထဲပဲ အစဉျတစိုကျ နှဈနသေူမဟုတျ။ သူဘယျလောကျ အလုပျမြားနနေေ ကလေး နှဈယောကျကို အခြိနျပေးတဲ့ ဖခငျဖွဈသညျ။ အသံကောငျးတဲ့ သားအတှကျ သူဂုဏျယူသညျ။ ဂြှိုကျဈမိသားစုအားလုံး အဆိုကောငျးသူတှေ။ အဆိုတျောဖွဈရမညျ့အစား စာရေးဆရာဖွဈရတာ သူနောငျတရ မဆုံး။ အဆိုတျောလုပျစားရရငျ ဒီ့ထကျ အလုပျဖွဈမှာဟု ပွောတတျသညျ။ "ဟုတျခငျြလညျး ဟုတျမပေါ့။ ဒါပမေဲ့ စာရေးဆရာအဖွဈလညျး အောငျမွငျနတောပဲဟာ" ဟု ဘိချြက သူ့ကိုတုံ့ပွနျသညျ။
ယူးလီဆီးဈဝတ်ထုကို ၁၉၁၄ ခုမှာ သူ သန်ဓစေတညျသညျ။ ၇ နှဈကြျောကြျောရေးပွီး ၁၉၂၁ အောကျတိုဘာလမှာ အဆုံးသတျသညျ။ သုံးလကွာကွာ ပရုဖျဖတျသညျ။ သူ့အသကျ ၄၀ ပွညျ့မှေးနေ့ (၁၉၂၂ ဖဖေျေါဝါရီ ၂ရကျ) ရောကျခါနီးမှ ပရုဖျဖတျတာ ရပျသညျ။
သူ့စာ ပုံနှိပျရတဲ့သူတှခေမြာ သနားစရာကောငျးသညျ။ သူ့စာအုပျကွောငျ့ သူတို့ပုံမှနျ လုပျနကေအြလုပျတှေ ခဏခေါကျထားရသညျ။ သို့ပမေဲ့သူတို့က အားတကျသရော ကူကွသညျ။ ဂြှိုကျဈ ပရုဖျဖတျတာက စာကစြာန ပွငျတာ၊ အမှားပွငျတာထကျ အသဈပွနျရေးတာ ဖွဈနသေညျ။ ယူးလီဆီးဈကို တတိယအကွိမျ ပွနျရေးတာဟု သူကပွောသညျ။ စာရှကျဘေးက ကှကျလပျနရောတှမှော စာသားအသဈတှေ ထပျဖွညျ့သညျ။ သူဖွညျ့ထားတဲ့စာတှကေို ညှနျပွဖို့ရာ ဒုံးပြံတှေ၊ ကွယျပှငျ့တှနှေငျ့ တနျဆာဆငျသညျ။ စာပိုဒျအသဈတှေ နရောယူလာတော့ စာမကျြနှာတှကေို ထပျခါထပျခါ ပွငျရပွနျသညျ။
သူ့စာကိုရိုကျဖို့ စာစီစာရိုကျသူ ရှာရတာကလညျး တဈဒုက်ခ။ စာစီစာရိုကျ ၉ ယောကျ ကြျောသညျအထိ လကျပွောငျးရတဲ့အခါရှိသညျ။ ၈ ယောကျမွောကျ စာစီစာရိုကျ အမြိုးသမီးဆိုလြှငျ သူ့စာရိုကျရငျး စိတျညဈလှနျး၍ ပွတငျးပေါကျက ခုနျခဖြို့အထိ ဖွဈသှားသညျ။ သူ့လကျရေးကလညျး တျောရုံလူဖတျနိုငျသော လကျရေးမြိုးမဟုတျ။ နောကျပွဿနာတဈခုက အဖုံးကိစ်စ။ ဂြှိုကျဈက သူ့စာအုပျအဖုံးရောငျကို ဂရိအလံတျောမှာပါတဲ့ အပွာရောငျမြိုး ဖွဈစခေ့ငျြတာ။ အဲဒီ အပွာရောငျစက်ကူ ရှာပုံတျောဖှငျ့ရပုံကလညျး စာတဈပုဒျ ဖှဲ့ရလောကျသညျ။
ယူးလီဆီးဈ အစအဆုံး ဂြှိုကျဈက ခဲတံနှငျ့ရေးသညျ။ (တခြို့ရကျတှမှော ၁၇ နာရီကွာ ရေးသညျတဲ့။) သူ့ဝတ်ထုတှအေားလုံး လကျနှငျ့ ခဲတံနှငျ့ပဲ ရေးသညျ။ ပါရီရှိ စမဈဆိုငျကရတဲ့ ခဲဆံမညျးမညျး ခပျတုံးတုံးကို သုံးသညျ။ ခဲတံက တဈရောငျတညျးမဟုတျ၊ ရောငျစုံ။ ဘယျခဲတံအရောငျ သုံးပွီးရေးလြှငျ ဘယျအခနျးရေးနတေယျဆိုတာ သိအောငျလုပျထားတာ။ ဖောငျတိနျကို သူ,မကိုငျတတျ။ တခါက ဖောငျတိနျမငျဖွညျ့ရငျး သူ့တဈကိုယျလုံး မငျတှပေစှေနျးကုနျတာ ဘိချြ တှဖေူ့းသညျ။ နောငျ လကျနှိပျစကျနှငျ့ စာရေးဖို့ သူစဉျးစားသညျ။ အသံတိတျ ရမငျတနျလကျနှိပျစကျ အကောငျးစားတဈလုံး သူဝယျဖွဈသှားသညျ။ နောငျအသံထှကျတဲ့ လကျနှိပျစကျနှငျ့ သူ့လကျနှိပျစကျ အလဲအထပျလုပျသညျ။ ဘယျလကျနှိပျစကျကိုမှ သူ,မသုံးဖွဈခဲ့။
ပါရီမှာနရေငျး မကျြစိရောဂါဟောငျး ပွနျထသညျ။ ရတေိမျရော၊ သူငယျအိမျ ကွှကျသားရောငျတဲ့ ရောဂါရော။ သို့နှငျ့ မကျြစိရောဂါကုဖို့၊ ခှဲစိတျဖို့ မကျြစိပါရဂူ ဒေါကျတာဘော့ရျှဆေးခနျး တကျရသညျ။ ဘော့ရျှက ဂြှိုကျဈကို အလှနျအရေးပေးသညျ။ နှဈပေါငျးမြားစှာ ဆေးကုသမှုပေးပွီး ဆေးဖိုးရှငျးတဲ့အခြိနျ တောငျးတဲ့ဆေးဖိုးက နညျးလှနျးလှသမို့ သူ့မှာ စျောကားသလို ခံစားရကွောငျး ဂြှိုကျဈက ပွောဖူးသညျ။
ဆေးခနျးအပျေါထပျမှာ ခုတငျနှဈလုံးပါ အခနျးရှိသညျ။ သူကခုတငျတဈလုံးယူပွီး ကနျြခုတငျကို နိုရာယူသညျ။ နိုရာမရှိလြှငျ သူမနတေတျ။ ဆေးခနျးရဲ့တဈဦးသော သူနာပွုဆရာမ ခပျထှားထှားက လူနာတှနှေငျ့ အစပျမတညျ့တတျသျောလညျး ဂြှိုကျဈနှငျ့ကအြမွဲ အဆငျခြောသညျ။ သူက ဆရာမရဲ့အခဈြတျောလူနာ။ ဒီလိုဖွဈရတာကလညျး အဆနျးတကွယျ ကိစ်စမဟုတျ။ ဂြှိုကျဈက ဘယျတော့မှ မညညျးတတျတဲ့ လူနာ။ ပွီးတော့ သူက သူတပါးအရိပျအကဲ အလှနျသိတတျသူ။
ဂြှိုကျဈလို အာရုံခံစားမှုထကျမွကျသူအဖို့ မကျြစိရောဂါခံစားရတာ၊ ခှဲစိတျတဲ့ဝဒေနာခံစားရတာ သူမြားထကျ ပိုပိုသာသာဖွဈမညျ။ သို့ပမေဲ့ သူက ညညျးညူခွငျး၊ ဆူပူခွငျး၊ စိတျတိုခွငျး မရှိ။ ခှဲပွီးစ မကျြလုံးပတျတီးစီးထားပွီး အိပျရာထဲ နာရီပေါငျးမြားစှာ လဲလြောငျးနရေသျောလညျး သူ့မှာ စိတျတိုတာ၊ အလိုမကတြာမြိုး မတှရေ့။ ပငျြးရိငွီးငှပေုံ့လညျး မရ။ သူ့ခေါငျးထဲ သူ့အတှေးနှငျ့သူ မှလြေ့ျောနတောဖွဈမညျ။ ဂြှိုကျဈလို မကုနျနိုငျမခမျးနိုငျလောကျအောငျ ဖနျတီးနိုငျစှမျးရှိသူအဖို့ ငွီးငှစေ့ရာအခြိနျ မရှိတာဖွဈမညျ။ ဒါ့ပွငျ သူက မှတျဉာဏျလကေ့ငျြ့ခနျး မှနျမှနျလုပျသညျ။ ငယျစဉျကတညျးက လုပျခဲ့တဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျး။ ဒါ့ကွောငျ့ ကွားကွားသမြှ အရာအားလုံး သူ့မှတျဉာဏျထဲ စှဲမွဲသှားတာဟု ပွောဖူးသညျ။
သူဆေးခနျးတကျနတေုနျး ဘိချြသှားကွညျ့တဲ့အခါ ကနျတျောရှငျမ (Lady of the Lake) စာအုပျယူလာခဲ့ဖို့ ပွောသညျ။ နောကျတဈကွိမျသှားတော့ သူပွောတဲ့စာအုပျ ယူသှားသညျ။ ဂြှိုကျဈက
"ကွိုကျတဲ့စာမကျြနှာဖှငျ့ပွီးတော့ စာတဈကွောငျးဖတျပွစမျးပါ" ဟု ဘိချြကို ခိုငျးသညျ။ ဘိချြဖတျ ပွီးပွီးခငျြး အဲဒီစာမကျြနှာနှငျ့ နောကျစာမကျြနှာမှာပါတဲ့ စာပိုဒျတှအေားလုံး သူအလှတျဆကျရှတျသညျ။ သူရှတျတာ အမှားတဈလုံးမှမပါ။ ဘိချြ သဘောပေါကျသှားသညျ။ ဂြှိုကျဈက ဒီစာအုပျသာမက ကနျြတဲ့စကားပွစောအုပျတှေ၊ ကဗြာစာအုပျတှေ တျောတျောမြားမြား အာဂုံဆောငျခဲ့တာဖွဈမညျ။ အသကျနှဈဆယျမတိုငျမီ ဖတျသငျ့ဖတျရာတှေ အားလုံးလိုလိုဖတျပွီး သူ့ခေါငျးထဲ ထညျ့ထားခဲ့ဟနျတူသညျ။ နောငျတဈခြိနျ သူ အကိုးအကားရှာခငျြရငျ စာအုပျထ ရှာစရာ၊ စာအုပျထ လှနျစရာမလိုတော့ပွီ။
ဂြိမျးဈဂြှိုကျဈက စကားလုံးသမား။ အင်ျဂလိပျဘာသာစကားက ဝေါဟာရကွှယျဝလှနျးလို့ စကားလုံးအသဈ ထှငျစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ တဈနိုငျငံတညျးသား စာရေးဆရာကွီး ဘားနတျရှော၏ အဆိုအမိနျ့ကို သူ သဘောမတူ။ သူက စကားလုံးထှငျရတာ၊ ကုလားဖနျထိုးရတာ ပြျောသညျ။ ဘာသာစကားကို ဟိုစညျးကမျး ဒီစညျးကမျးတှနှေငျ့ ကနျ့သတျထားတာ၊ ခြုပျနှောငျထားတာ သူလကျမခံ။ စကားလုံးအပျေါ ခံစားမှုမညျမြှပွငျးပွပုံကို လူငယျအနုပညာသမားတဈဦးရဲ့ရုပျပုံလှာမှာ သို့ကလို ရေးသညျ။ "သူ တိတျတိတျလေး ငိုခငျြတယျ။ သူ့အတှကျ မဟုတျပါဘူး။ စကားလုံးတှအေတှကျပါ။ ဂီတလိုလှပတဲ့ ကွကှေဲစရာကောငျးတဲ့ စကားလုံးတှအေတှကျ သူငိုခငျြတာ။"
ယူးလီဆီးဈထှကျပွီး ၁၇ နှဈအကွာ ၁၉၃၉ ခုမှာ ဖငျနီဂနျးဈဝိတျချ ထှကျလာသညျ။ ဒီစာအုပျကလညျး ဘာသာစကား စမျးသပျထားတာတှပေါသညျ။ ဖတျရတာ အလှနျခကျသညျ။ တဈစုံတဈဦးက အိုငျးရဈလနှေငျ့ဖတျပွလြှငျတော့ နားထောငျရတာ အငျမတနျအရသာရှိသညျဟု ဆိုသညျ။ ဒီဝတ်ထုအကွောငျး ဂြှိုကျဈကိုမေးကွညျ့တော့ သူက အခုလိုဖွသေညျ။
"ဒီထဲမှာ အသိခကျတဲ့ပုစ်ဆာတှေ၊ ပဟဠေိတှေ တပုံကွီးထညျ့ထားတယျ။ ကြှနျတျောဘာဆိုလိုခငျြမှနျး ပါမောက်ခတှေ နှဈပေါငျးရာခြီပွီး ဆကျငွငျးလို့ရအောငျ လုပျထားတာ။ လူတဈဦးတဈယောကျ ထာဝရအသကျရှငျအောငျလုပျလို့ရတာ ဒီနညျးပဲ ရှိတာကိုး။"
ဥရောပနိုငျငံတှမှော ဘဝတလြှောကျလုံးလိုလို လှညျ့ပတျနထေိုငျသှားခဲ့တဲ့ ဂြိမျးဈဂြှိုကျဈရဲ့ နှလုံးသားက ဘယျနရောရှိပါလိမျ့။ သိခငျြရငျ သူ့ ပေးစာထဲက စာတဈကွောငျး ဖတျကွညျ့ရုံ။
"ငါသတေဲ့အခါ ငါ့နှလုံးသားပျေါမှာ ဒဗ်ဗလငျ ဆိုတဲ့စာလုံး ရေးထိုးထားလိမျ့မယျ။"
ဂြိမျးဈဂြှိုကျဈအကွောငျး ဖတျတဲ့အခါ ဆရာဒဂုနျတာရာကို ပွေးသတိရမိ။ ဘားနတျရှောနှငျ့ ဂြှိုကျဈအကွောငျး ဖတျရတဲ့အခါ ဆရာဦးသိနျးဖမွေငျ့နှငျ့ ဆရာတာရာ ခေါငျးထဲဝငျလာ။ သူတို့ကိုလှမျးလို့ ရေးတာ။
Shakespeare and Company. Sylvia Beach. 1956.
စာရေးဆရာ၊ ကဗျာစာဆိုတွေကို စာဖတ်သူတွေက ဘယ်လို ဂုဏ်ပြုကြသလဲ။ စာဆိုဗိမာန်တည်မည်။ သူ့ စာတွေအကြောင်း ကျမ်းပြုမည်။ ဋီကာရေးမည်။ သူ့ မွေးနေ့ နှစ်ပတ်လည်မှာ သူ့ဘဝ၊ သူ့စာအကြောင်း ဟောကြပြောကြမည်။ ပြီးတော့ အမှတ်တရစာအုပ် ထုတ်မည်။ သူ့ရဲ့ ရာပြည့်မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပမည်။
စာရေးဆရာတစ်ဦးကတော့ အများသူငါနှင့်မတူ ထူးထူးကဲကဲ ဂုဏ်ပြုခြင်းခံရသည်။ သူကတော့ အိုင်ယာလန်စာရေးဆရာ ဂျိမ်းစ်ဂျွိုက်စ်။ သူ၏ အကောင်းဆုံးလက်ရာဖြစ်သည့် ယူးလီဆီးစ် (Ulysses) (၁၉၂၂) ထဲက အဓိကဇာတ်ကောင် လီယိုပိုးဘလွန်းကို အစွဲပြုပြီး ဘလွန်းနေ့ရယ်လို့ ရက်တစ်ရက် သတ်သတ်မှတ်မှတ်ထားပြီး ဂုဏ်ပြုခံရတာ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဒဗ္ဗလင်သားတွေရော၊ ကမ္ဘာအနှံ့က ဂျိမ်းစ်ဂျွိုက်ချစ်သူတွေရော ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ကို Bloomsday အဖြစ် ဆင်နွှဲကြတာ။
ဘာ့ကြောင့် ဇွန်လ ၁၆ ရက်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါလိမ့်။ ယူးလီဆီးစ်ဝတ္ထုက ဘလွန်းနှင့် စတီဖင်ဒဲဒလပ်စ်တို့ ၁၉၀၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ တစ်နေ့တာလုံး ဒဗ္ဗလင်အနှံ့လျှောက်သွားရင်း သူတို့တွေ့ရမြင်ရ ကြုံရ လင်းပွင့်ရတာတွေကို သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ဝတ္ထု။ သိစိတ်အလျဉ်ရေးနည်း၊ ဇာတ်ကောင်ရဲ့စိတ်အတွင်း ဖြတ်စီးသွားတဲ့ အတွေးအလျဉ်ကို ပုံဖော်ရေးနည်းစတဲ့ ဘာသာစကား စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ထားတဲ့ ဝတ္ထု။ ဝတ္ထုတစ်အုပ်လုံးက တစ်နေ့တာအတွင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကို ခြယ်မှုန်းထားခြင်း။ ဒါ့ကြောင့် ဇွန်လ ၁၆ ရက်ကို သူတို့ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသတဲ့။ စာပေသမိုင်းတလျှောက်လုံး ဒီလိုဂုဏ်ပြုခံရတာမျိုး ဘယ်စာရေးဆရာများ ရခဲ့ဖူးပါသလဲခင်ဗျာ။
ဂျိမ်းစ်ဂျွိုက်စ်၏ ပုဂ္ဂလဘဝကို ဖွဲ့နွဲ့ထားတဲ့စာတွေထဲ ယူးလီဆီးစ်ကို ပထမဆုံးထုတ်ဝေပေးခဲ့တဲ့ အမေရိကန်သူ ဆီးလ်ဗီယာဘိခ်ျ (Sylvia Beach) ရေးထားတာ လွမ်းစရာကောင်းသည်။ ဘိခ်ျက ၁၉၁၉ ခုနှစ် ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီမြို့တော်မှာ "ရှိတ်စပီးယားနှင့် အပေါင်းအပါများ" (Shakespeare and Company) အမည်နှင့် စာအုပ်ဆိုင်ဖွင့်သည်။ ဖွင့်ပြီးမကြာခင်မှာပဲ သူ့စာအုပ်ဆိုင်က စာရေးဆရာတွေ၊ စာပေသမားတွေ စက်ကျရာ၊ ကွန်းခိုရာ ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၂၀ခုနှစ် ပါရီက စာပေမိတ်ဆွေတွေရဲ့အိမ်ပွဲတစ်ခုမှာ ဂျွိုက်စ်ကို သူမ စတွေ့ဖူးသည်။
'ဒါ နာမည်ကျော် ဂျိမ်းစ်ဂျွိုက်စ်လား' ဟု ကျွန်မ တုန်တုန်ယင်ယင် မေးမိသည်။
'ဂျိမ်းစ်ဂျွိုက်စ်ပါ' သူက ဖြေသည်။
အရပ်က အနေတော်။ ပိန်ပိန်။ ခါးနည်းနည်းကိုင်းသည်။ ခံ့ညားသည်။ သူ့လက်တွေကို သတိမပြုဘဲ မနေနိုင်။ လက်ချောင်းတွေက သွယ်သွယ်လေးတွေ။ ဘယ်လက်ချောင်းမှာ ကျောက်စီလက်စွပ်ခပ်ထူထူ ဝတ်ထားသည်။ မျက်လုံးတွေက ပြာလဲ့နေသည်။ အသိဉာဏ်နှင့် လင်းလက်နေသည့် သူ့မျက်လုံးတွေက အလွန်ကြည့်ကောင်းသည်။ ညာဘက်မျက်လုံးက တစ်ခုခု ထူးခြားနေသလိုလို။ ညာဘက် မျက်မှန်သားက ဘယ်ဘက်ထက် ပိုထူနေတာ သတိထားမိသည်။ ဆံပင်က ထူထူ။ နီဝါဝါ။ လှိုင်းထနေ။ အရေးအကြောင်းထူထူနဖူးကျယ်ကျယ်ကနေ ဆံပင်ကို နောက်လှန်ဖီးထားသည်။
သူ့ အာရုံထက်မြက်မှုက ကျွန်မတွေ့ဖူးသမျှလူတွေထဲ လက်ဖျားခါလောက်သည်။ အသားရောင် လတ်လတ်။ မျက်နှာမှာ မှဲ့ခြောက်နည်းနည်းရှိ။ နီရောင်သမ်းနေ။ မေးစေ့မှာ မုတ်ဆိတ်မွေးတိုနံ့နံ့။ နှာတံပေါ်ပေါ်။ နှုတ်ခမ်းပါးပါး၊ ပိပိပြားပြား။ ငယ်တုန်းက တော်တော်ချောမယ့်သူဟု ကျွန်မ တွေးမိသည်။"
သူစကားပြောတဲ့အခါ အိုင်းရစ်လေသံပေါက်တာကလွဲလို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသည်။ ဘိခ်ျက သို့ကလို အမှတ်ရသည်။
"သူပြောတဲ့စကားက ရိုးရိုးပဲ။ စကားလုံးတွေ၊ အသံတွေကို ဂရုစိုက်တာ ကျွန်မ သတိပြုမိတယ်။ ဘာသာစကားကို ခုံမင်ချစ်ခင်တာရော၊ နားကောင်းတာရောကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ ဆရာလုပ်ခဲ့တာလည်း ပါမယ်။"
"ကျွန်မတို့ စကားဆက်ပြောကြတယ်။ ဂျွိုက်စ်က အလွန်ရိုးရှင်းတယ်။ ကျွန်မတို့ခေတ်ရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး စာရေးဆရာကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာရောက်နေလို့ စိတ်လှုပ်ရှားရပေမယ့် သူနဲ့ပြောရဆိုရတာ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်တယ်။ ဒီ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ရတာရော၊ နောက်နောင် တွေ့ရတာရောပဲ။ သူနဲ့ဆုံတိုင်း သူဉာဏ်ကြီးတာကို အမြဲသတိတရရှိတဲ့ကြားထဲကပဲ သူနဲ့ စကားပြောရတာ သိပ်အဆင်ပြေတယ်။ သူနဲ့ပြောရတာလောက် အဆင်ပြေတာမျိုး ကျွန်မတစ်ခါမှ မကြုံဖူးဘူး။"
"သူ့မှာ သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံတွေ အများကြီးရှိကြောင်း ဂျွိုက်စ်ကပြောသည်။ အီတလီနိုင်ငံ ထရီအက်စ်မြို့နှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဇူးရစ်မြို့မှာနေစဉ်က သူကျောင်းဆရာ လုပ်ဖူးသည်။ ကျူရှင်ပြဖူးသည်။
'ဘယ်ဘာသာစကားတွေ သင်ပေးတာလဲ' ဟုမေးတော့ 'အင်္ဂလိပ်စာပါ' ဟုဖြေသည်။
'ဤအရာသည် စားပွဲဖြစ်ပါသည်။ ဤအရာသည် ဖောင်တိန်ဖြစ်ပါသည် စသဖြင့်ပေါ့။ ဂျာမန်ရော၊ လက်တင်ရောပဲ။ ပြင်သစ်တောင် ပါသေးတယ်။'
'ဂရိရော ပါသေးလား' ဟု ကျွန်မက မေးလိုက်သည်။ ရှေးဟောင်းဂရိဘာသာစကားတော့ သူမတတ်ပါတဲ့။ ခေတ်သုံးဂရိစကားတော့ သူကောင်းကောင်းပြောနိုင်သည်။ ထရီအက်စ်မှာနေတုန်းက ဂရိသင်္ဘောသားတွေဆီက ရခဲ့တာ။
ဘာသာစကားတွေထဲ စူးဝင်မှုက ဂျွိုက်စ်အနှစ်သက်ဆုံး ဝါသနာဖြစ်မည်။ ဘာသာစကား ဘယ်နှမျိုးလောက် တတ်သလဲဟု ကျွန်မ သူ့ကိုမေးကြည့်သည်။ ကျွန်မတို့ ရေတွက်ကြည့်တော့ အနည်းဆုံး ၉ မျိုးခန့်ရှိသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအပြင် သူက အီတလီလို၊ ပြင်သစ်လို၊ ဂျာမန်လို၊ ဂရိလို၊ စပိန်လို၊ ဒတ်ခ်ျလို ပြောနိုင်သည်။ စကင်ဒီနေးဗီးယား ဘာသာစကား သုံးမျိုး တတ်သည်။ နော်ဝေ စာရေးဆရာကြီးအစ်ဘ်ဆင်ရဲ့ စာတွေဖတ်ချင်လို့ နော်ဝေဘာသာစကား သူသင်သည်။ နောက်တော့ ဆွီဒင်နှင့် ဒိန်းမတ်ဘာသာစကားတွေ ဆက်သင်သည်။ ဂျူးဘာသာစကား နှစ်မျိုးလုံး သူပြောတတ်သည်။ တရုတ်နှင့် ဂျပန်ဘာသာ အကြောင်းတော့ သူစကားမစ။ သူငယ်ချင်း အက်ဇရာပေါင်းအတွက် ချန်ခဲ့တာဖြစ်မည်။"
ဆီးလ်ဗီယာဘိခ်ျနှင့် ခင်မင်သွားပြီး သူမ၏ "ရှိတ်စပီးယားနှင့် အပေါင်းအပါများ" မှာ သူ မကြာမကြာ လာထိုင်သည်။ ဆိုင်မှာ ဟဲမင်းဝေးလို၊ စကော့ဖစ်ဂျဲရယ်လို လူငယ်စာရေးဆရာတွေနှင့်ဆုံပြီး မိတ်ဆွေဖြစ်သွားသည်။ သူတို့အဖို့ ဂျွိုက်စ်က ဘုရားတစ်ဆူ။ သို့ပေမဲ့ သူတို့တတွေ ဂျွိုက်စ်ကိုဆက်ဆံတဲ့အခါ ရိုသေသမှုထက် ခင်မင်မှုက အလေးသာတာ တွေ့ရသည်။
ဂျွိုက်စ်ကတော့ လူတိုင်းကို တန်းတူရည်တူဆက်ဆံသည်။ စာရေးဆရာဖြစ်ဖြစ်၊ ကလေးသူငယ်ဖြစ်ဖြစ်၊ စားပွဲထိုးဖြစ်ဖြစ်၊ တော်ဝင်မင်းသမီးဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ဖော်ဖြစ်ဖြစ် သူ့အဖို့တော့ အားလုံးအတူတူ။ သူတို့တတွေ ပြောသမျှဆိုသမျှ သူစိတ်ဝင်စားသည်။ သူ့အနေနှင့် ငြီးငွေ့စရာကောင်းတဲ့လူ မတွေ့ဖူးသေးဘူးဟု ဘိခ်ျကိုပြောဖူးသည်။ စာအုပ်ဆိုင်မှာ ဘိခ်ျအလာကို ထိုင်စောင့်ရင်း ဆိုင်အကူပြောပြတဲ့ပုံပြင်ကို သူစိတ်ဝင်တစား နားထောင်နေတတ်သည်။ ဆိုင်ကို တက္ကစီနှင့်လာတဲ့အခါ ဆိုင်ရှေ့ရောက်သည့်တိုင် ဒရိုင်ဗာပြောတာ ဆုံးအောင်နားထောင်ပြီးမှ ကားပေါ်က ဆင်းသည်။ သူ့ကို လူတိုင်းခင်မင်သည်။ သူ့နှစ်လိုဖွယ်ရှိမှုကို မည်သူမျှ တောင့်မခံနိုင်။
သူစကားပြောတဲ့အခါ မကြာမကြာ အာမေဋိတ်သံ ပြုတတ်သည်။ သို့ပေမဲ့ သုံးတဲ့စကားလုံးတွေက ယဉ်ကျေးသည်။ အဆဲအဆို မပါ။ အကြမ်းပတမ်း မပါ။ သက်ပြင်းချတာ ဝါသနာပါသည်။ သူ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါ ရိုးရိုးလေးပြောသည်။ ဖွဲ့တာနွဲ့တာ မရှိ။ နာမဝိသေသန၊ ကြိယာဝိသေသန အပြင်းစားတွေ သုံးလေ့မရှိ။ အဆိုဝါးဆုံးအဖြစ်အပျက်သည်ပင်လျှင် သူ့အတွက်က"စိတ်ပျက်စရာပါပဲ" ဖြစ်သွားသည်။ "သိပ်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာပဲ" အဆင့်ထိ မရောက်။ သူက "အလွန်" တို့ "အရမ်း" တို့ မကြိုက်။ တစ်ခါက "ဘာ့ကြောင့် 'အလွန်လှတယ်' ပြောရတာလဲ။ 'လှတယ်' ဆို တော်ရောပေါ့" ဟု သူပြောနေတာ ဘိခ်ျကြားလိုက်ရသည်။ လူတိုင်းအပေါ် သူယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ဆက်ဆံသည်။ အများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် အလွန်အလိုက်သိသည်။
သူ့ဇနီးလောင်း နိုရာဘာနကယ်ကို ၁၉၀၃ ခုနှစ် သူ ဒဗ္ဗလင်မှာနေစဉ် စတွေ့သည်။ ၁၉၀၄ ခု ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာ သူတို့နှစ်ဦးသား 'ပထမဆုံးအကြိမ်' ဒဗ္ဗလင်မြို့ထဲလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ကြသည်။ ဒါ့ကြောင့် ယူးလီဆီးစ်ကို အဲဒီနေ့တည်တာ။
ဘိခ်ျက ဂျွိုက်စ်တို့အိမ် မကြာခဏရောက်သည်။ နိုရာတို့မိသားစုနှင့် ရင်းနှီးသည်။ ဂျွိုက်စ်က စိတ်ကူးယဉ်သလောက် နိုရာက လက်တွေ့ကျသည်။ သူ့ယောက်ျားကို စသည်။ နောက်သည်။ ကလိသည်။ ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက် ဆူသည်။ ဘာမှသုံးစားမရတဲ့လူ ဟုပြောသည်။ သူမ၏ အဆူအပူ အကြိမ်းအမောင်းတွေကို သူသဘောကျသည်။ လူတွေ တလေးတစားလုပ်လွန်းလို့ သူ ငြီးငွေ့နေတာကို နိုရာက ဖြေဆေးပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားသည်။
စာအုပ်တွေကို နိုရာသဘောမတွေ့။ ဒါကလည်း ဂျွိုက်စ်အဖို့ သဘောခွေ့စရာ။ ယူးလီဆီးစ်စာအုပ်ကို တစ်ခါမှလှန်မကြည့်ဖူးဘူး ဟုနိုရာက ဘိခ်ျကို ပြောဖူးသည်။ တကယ်တော့လည်း ဒီဝတ္ထုကို နိုရာဖတ်စရာ လိုမည်မထင်။ ဒီဝတ္ထုက နိုရာ့ကိုအကြောင်းပြုပြီး ပေါ်လာခဲ့ရတဲ့ ဝတ္ထုလေ။ သူ့ယောက်ျားအကြောင်း နိုရာညည်းပြောလေး ပြောတတ်သည်။ "တချိန်လုံး စာရေးနေတာပဲ။ နားတယ်မရှိဘူး။ မနက်မနိုးတစ်ဝက် နိုးတစ်ဝက်ဖြစ်တာနဲ့ အိပ်ရာဘေး ကြမ်းပေါ်ချထားတဲ့ စာရွက်နဲ့ခဲတံ ကောက်ကိုင်တော့တာ။ ဘယ်အချိန်ဆိုတာ မသိဘူး။ နေ့လယ်စာပြင်နေတဲ့အချိန် သူက ခေါက်ခနဲ ထထွက်သွားချင် သွားတာ။ ဒီလိုလူမျိုးနဲ့နေရတာ ဘယ်အိမ်ဖော် မြဲပါ့မလဲ . . .။ "သူဆူလေ၊ သူ့ယောက်ျားနှင့် ကလေးတွေက ရယ်လေ။
စာရေးဆရာအစား တောင်သူနှင့် ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်နှင့် ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုရစေတော့ အစုတ်ပလုတ်ကောက်တဲ့သူနှင့် ဖြစ်ဖြစ် လက်ထပ်ခဲ့ရမှာဟု နိုရာက ပြောတတ်သည်။ ဒီလိုပြောတဲ့အခါ သူမက နှုတ်ခမ်းကိုတွန့်ပြီး ပြောသည်။ နိုရာဂျွိုက်စ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာ ဂျွိုက်စ်ကံကောင်းဖို့ပါပဲ။ နိုရာသာ သူ့ဘဝမှာမရှိခဲ့ရင် သူဘာလုပ်နိုင်မလဲ။ နိုရာသာမရှိခဲ့ရင် ယူးလီဆီးစ် ဖြစ်လာပါ့မလား။ နိုရာနှင့်စုံဖက်ရတာ ဂျွိုက်စ်ရတဲ့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေထဲက အကောင်းဆုံး မင်္ဂလာတစ်ပါးဟု ဆိုရမည်။ သူသိတဲ့ စာရေးဆရာတွေထဲ သူတို့ဇနီးမောင်နှံ အိမ်ထောင်ရေးက အပျော်ရွှင်ဆုံးတစ်ခုပဲဟု ဘိခ်ျက ရေးသည်။
အနုပညာနှင့်ပတ်သက်၍ သူ့မှာအကြောက်အလန့်မရှိသလောက် တကယ့်လောကကြီးထဲက ဟာတွေကျတော့ သူက ကြောက်နေ လန့်နေပြန်သည်။ မိုးသက်မုန်တိုင်းကျတဲ့အခါ မုန်တိုင်းပြီးတဲ့အထိ သူ့အခန်းထဲ ကုပ်နေတတ်သည်။ သူက အမြင့်ကြောက်သည်။ ပင်လယ်ကြောက်သည်။ ကူးစက်ရောဂါ ကြောက်သည်။
အစွဲကလည်း ကြီးသေးသည်။ သီလရှင်နှစ်ပါးလမ်းပေါ်တွေ့ရင် ဒါ ကံဆိုးတဲ့လက္ခဏာပဲ။ (တခါက သီလရှင်နှစ်ပါးရှိတဲ့လမ်းပေါ်မှာ သူစီးလာတဲ့တက္ကစီနှင့် အခြားတက္ကစီတစ်စင်း တိုက်ဖူးသည်။) နံ ပါတ်တွေ၊ နေ့တွေမှာ ကံကောင်း၊ ကံဆိုးရှိသည်။ အိမ်ထဲ ထီးဖွင့်မိတာ၊ ခုတင်ပေါ် ယောက်ျားဦးထုပ်တင်ထားမိတာတွေက ကံဆိုးမယ့် နိမိတ်လက္ခဏာတွေ။ ကြောင်မည်းမည်းကျတော့ သူ့အတွက် ကံကောင်းတဲ့ နိမိတ်။ တခါ သူတို့အိမ် ဘိခ်ျသွားလည်တုန်း နိုရာက သူ့ယောက်ျားလဲလျောင်းနေတဲ့အခန်းထဲ ကြောင်မည်းမည်းတစ်ကောင် ဝင်သွားအောင် ကြိုးစားနေတာတွေ့ရသည်။ ဇနီးသည်ရဲ့လုပ်ရပ် အောင်မြင်/မအောင်မြင်ကို ဂျွိုက်စ်က အခန်းထဲကနေ စိတ်ပူပင်စွာ စောင့်ကြည့်နေသည်။ သူ့နားမှာ ကြောင်တွေရှိတာ သဘောကျသည်။ တခါက သူ့သမီးရဲ့ကြောင်ပေါက်လေးတစ်ကောင် မီးဖိုချောင်ပြတင်းပေါက်ကနေ အောက်ပြုတ်ကျသွားသည်။ သူ့သမီးပြာသလောက် သူလည်း ပြာနေတာတွေ့ရသည်။
ခွေးကိုတော့ သူအလွန်ကြောက်သည်။ ခွေးဆိုရင် သူ့ကိုက်မယ်ချည်း ထင်နေတာ။ သူတို့စာအုပ်ဆိုင် ဂျွိုက်စ်ရောက်လာတိုင်း ဘိခ်ျက သူ့ခွေးဖြူလေးကို ခပ်မြန်မြန် အပြင်ထုတ်ထားရသည်။ ဟိုးမားရဲ့ယူးလီဆီးစ်ထဲက သြဒီးဆီးယပ်စ်တစ်ယောက် အိမ်ပြန်အရောက် သူ့ရဲ့အချစ်တော်ခွေးအားဂေါ့စ် အပျော်လွန်ပြီး ခေါက်ခနဲ သေသွားတဲ့အကြောင်း အစဖော်ပေးတော့လည်း သူ့ခွေးကြောက်စိတ်က ဘယ့်နှယ်မှမနေ။ 'ဂီးယား' ဟုမြည်တမ်းပြီး ရယ်ပဲရယ်နေသည်။
သူ့မှာ သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက်ရှိသည်။ ကလေးတစ်ကျိပ်လောက်ရချင်တာဟု ပြောဖူးသည်။ သူက အလုပ်ထဲပဲ အစဉ်တစိုက် နှစ်နေသူမဟုတ်။ သူဘယ်လောက် အလုပ်များနေနေ ကလေး နှစ်ယောက်ကို အချိန်ပေးတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သည်။ အသံကောင်းတဲ့ သားအတွက် သူဂုဏ်ယူသည်။ ဂျွိုက်စ်မိသားစုအားလုံး အဆိုကောင်းသူတွေ။ အဆိုတော်ဖြစ်ရမည့်အစား စာရေးဆရာဖြစ်ရတာ သူနောင်တရ မဆုံး။ အဆိုတော်လုပ်စားရရင် ဒီ့ထက် အလုပ်ဖြစ်မှာဟု ပြောတတ်သည်။ "ဟုတ်ချင်လည်း ဟုတ်မပေါ့။ ဒါပေမဲ့ စာရေးဆရာအဖြစ်လည်း အောင်မြင်နေတာပဲဟာ" ဟု ဘိခ်ျက သူ့ကိုတုံ့ပြန်သည်။
ယူးလီဆီးစ်ဝတ္ထုကို ၁၉၁၄ ခုမှာ သူ သန္ဓေစတည်သည်။ ၇ နှစ်ကျော်ကျော်ရေးပြီး ၁၉၂၁ အောက်တိုဘာလမှာ အဆုံးသတ်သည်။ သုံးလကြာကြာ ပရုဖ်ဖတ်သည်။ သူ့အသက် ၄၀ ပြည့်မွေးနေ့ (၁၉၂၂ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂ရက်) ရောက်ခါနီးမှ ပရုဖ်ဖတ်တာ ရပ်သည်။
သူ့စာ ပုံနှိပ်ရတဲ့သူတွေခမျာ သနားစရာကောင်းသည်။ သူ့စာအုပ်ကြောင့် သူတို့ပုံမှန် လုပ်နေကျအလုပ်တွေ ခဏခေါက်ထားရသည်။ သို့ပေမဲ့သူတို့က အားတက်သရော ကူကြသည်။ ဂျွိုက်စ် ပရုဖ်ဖတ်တာက စာကျစာန ပြင်တာ၊ အမှားပြင်တာထက် အသစ်ပြန်ရေးတာ ဖြစ်နေသည်။ ယူးလီဆီးစ်ကို တတိယအကြိမ် ပြန်ရေးတာဟု သူကပြောသည်။ စာရွက်ဘေးက ကွက်လပ်နေရာတွေမှာ စာသားအသစ်တွေ ထပ်ဖြည့်သည်။ သူဖြည့်ထားတဲ့စာတွေကို ညွှန်ပြဖို့ရာ ဒုံးပျံတွေ၊ ကြယ်ပွင့်တွေနှင့် တန်ဆာဆင်သည်။ စာပိုဒ်အသစ်တွေ နေရာယူလာတော့ စာမျက်နှာတွေကို ထပ်ခါထပ်ခါ ပြင်ရပြန်သည်။
သူ့စာကိုရိုက်ဖို့ စာစီစာရိုက်သူ ရှာရတာကလည်း တစ်ဒုက္ခ။ စာစီစာရိုက် ၉ ယောက် ကျော်သည်အထိ လက်ပြောင်းရတဲ့အခါရှိသည်။ ၈ ယောက်မြောက် စာစီစာရိုက် အမျိုးသမီးဆိုလျှင် သူ့စာရိုက်ရင်း စိတ်ညစ်လွန်း၍ ပြတင်းပေါက်က ခုန်ချဖို့အထိ ဖြစ်သွားသည်။ သူ့လက်ရေးကလည်း တော်ရုံလူဖတ်နိုင်သော လက်ရေးမျိုးမဟုတ်။ နောက်ပြဿနာတစ်ခုက အဖုံးကိစ္စ။ ဂျွိုက်စ်က သူ့စာအုပ်အဖုံးရောင်ကို ဂရိအလံတော်မှာပါတဲ့ အပြာရောင်မျိုး ဖြစ်စေ့ချင်တာ။ အဲဒီ အပြာရောင်စက္ကူ ရှာပုံတော်ဖွင့်ရပုံကလည်း စာတစ်ပုဒ် ဖွဲ့ရလောက်သည်။
ယူးလီဆီးစ် အစအဆုံး ဂျွိုက်စ်က ခဲတံနှင့်ရေးသည်။ (တချို့ရက်တွေမှာ ၁၇ နာရီကြာ ရေးသည်တဲ့။) သူ့ဝတ္ထုတွေအားလုံး လက်နှင့် ခဲတံနှင့်ပဲ ရေးသည်။ ပါရီရှိ စမစ်ဆိုင်ကရတဲ့ ခဲဆံမည်းမည်း ခပ်တုံးတုံးကို သုံးသည်။ ခဲတံက တစ်ရောင်တည်းမဟုတ်၊ ရောင်စုံ။ ဘယ်ခဲတံအရောင် သုံးပြီးရေးလျှင် ဘယ်အခန်းရေးနေတယ်ဆိုတာ သိအောင်လုပ်ထားတာ။ ဖောင်တိန်ကို သူ,မကိုင်တတ်။ တခါက ဖောင်တိန်မင်ဖြည့်ရင်း သူ့တစ်ကိုယ်လုံး မင်တွေပေစွန်းကုန်တာ ဘိခ်ျ တွေ့ဖူးသည်။ နောင် လက်နှိပ်စက်နှင့် စာရေးဖို့ သူစဉ်းစားသည်။ အသံတိတ် ရမင်တန်လက်နှိပ်စက် အကောင်းစားတစ်လုံး သူဝယ်ဖြစ်သွားသည်။ နောင်အသံထွက်တဲ့ လက်နှိပ်စက်နှင့် သူ့လက်နှိပ်စက် အလဲအထပ်လုပ်သည်။ ဘယ်လက်နှိပ်စက်ကိုမှ သူ,မသုံးဖြစ်ခဲ့။
ပါရီမှာနေရင်း မျက်စိရောဂါဟောင်း ပြန်ထသည်။ ရေတိမ်ရော၊ သူငယ်အိမ် ကြွက်သားရောင်တဲ့ ရောဂါရော။ သို့နှင့် မျက်စိရောဂါကုဖို့၊ ခွဲစိတ်ဖို့ မျက်စိပါရဂူ ဒေါက်တာဘော့ရ်ှဆေးခန်း တက်ရသည်။ ဘော့ရ်ှက ဂျွိုက်စ်ကို အလွန်အရေးပေးသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆေးကုသမှုပေးပြီး ဆေးဖိုးရှင်းတဲ့အချိန် တောင်းတဲ့ဆေးဖိုးက နည်းလွန်းလှသမို့ သူ့မှာ စော်ကားသလို ခံစားရကြောင်း ဂျွိုက်စ်က ပြောဖူးသည်။
ဆေးခန်းအပေါ်ထပ်မှာ ခုတင်နှစ်လုံးပါ အခန်းရှိသည်။ သူကခုတင်တစ်လုံးယူပြီး ကျန်ခုတင်ကို နိုရာယူသည်။ နိုရာမရှိလျှင် သူမနေတတ်။ ဆေးခန်းရဲ့တစ်ဦးသော သူနာပြုဆရာမ ခပ်ထွားထွားက လူနာတွေနှင့် အစပ်မတည့်တတ်သော်လည်း ဂျွိုက်စ်နှင့်ကျအမြဲ အဆင်ချောသည်။ သူက ဆရာမရဲ့အချစ်တော်လူနာ။ ဒီလိုဖြစ်ရတာကလည်း အဆန်းတကြယ် ကိစ္စမဟုတ်။ ဂျွိုက်စ်က ဘယ်တော့မှ မညည်းတတ်တဲ့ လူနာ။ ပြီးတော့ သူက သူတပါးအရိပ်အကဲ အလွန်သိတတ်သူ။
ဂျွိုက်စ်လို အာရုံခံစားမှုထက်မြက်သူအဖို့ မျက်စိရောဂါခံစားရတာ၊ ခွဲစိတ်တဲ့ဝေဒနာခံစားရတာ သူများထက် ပိုပိုသာသာဖြစ်မည်။ သို့ပေမဲ့ သူက ညည်းညူခြင်း၊ ဆူပူခြင်း၊ စိတ်တိုခြင်း မရှိ။ ခွဲပြီးစ မျက်လုံးပတ်တီးစီးထားပြီး အိပ်ရာထဲ နာရီပေါင်းများစွာ လဲလျောင်းနေရသော်လည်း သူ့မှာ စိတ်တိုတာ၊ အလိုမကျတာမျိုး မတွေ့ရ။ ပျင်းရိငြီးငွေ့ပုံလည်း မရ။ သူ့ခေါင်းထဲ သူ့အတွေးနှင့်သူ မွေ့လျော်နေတာဖြစ်မည်။ ဂျွိုက်စ်လို မကုန်နိုင်မခမ်းနိုင်လောက်အောင် ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိသူအဖို့ ငြီးငွေ့စရာအချိန် မရှိတာဖြစ်မည်။ ဒါ့ပြင် သူက မှတ်ဉာဏ်လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန်လုပ်သည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း။ ဒါ့ကြောင့် ကြားကြားသမျှ အရာအားလုံး သူ့မှတ်ဉာဏ်ထဲ စွဲမြဲသွားတာဟု ပြောဖူးသည်။
သူဆေးခန်းတက်နေတုန်း ဘိခ်ျသွားကြည့်တဲ့အခါ ကန်တော်ရှင်မ (Lady of the Lake) စာအုပ်ယူလာခဲ့ဖို့ ပြောသည်။ နောက်တစ်ကြိမ်သွားတော့ သူပြောတဲ့စာအုပ် ယူသွားသည်။ ဂျွိုက်စ်က
"ကြိုက်တဲ့စာမျက်နှာဖွင့်ပြီးတော့ စာတစ်ကြောင်းဖတ်ပြစမ်းပါ" ဟု ဘိခ်ျကို ခိုင်းသည်။ ဘိခ်ျဖတ် ပြီးပြီးချင်း အဲဒီစာမျက်နှာနှင့် နောက်စာမျက်နှာမှာပါတဲ့ စာပိုဒ်တွေအားလုံး သူအလွတ်ဆက်ရွတ်သည်။ သူရွတ်တာ အမှားတစ်လုံးမှမပါ။ ဘိခ်ျ သဘောပေါက်သွားသည်။ ဂျွိုက်စ်က ဒီစာအုပ်သာမက ကျန်တဲ့စကားပြေစာအုပ်တွေ၊ ကဗျာစာအုပ်တွေ တော်တော်များများ အာဂုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်မည်။ အသက်နှစ်ဆယ်မတိုင်မီ ဖတ်သင့်ဖတ်ရာတွေ အားလုံးလိုလိုဖတ်ပြီး သူ့ခေါင်းထဲ ထည့်ထားခဲ့ဟန်တူသည်။ နောင်တစ်ချိန် သူ အကိုးအကားရှာချင်ရင် စာအုပ်ထ ရှာစရာ၊ စာအုပ်ထ လှန်စရာမလိုတော့ပြီ။
ဂျိမ်းစ်ဂျွိုက်စ်က စကားလုံးသမား။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားက ဝေါဟာရကြွယ်ဝလွန်းလို့ စကားလုံးအသစ် ထွင်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ တစ်နိုင်ငံတည်းသား စာရေးဆရာကြီး ဘားနတ်ရှော၏ အဆိုအမိန့်ကို သူ သဘောမတူ။ သူက စကားလုံးထွင်ရတာ၊ ကုလားဖန်ထိုးရတာ ပျော်သည်။ ဘာသာစကားကို ဟိုစည်းကမ်း ဒီစည်းကမ်းတွေနှင့် ကန့်သတ်ထားတာ၊ ချုပ်နှောင်ထားတာ သူလက်မခံ။ စကားလုံးအပေါ် ခံစားမှုမည်မျှပြင်းပြပုံကို လူငယ်အနုပညာသမားတစ်ဦးရဲ့ရုပ်ပုံလွှာမှာ သို့ကလို ရေးသည်။ "သူ တိတ်တိတ်လေး ငိုချင်တယ်။ သူ့အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ စကားလုံးတွေအတွက်ပါ။ ဂီတလိုလှပတဲ့ ကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့ စကားလုံးတွေအတွက် သူငိုချင်တာ။"
ယူးလီဆီးစ်ထွက်ပြီး ၁၇ နှစ်အကြာ ၁၉၃၉ ခုမှာ ဖင်နီဂန်းစ်ဝိတ်ခ် ထွက်လာသည်။ ဒီစာအုပ်ကလည်း ဘာသာစကား စမ်းသပ်ထားတာတွေပါသည်။ ဖတ်ရတာ အလွန်ခက်သည်။ တစ်စုံတစ်ဦးက အိုင်းရစ်လေနှင့်ဖတ်ပြလျှင်တော့ နားထောင်ရတာ အင်မတန်အရသာရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ဒီဝတ္ထုအကြောင်း ဂျွိုက်စ်ကိုမေးကြည့်တော့ သူက အခုလိုဖြေသည်။
"ဒီထဲမှာ အသိခက်တဲ့ပုစ္ဆာတွေ၊ ပဟေဠိတွေ တပုံကြီးထည့်ထားတယ်။ ကျွန်တော်ဘာဆိုလိုချင်မှန်း ပါမောက္ခတွေ နှစ်ပေါင်းရာချီပြီး ဆက်ငြင်းလို့ရအောင် လုပ်ထားတာ။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက် ထာဝရအသက်ရှင်အောင်လုပ်လို့ရတာ ဒီနည်းပဲ ရှိတာကိုး။"
ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ ဘဝတလျှောက်လုံးလိုလို လှည့်ပတ်နေထိုင်သွားခဲ့တဲ့ ဂျိမ်းစ်ဂျွိုက်စ်ရဲ့ နှလုံးသားက ဘယ်နေရာရှိပါလိမ့်။ သိချင်ရင် သူ့ ပေးစာထဲက စာတစ်ကြောင်း ဖတ်ကြည့်ရုံ။
"ငါသေတဲ့အခါ ငါ့နှလုံးသားပေါ်မှာ ဒဗ္ဗလင် ဆိုတဲ့စာလုံး ရေးထိုးထားလိမ့်မယ်။"
ဂျိမ်းစ်ဂျွိုက်စ်အကြောင်း ဖတ်တဲ့အခါ ဆရာဒဂုန်တာရာကို ပြေးသတိရမိ။ ဘားနတ်ရှောနှင့် ဂျွိုက်စ်အကြောင်း ဖတ်ရတဲ့အခါ ဆရာဦးသိန်းဖေမြင့်နှင့် ဆရာတာရာ ခေါင်းထဲဝင်လာ။ သူတို့ကိုလွမ်းလို့ ရေးတာ။
Posted by Alex Aung at 10:10 AM No comments:
Labels: Biography, ဆောင်းပါး
မွနျမာလို အဓိပ်ပါယျကတော့ လူတဈဦးတဈယောကျကို လိငျပိုငျးဆိုငျရာ လှုံ့ဆျောမှုအတှကျ အသုံးခစြရာ အရာဝတ်ထုတဈခုလို သဘောထား ဆကျဆံတာမြိုးကို ချေါတာပါ။
ခပျဟော့ဟော့ ဝတျစားတတျတဲ့ နာမညျကြျော မငျးသမီးကို ဆိုငျဖှငျ့ပှဲ ဖိတျတယျ။ ဒီအတိုငျး မငျးသမီးတဈလကျကို ပှဲတကျဖို့ ဖိတျတာမြိုး မဟုတျဘဲ ဘယျလို ဝတျလာပေးရငျ ဈေးပိုပေးမယျ ဆိုတာ ဒီသဘောပါပဲ။ ကားဘကျထရီ ကွျောငွာတှမှော Sexy model တှေ သုံးတာ၊ Hip Hop MTV တှမှော အတိုအပွတျ ဝတျထားတဲ့ မိနျးကလေးတှေ အမြားကွီးနဲ့ ရိုကျပွတာ၊ ဓါတျမွသွေဇာကွျောငွာကို Sexy မငျးသမီး ၃ လကျနဲ့ ကွျောငွာတာ၊ ဒါတှဟောလညျး Sexual objectification လုပျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
တကယျတော့ ဒီလိုလုပျရပျမြိုးတှကေ ကမ်ဘာမှာလညျး ရှိပါတယျ။ ဥပမာ ကားမောငျးပွိုငျပှဲတှမှော ပှဲစဖို့ အလံထောငျတဲ့ မိနျးကလေးတှေ၊ လကျဝှပွေို့ငျပှဲတှမှော ဘယျနှခြီမွောကျ ရောကျပွီ ဆိုတာကို ဆိုငျးဘုတျထောငျပွတဲ့ Ring girl တှေ စသဖွငျ့ တှဖေူ့းကွမှာပါ။ ယူနီဆကျဖျက ကိုးကားထားတဲ့ လလေ့ာခကျြတဈခုမှာတော့ အမြိုးသားမဂ်ဂဇငျးတှမှော ပါတဲ့ ကွျောငွာတှရေဲ့ ၇၆ % မှာ အမြိုးသမီးတှကေို အဲ့လို Sexual object အဖွဈ ဖျောပွထားကွတယျလို့ သိရပါတယျ။
နောကျပွီး ဒီလိုပုံဖျောတာက အမြိုးသမီးတှတေငျ မဟုတျပါဘူး။ အမြိုးသားတှကေိုလညျး ပုံဖျောကွပါတယျ။ ဒါကို MTV တှေ၊ ကွျောငွာတှမှော တှနေို့ငျပါတယျ။ ဗလတောငျ့တောငျ့၊ Six packs နဲ့ အမြိုးသားတဈယောကျကို မဆီမဆိုငျ ထညျ့ရိုကျပွတာမြိုးပေါ့။ နောကျ အမြိုးသားခငျြး ခဈြကွိုကျသူတှကေို ရညျရှယျတဲ့ ကွျောငွာမြိုးတှမှောလညျး အဲ့လို Sexual object အနနေဲ့ သဘောထား ခံနရေပါတယျ။ အမြိုးသမီးနဲ့ ယှဉျလိုကျရငျတော့ နညျးကောငျးနညျးမယျပေါ့။ ဒါကွောငျ့ အမြိုးသမီးနဲ့ ပတျသကျတာကို ဆကျပွီး ရေးသှားပါ့မယျ။
(တဈလကျစတညျး ရှငျးပွခငျြတာက မိနျးကလေးတဈယောကျ ခန်ဓာကိုယျ အခြိုးအစား လှတာကို ပွသတိုငျး၊ ယောကျြားလေးတဈယောကျ သူ့ဗလကိုသူ ပွတိုငျး Sexual objectification မဟုတျဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဟိုတလောက ရပေနျးစားသှားတဲ့ ဖိနပျကွျောငွာနဲ့ နမူနာပေးရရငျ ဒီမိနျးကလေးဟာ သူ့အလှကို ပျေါလှငျစမေဲ့ ဝတျစားဆငျယငျမှုမြိုး လုပျလို့ရတယျ။ မငျးသမီးအနနေဲ့ ကပွ၊ သရုပျဆောငျပွလို့ ရတယျ။ သို့သျော သူ့ရငျသားဟာ ကွျောငွာတဈခုလုံးရဲ့ အဓိက အာရုံစိုကျစရာ ဖွဈနရေငျတော့ Sexual objectification ဖွဈပါတယျ။)
ဒီလို လုပျရပျတှကွေောငျ့ ဘာဆကျဖွဈလာသလဲဆို အရငျဆုံးအနနေဲ့ လူတဈယောကျ၊ အထူးသဖွငျ့ မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာ၊ လူရာဝငျမှု၊ အောငျမွငျမှုတှဟော ဒီလိုခန်ဓာကိုယျ လှပမှုအပျေါမှာ မူတညျတယျ ဆိုတဲ့ အမွငျတှေ ရကုနျပါတယျ။ ဒီမငျးသမီးဟာ သရုပျဆောငျ ကောငျးစရာ မလိုဘူး။ ဒီလိုဝတျစားတတျရငျ၊ ဝတျစားရဲရငျ ရပွီ ဆိုတာမြိုးပေါ့။ အဲ့တော့ အနုပညာဝမျးစာ ဖွညျ့ဖို့ထကျ ခန်ဓာကိုယျက လိငျဆှဲဆောငျမှု ရှိဖို့ကိုပဲ ကွိုးစားကွတော့တယျ။ ခှဲစိတျပွုပွငျကွတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျ ပုံပနျးသှငျပွငျနဲ့ ပတျသကျလို့ ရှကျရှံ့တာ၊ သိမျငယျတာတှေ ဖွဈလာကွတယျ။
နောကျပွီး အမြိုးသမီးတှအေပျေါမှာ အထငျသေးတဲ့ အမွငျတှေ ရှိလာတယျ။ လိငျဖြျောဖွမှေုအတှကျပဲလို့ မွငျလာကွတယျ။ ဒီကနမှေတဈဆငျ့ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ထိပါးနှောငျ့ယှကျတာ၊ အကွမျးဖကျတာတှေ ဖွဈလာတယျ။ ဒါကိုလညျး သာမနျလုပျရပျတဈခုလိုပဲ ယူဆနကွေတယျ။ အဆိုးဆုံးကတော့ Self-objectification လို့ချေါတဲ့၊ အမြိုးသမီးတှကေိုယျတိုငျက သူတို့ကိုယျသူတို့ အဲ့လိုသဘောထားလာကွတာပဲ။
ခုနက ဆိုငျဖှငျ့ပှဲတကျတဲ့ မငျးသမီးကို ဒီအကွောငျး ပွောပွကွညျ့ပါလား။ ဘာပွနျပွောမယျ ထငျသလဲ။ ငါ့အလှနဲ့ငါ ပိုကျဆံရှာနတော နငျ့အပူပါလားလို့ ပွနျဖွမှောပေါ့။ ပိုလညျး ဝငျငှရေတယျ။ ပိုလညျး နာမညျကွီးတယျ။ ပိုလညျး အောငျမွငျတယျ။ ငါ့ကို စျောကားနပေါလားလို့လညျး မခံယူဘူး။
ဖိနပျကွျောငွာ ရိုကျလိုကျတဲ့ မိနျးကလေးနရောကနလေညျး စဉျးစားကွညျ့ရအောငျ။ သူဆို မကျြနှာသဈ သရုပျဆောငျလို့ ပွောလို့ ရတယျ။ အခုနေ သူနာမညျကွီးပွီလို့မြား တှေးနမေလား။ နောကျထပျမြား ဒီလိုထပျရိုကျဖို့ ကွုံလာမယျဆိုရငျရော ငွငျးမလား။
ဆိုပါစို့၊ ဒါရိုကျတာတဈယောကျက လာကမျးလှမျးတဲ့အခါ ဒီသရုပျဆောငျက ငွငျးမယျ။ ကြှနျမ ဒါမြိုး မရိုကျနိုငျဘူး။ ဒါရိုကျတာက ဘာပွနျပွောမယျ ထငျသလဲ။ သွျော အိုခပေေါ့ ဆိုပွီး နောကျတဈယောကျ သှားချေါမယျ။ ဟိုက လကျခံလိုကျမယျ။ နာမညျကွီးသှားမယျ။ ဆိုတော့ သူပဲ မရိုကျလိုကျရတာ အဖတျတငျမယျပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ Sexual objectification ဟာ မိနျးကလေးတှအေတှကျ အောငျမွငျဖို့ လမျးစ ဖွဈလာတော့တယျ။
ဒါကွောငျ့ ဒီလိုမြိုး ရိုကျတဲ့ မငျးသမီးတှေ၊ သရုပျဆောငျတှထေကျစာရငျ သူ့ကို ကမျးလှမျးတဲ့သူ၊ ဒါမြိုး ရိုကျဖို့ လုပျတဲ့သူကို ရှုံ့ခရြမယျ။ ဒါဖွငျ့ ဆကျစဉျးစားတော့ သူတို့ ဘာလို့ အဲ့လိုရိုကျလဲ။ ရှငျးပါတယျ။ ကွညျ့တဲ့သူ ရှိလို့ပေါ့။ နောကျပွီး ဆဲခံရလေ နာမညျကွီးလလေို့ ယူဆကွတဲ့ ခတျေကွီးလညျး ဖွဈနပွေနျတယျလေ။
ဒါဆို ကြှနျတျောတို့ ဘာလုပျမလဲ။ မကွညျ့နဲ့ပေါ့။ အားမပေးနဲ့ပေ့ါ။ ဒီလိုရိုကျထားတဲ့ ကုနျပစ်စညျးဆို မဝယျဘူး။ ဒီလိုကွျောငွာထားတဲ့ ဆိုငျဆို အားမပေးဘူး။ ဒါမြိုးတှသော လုပျကွမယျဆိုရငျ ဘယျရိုကျတော့မလဲ။
ဒါကလညျး ပွောတော့သာ လှယျတာ။ Sexual objectification ကို ပုံမှနျလိုပဲ ယူဆနကွေသူတှကေ တဈပုံကွီးမို့လား။ အမြားစုကလညျး တကျသဈစကိုသာ ဆဲနကွေတာ။ နာမညျကြျော မငျးသမီးဆိုရငျတော့ အားပေးကွတာကိုး။
ဆိုတော့ ဒီယဉျကြေးမှုကွီးက ကာလတဈခုထိတော့ ရှိနဦေးမှာပဲ။ Demand ရှိရငျ ကွျောငွာခငျြတဲ့သူ ရှိမယျ။ ရိုကျခငျြတဲ့သူ ရှိမယျ။ ဒီအခါ တကျသဈစတှေ၊ ငှကွေေးလိုအပျနသေူတှေ၊ ဝမျးစာမပွညျ့သူတှေ၊ တဈနညျးအားဖွငျ့ ငွငျးဆနျတောငျ့ခံနိုငျစှမျး မရှိသူတှဟော ဒါတှကေို လုပျနကွေရဦးမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီကိစ်စတှနေဲ့ ပတျသကျရငျ ကြှနျတျောတို့အားလုံးမှာ တာဝနျရှိတယျ ဆိုတာကို သိစခေငျြတယျ။
နောကျတဈခု ထပျစဉျးစားကွညျ့မယျ။ ကားဘကျထရီပဲ ဆိုပါတော့။ အကုနျလုံးက အဲ့လိုမြိုးတှေ ကွျောငွာထားကွတယျဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့က ငွငျးမယျဆို ဘယျလိုငွငျးမလဲ။ ကားမစီးဘဲ နရေတော့မလို ဖွဈနပွေီပေါ့။ ဒီတော့ လုပျငနျးရှငျတှဘေကျကလညျး ဒါမြိုး မလုပျတော့ဖို့၊ ဝယျသူတှဘေကျကလညျး ဒါမြိုး မကွျောငွာတဲ့သူကို ပိုအားပေးဖို့ စသဖွငျ့ အပွနျအလှနျ တာဝနျလေးတှေ ရှိလာတယျ။
ဒီနရောမှာ Women empowerment ဆိုတဲ့ ကိစ်စကိုလညျး ခနျြထားခဲ့လို့ မရပွနျဘူး။ တကယျတော့ Women empowerment ဆိုတာ အမြိုးသမီးတှကေို စှမျးရညျမွှငျ့ပေးတာ မဟုတျဘူး။ စှမျးရညျက ရှိပွီးသား။ သူတို့ကို လုပျပိုငျခှငျ့ပေးတာ၊ တနျးတူညီမြှခှငျ့ ပေးတာ၊ အလှအပထကျ၊ လိငျဆှဲဆောငျမှုထကျ အရညျအခငျြးနဲ့ ရပျတညျခှငျ့ကို ပေးတာကို ဆိုလိုတာပါ။
ဥပမာ အမြိုးသမီးတဈယောကျကို ရာထူးတိုးပေးဖို့ အရညျအခငျြးနဲ့ မဆုံးဖွတျဘဲ လိငျကိစ်စနဲ့ ဆုံးဖွတျနမေယျ၊ ဒါကို အမြိုးသမီးက မလိုကျလြောဘူးဆိုရငျ ရာထူးမတိုးပေးဘဲ နမေယျ။ တကျသဈစ မငျးသမီးတှကေို သရုပျဆောငျပညာ၊ အနုပညာဝမျးစာနဲ့ မရှေးဘဲ ဒါရိုကျတာ၊ သို့မဟုတျ ထုတျလုပျသူရဲ့ ဆန်ဒကို ဘယျလောကျ ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျသလဲ ဆိုတာနဲ့ တိုငျးတာပွီး စငျတငျပေးနမေယျဆိုရငျ အမြိုးသမီးတှအေနနေဲ့ အရညျအခငျြးကို အသုံးခပြွီး ရှငျသနျနိုငျဖို့ရာ ခကျသှားပါတယျ။ Sexual object လို့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သဘောထားနိုငျသူက ကနျြခဲ့မယျ။ မထားနိုငျသူက ဒီလောကထဲက ထှကျသှားရမယျ ဆိုတာမြိုး ဖွဈလာပါတယျ။
ဒါကွောငျ့လညျး အမြိုးသမီးတှေ ခေါငျးဆောငျနရော ရဖို့ လိုတယျ ပွောတာပါ။ ခုနက ပွောတဲ့ ဥပမာတှမှော အထကျလူကွီးက အမြိုးသမီး ဖွဈခဲ့မယျ၊ ဒါရိုကျတာ သို့မဟုတျ ထုတျလုပျသူကသာ အမြိုးသမီး ဖွဈခဲ့မယျဆို ဒီပွဿနာ နညျးသှားနိုငျတယျ။ တိုငျးဒသေကွီး ဝနျကွီးခြုပျသာ အမြိုးသမီး ဖွဈခဲ့မယျ ဆိုပါတော့။ အဲ့လို Sexual object အနနေဲ့ သုံးထားတဲ့ Billboard ကွျောငွာဆို လုံးဝခှငျ့မပွုဘူးလို့ လုပျလိုကျရငျ ဘယျသူမှ ကွျောငွာလို့ မရတော့ဘူး။ ဒီအတှကျ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ အရေးကိစ်စကို ပိုပွီး အာရုံစိုကျနိုငျစခေငျြတယျဆိုရငျ အမြိုးသမီးတှေ နရောပိုရဖို့ လိုပါတယျ။
ပွောရရငျတော့ Sexual objectification ဆိုတဲ့ ကိစ်စဟာ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ယဉျကြေးမှု၊ ကြားမခှဲခွားဆကျဆံမှု၊ ကငျြ့ဝတျ၊ Women empowerment စသဖွငျ့ အခကျြအလကျပေါငျး မွောကျမြားစှာနဲ့ ဆကျစပျနပေါတယျ။ အမြိုးသမီးတှကေို Sexual object လို သဘောမထားနဲ့ ဆိုတဲ့ တဈခှနျးတညျးနဲ့ ပွီးသှားမှာ မဟုတျဘဲ သူတို့အတှကျ ရငျသားနဲ့ တငျပါးထကျ ဦးနှောကျနဲ့ အရညျအခငျြးကို ပိုအသုံးခခြှငျ့ရတဲ့ ဝနျးကငျြကောငျးတဈရပျ တညျဆောကျပေးနိုငျမှသာ ပပြောကျသှားမယျလို့ ထငျပါတယျ။ ဒီအတှကျ ကြှနျတျောတို့အားလုံးမှာ တာဝနျရှိတယျ ဆိုတာကိုတော့ သိစခေငျြပါတယျ။
(လကျရှိအခြိနျနှငျ့ ကိုကျအောငျ ဆောငျးပါးကို အနညျးငယျ တညျးဖွတျထားပါသညျ။)
Ref: Sexual Objectification of Women: Advances to Theory and Research: Dawn M. Szymanski, Lauren B. Moffitt and Erika R. Carr
မြန်မာလို အဓိပ္ပါယ်ကတော့ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုံ့ဆော်မှုအတွက် အသုံးချစရာ အရာဝတ္ထုတစ်ခုလို သဘောထား ဆက်ဆံတာမျိုးကို ခေါ်တာပါ။
ခပ်ဟော့ဟော့ ဝတ်စားတတ်တဲ့ နာမည်ကျော် မင်းသမီးကို ဆိုင်ဖွင့်ပွဲ ဖိတ်တယ်။ ဒီအတိုင်း မင်းသမီးတစ်လက်ကို ပွဲတက်ဖို့ ဖိတ်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ဘယ်လို ဝတ်လာပေးရင် ဈေးပိုပေးမယ် ဆိုတာ ဒီသဘောပါပဲ။ ကားဘက်ထရီ ကြော်ငြာတွေမှာ Sexy model တွေ သုံးတာ၊ Hip Hop MTV တွေမှာ အတိုအပြတ် ဝတ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေ အများကြီးနဲ့ ရိုက်ပြတာ၊ ဓါတ်မြေသြဇာကြော်ငြာကို Sexy မင်းသမီး ၃ လက်နဲ့ ကြော်ငြာတာ၊ ဒါတွေဟာလည်း Sexual objectification လုပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုးတွေက ကမ္ဘာမှာလည်း ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ကားမောင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပွဲစဖို့ အလံထောင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ၊ လက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဘယ်နှချီမြောက် ရောက်ပြီ ဆိုတာကို ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ပြတဲ့ Ring girl တွေ စသဖြင့် တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ယူနီဆက်ဖ်က ကိုးကားထားတဲ့ လေ့လာချက်တစ်ခုမှာတော့ အမျိုးသားမဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ပါတဲ့ ကြော်ငြာတွေရဲ့ ၇၆ % မှာ အမျိုးသမီးတွေကို အဲ့လို Sexual object အဖြစ် ဖော်ပြထားကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နောက်ပြီး ဒီလိုပုံဖော်တာက အမျိုးသမီးတွေတင် မဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသားတွေကိုလည်း ပုံဖော်ကြပါတယ်။ ဒါကို MTV တွေ၊ ကြော်ငြာတွေမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဗလတောင့်တောင့်၊ Six packs နဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ကို မဆီမဆိုင် ထည့်ရိုက်ပြတာမျိုးပေါ့။ နောက် အမျိုးသားချင်း ချစ်ကြိုက်သူတွေကို ရည်ရွယ်တဲ့ ကြော်ငြာမျိုးတွေမှာလည်း အဲ့လို Sexual object အနေနဲ့ သဘောထား ခံနေရပါတယ်။ အမျိုးသမီးနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင်တော့ နည်းကောင်းနည်းမယ်ပေါ့။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးနဲ့ ပတ်သက်တာကို ဆက်ပြီး ရေးသွားပါ့မယ်။
(တစ်လက်စတည်း ရှင်းပြချင်တာက မိန်းကလေးတစ်ယောက် ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစား လှတာကို ပြသတိုင်း၊ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် သူ့ဗလကိုသူ ပြတိုင်း Sexual objectification မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဟိုတ​လောက ​ရေပန်းစားသွားတဲ့ ဖိနပ်ကြော်ငြာနဲ့ နမူနာပေးရရင် ဒီမိန်းကလေးဟာ သူ့အလှကို ပေါ်လွင်စေမဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုမျိုး လုပ်လို့ရတယ်။ မင်းသမီးအနေနဲ့ ကပြ၊ သရုပ်ဆောင်ပြလို့ ရတယ်။ သို့သော် သူ့ရင်သားဟာ ကြော်ငြာတစ်ခုလုံးရဲ့ အဓိက အာရုံစိုက်စရာ ဖြစ်နေရင်တော့ Sexual objectification ဖြစ်ပါတယ်။)
ဒီလို လုပ်ရပ်တွေကြောင့် ဘာဆက်ဖြစ်လာသလဲဆို အရင်ဆုံးအနေနဲ့ လူတစ်ယောက်၊ အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ လူရာဝင်မှု၊ အောင်မြင်မှုတွေဟာ ဒီလိုခန္ဓာကိုယ် လှပမှုအပေါ်မှာ မူတည်တယ် ဆိုတဲ့ အမြင်တွေ ရကုန်ပါတယ်။ ဒီမင်းသမီးဟာ သရုပ်ဆောင် ကောင်းစရာ မလိုဘူး။ ဒီလိုဝတ်စားတတ်ရင်၊ ဝတ်စားရဲရင် ရပြီ ဆိုတာမျိုးပေါ့။ အဲ့တော့ အနုပညာဝမ်းစာ ဖြည့်ဖို့ထက် ခန္ဓာကိုယ်က လိင်ဆွဲဆောင်မှု ရှိဖို့ကိုပဲ ကြိုးစားကြတော့တယ်။ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ကြတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ပုံပန်းသွင်ပြင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှက်ရွံ့တာ၊ သိမ်ငယ်တာတွေ ဖြစ်လာကြတယ်။
နောက်ပြီး အမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာ အထင်သေးတဲ့ အမြင်တွေ ရှိလာတယ်။ လိင်ဖျော်ဖြေမှုအတွက်ပဲလို့ မြင်လာကြတယ်။ ဒီကနေမှတစ်ဆင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောင့်ယှက်တာ၊ အကြမ်းဖက်တာတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ဒါကိုလည်း သာမန်လုပ်ရပ်တစ်ခုလိုပဲ ယူဆနေကြတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ Self-objectification လို့ခေါ်တဲ့၊ အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်က သူတို့ကိုယ်သူတို့ အဲ့လိုသဘောထားလာကြတာပဲ။
ခုနက ဆိုင်ဖွင့်ပွဲတက်တဲ့ မင်းသမီးကို ဒီအကြောင်း ပြောပြကြည့်ပါလား။ ဘာပြန်ပြောမယ် ထင်သလဲ။ ငါ့အလှနဲ့ငါ ပိုက်ဆံရှာနေတာ နင့်အပူပါလားလို့ ပြန်ဖြေမှာပေါ့။ ပိုလည်း ဝင်ငွေရတယ်။ ပိုလည်း နာမည်ကြီးတယ်။ ပိုလည်း အောင်မြင်တယ်။ ငါ့ကို စော်ကားနေပါလားလို့လည်း မခံယူဘူး။
ဖိနပ်ကြော်ငြာ ရိုက်လိုက်တဲ့ မိန်းကလေးနေရာကနေလည်း စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ သူဆို မျက်နှာသစ် သရုပ်ဆောင်လို့ ပြောလို့ ရတယ်။ အခုနေ သူနာမည်ကြီးပြီလို့များ တွေးနေမလား။ နောက်ထပ်များ ဒီလိုထပ်ရိုက်ဖို့ ကြုံလာမယ်ဆိုရင်ရော ငြင်းမလား။
ဆိုပါစို့၊ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်က လာကမ်းလှမ်းတဲ့အခါ ဒီသရုပ်ဆောင်က ငြင်းမယ်။ ကျွန်မ ဒါမျိုး မရိုက်နိုင်ဘူး။ ဒါရိုက်တာက ဘာပြန်ပြောမယ် ထင်သလဲ။ သြော် အိုခေပေါ့ ဆိုပြီး နောက်တစ်ယောက် သွားခေါ်မယ်။ ဟိုက လက်ခံလိုက်မယ်။ နာမည်ကြီးသွားမယ်။ ဆိုတော့ သူပဲ မရိုက်လိုက်ရတာ အဖတ်တင်မယ်ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ Sexual objectification ဟာ မိန်းကလေးတွေအတွက် အောင်မြင်ဖို့ လမ်းစ ဖြစ်လာတော့တယ်။
ဒါကြောင့် ဒီလိုမျိုး ရိုက်တဲ့ မင်းသမီးတွေ၊ သရုပ်ဆောင်တွေထက်စာရင် သူ့ကို ကမ်းလှမ်းတဲ့သူ၊ ဒါမျိုး ရိုက်ဖို့ လုပ်တဲ့သူကို ရှုံ့ချရမယ်။ ဒါဖြင့် ဆက်စဉ်းစားတော့ သူတို့ ဘာလို့ အဲ့လိုရိုက်လဲ။ ရှင်းပါတယ်။ ကြည့်တဲ့သူ ရှိလို့ပေါ့။ နောက်ပြီး ဆဲခံရလေ နာမည်ကြီးလေလို့ ယူဆကြတဲ့ ခေတ်ကြီးလည်း ဖြစ်နေပြန်တယ်လေ။
ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်မလဲ။ မကြည့်နဲ့ပေါ့။ အားမပေးနဲ့ပေ့ါ။ ဒီလိုရိုက်ထားတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းဆို မဝယ်ဘူး။ ဒီလိုကြော်ငြာထားတဲ့ ဆိုင်ဆို အားမပေးဘူး။ ဒါမျိုးတွေသာ လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် ဘယ်ရိုက်တော့မလဲ။
ဒါကလည်း ပြောတော့သာ လွယ်တာ။ Sexual objectification ကို ပုံမှန်လိုပဲ ယူဆနေကြသူတွေက တစ်ပုံကြီးမို့လား။ အများစုကလည်း တက်သစ်စကိုသာ ဆဲနေကြတာ။ နာမည်ကျော် မင်းသမီးဆိုရင်တော့ အားပေးကြတာကိုး။
ဆိုတော့ ဒီယဉ်ကျေးမှုကြီးက ကာလတစ်ခုထိတော့ ရှိနေဦးမှာပဲ။ Demand ရှိရင် ကြော်ငြာချင်တဲ့သူ ရှိမယ်။ ရိုက်ချင်တဲ့သူ ရှိမယ်။ ဒီအခါ တက်သစ်စတွေ၊ ငွေကြေးလိုအပ်နေသူတွေ၊ ဝမ်းစာမပြည့်သူတွေ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ငြင်းဆန်တောင့်ခံနိုင်စွမ်း မရှိသူတွေဟာ ဒါတွေကို လုပ်နေကြရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိတယ် ဆိုတာကို သိစေချင်တယ်။
နောက်တစ်ခု ထပ်စဉ်းစားကြည့်မယ်။ ကားဘက်ထရီပဲ ဆိုပါတော့။ အကုန်လုံးက အဲ့လိုမျိုးတွေ ကြော်ငြာထားကြတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က ငြင်းမယ်ဆို ဘယ်လိုငြင်းမလဲ။ ကားမစီးဘဲ နေရတော့မလို ဖြစ်နေပြီပေါ့။ ဒီတော့ လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကလည်း ဒါမျိုး မလုပ်တော့ဖို့၊ ဝယ်သူတွေဘက်ကလည်း ဒါမျိုး မကြော်ငြာတဲ့သူကို ပိုအားပေးဖို့ စသဖြင့် အပြန်အလှန် တာဝန်လေးတွေ ရှိလာတယ်။
ဒီနေရာမှာ Women empowerment ဆိုတဲ့ ကိစ္စကိုလည်း ချန်ထားခဲ့လို့ မရပြန်ဘူး။ တကယ်တော့ Women empowerment ဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေကို စွမ်းရည်မြှင့်ပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ စွမ်းရည်က ရှိပြီးသား။ သူတို့ကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတာ၊ တန်းတူညီမျှခွင့် ပေးတာ၊ အလှအပထက်၊ လိင်ဆွဲဆောင်မှုထက် အရည်အချင်းနဲ့ ရပ်တည်ခွင့်ကို ပေးတာကို ဆိုလိုတာပါ။
ဥပမာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ရာထူးတိုးပေးဖို့ အရည်အချင်းနဲ့ မဆုံးဖြတ်ဘဲ လိင်ကိစ္စနဲ့ ဆုံးဖြတ်နေမယ်၊ ဒါကို အမျိုးသမီးက မလိုက်လျောဘူးဆိုရင် ရာထူးမတိုးပေးဘဲ နေမယ်။ တက်သစ်စ မင်းသမီးတွေကို သရုပ်ဆောင်ပညာ၊ အနုပညာဝမ်းစာနဲ့ မရွေးဘဲ ဒါရိုက်တာ၊ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူရဲ့ ဆန္ဒကို ဘယ်လောက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သလဲ ဆိုတာနဲ့ တိုင်းတာပြီး စင်တင်ပေးနေမယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ အရည်အချင်းကို အသုံးချပြီး ရှင်သန်နိုင်ဖို့ရာ ခက်သွားပါတယ်။ Sexual object လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သဘောထားနိုင်သူက ကျန်ခဲ့မယ်။ မထားနိုင်သူက ဒီလောကထဲက ထွက်သွားရမယ် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း အမျိုးသမီးတွေ ခေါင်းဆောင်နေရာ ရဖို့ လိုတယ် ပြောတာပါ။ ခုနက ပြောတဲ့ ဥပမာတွေမှာ အထက်လူကြီးက အမျိုးသမီး ဖြစ်ခဲ့မယ်၊ ဒါရိုက်တာ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူကသာ အမျိုးသမီး ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆို ဒီပြဿနာ နည်းသွားနိုင်တယ်။ တိုင်း​ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်သာ အမျိုးသမီး ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုပါတော့။ အဲ့လို Sexual object အနေနဲ့ သုံးထားတဲ့ Billboard ကြော်ငြာဆို လုံးဝခွင့်မပြုဘူးလို့ လုပ်လိုက်ရင် ဘယ်သူမှ ကြော်ငြာလို့ မရတော့ဘူး။ ဒီအတွက် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အရေးကိစ္စကို ပိုပြီး အာရုံစိုက်နိုင်စေချင်တယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေ နေရာပိုရဖို့ လိုပါတယ်။
ပြောရရင်တော့ Sexual objectification ဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကျားမခွဲခြားဆက်ဆံမှု၊ ကျင့်ဝတ်၊ Women empowerment စသဖြင့် အချက်အလက်ပေါင်း မြောက်များစွာနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကို Sexual object လို သဘောမထားနဲ့ ဆိုတဲ့ တစ်ခွန်းတည်းနဲ့ ပြီးသွားမှာ မဟုတ်ဘဲ သူတို့အတွက် ရင်သားနဲ့ တင်ပါးထက် ဦးနှောက်နဲ့ အရည်အချင်းကို ပိုအသုံးချခွင့်ရတဲ့ ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ရပ် တည်ဆောက်ပေးနိုင်မှသာ ပပျောက်သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိတယ် ဆိုတာကိုတော့ သိစေချင်ပါတယ်။
(​လက်ရှိအချိန်နှင့် ကိုက်​အောင် ဆောင်းပါးကို အနည်းငယ် တည်းဖြတ်ထားပါသည်။)
Posted by Alex Aung at 12:00 PM No comments:
EBoy Fashion အကွောငျး
လကျတှဘေ့ဝထကျ ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါမှာ ပိုရပေနျးစားတဲ့ EBoy Fashion အကွောငျး
ဖကျရှငျစတိုငျတှထေဲမှာမှ EBoy စတိုငျဆိုတာ ခုဆယျကြျောသကျလူငယျတှကွေားမှာ နောကျဆုံးခတျေစားနတေဲ့ ဖကျရှငျစတိုငျတဈခု ဖွဈပွီး ဒီ trend က TikTok ကနစေခဲ့တာပါ။ EBoy Look ဟာလူတိုငျးနဲ့အဆငျမပွနေိုငျပမေယျ့ Eboy style ထဲက ကိုယျသဘောကတြဲ့ Fashion Element တှနေဲ့ ကိုယျအမွဲဝတျနကြေ အဝတျအစားတဈခြို့နဲ့ ပေါငျးစပျတှဲခလြိုကျတဲ့အခါ Internet Style Icon တဈခွုဖွဈသှားတဲ့သဘောပါပဲ။
EBoy Style ဟာ Edgy တို့ Alternative ဘကျရောကျတယျလို့ဆိုနိုငျသလို အဲဒါကိုမှ အပျေါမှာပွောသလို ဒီနခေ့တျေ Trendy ဖွဈနတေဲ့ အဝတျအစားဒီဇိုငျးတှနေဲ့ပေါငျးစပျပွီး ထူးခွားအောငျဆငျမွနျးလိုကျတာမြိုးပါပဲ။ ဒါ့အပွငျ Eboy Look တှဟော ၂၀၀၀ပွညျ့နှဈက Goths နဲ့ Punk ဂီတတှေ၊ ၉၀ပွညျ့နှဈက စကိတျယဉျကြေးမှုတှနေဲ့ Kpop မွူးဇဈတှရေဲ့ လှမျးမိုးမှုလညျး ရှိနပွေနျပါတယျ။
တကယျ့အပွငျလောကမှာထကျ အှနျလိုငျးနဲ့ ဆိုရှယျမီဒီယာတှပေျေါမှာ ခတျေစားလာခဲ့တဲ့ ဒီ Eboy Fashion မှာလညျး ထပျပွီးအမြိုးအစားခှဲထားတာရှိပါသေးတယျ။ အဲဒါကတော့ ကိုယျ့ outfit မှာ monochrome လို့ဆိုရမယျ့အနကျနဲ့ မီးခိုးတှေ၊ အဖွူ၊ အနကျစတာတှကေိုပဲ တှဲစပျဝတျဆငျထားတယျ။ Layer လုပျထားတယျဆိုရငျ သူ့ကို Soft-Boy Aesthetic ရယျလို့သတျမှတျပွီး အဖွူ အနကျအပွငျကိုမှ Outfit မှာ အနီတို့၊ နီယှနျကာလာအစိမျးမြိုးတှပေေါငျးစပျထညျ့ထားတာမြိုးဆိုရငျတော့ Cyber Goths ဆိုပွီးချေါကွပါ တယျ။
EBoy Outfit မှာ အမြားဆုံးတှရေ့တဲ့ clothing items တှကေတော့ တီရှပျလကျရှညျအစငျးတှေ၊ Sweatshirt ၊ turtle neck တှေ၊ ရှကွေ့ယျသီးတပျရှပျအင်ျကြီတှေ၊ Crewneck ဆှယျတာတှေ၊ Oversized T-shirt တှေ၊ distressed denim တှေ၊ အနကျရောငျ Jogger တှေ၊ Grey Trouser တှပေဲဖွဈပါတယျ။ အခွားသောအပွငျအဆငျအနနေဲ့ လကျသညျးအမညျးဆိုးတာတှေ၊ ဆံပငျအရောငျဆိုးတာမြိုးတှအေပွငျကိုမှ မကျြနှာမှာ Freckle တှခွေယျထားပွီး တဈခြို့ကတော့ heart stamp တှေ ပါးနှဈဖကျမှာကပျတာမြိုးလညျး လုပျလရှေိ့ပါတယျ။
Eboy fashion အတှကျ styling လုပျမယျဆိုရငျ
Eboy တှအေတှကျ မရှိမဖွဈ clothing item တှထေဲ crewneck sweater, sweatshirt တှပေါပါတယျ။ သူ့ကိုမှ အောကျကရှပျ အင်ျကြီအဖွူလကျရှညျခံပွီး ကျောလာကိုထုတျ layering ပုံစံဝတျတတျကွသလို တဈခြို့ကတြော့လညျး fake collar တှနေဲ့ခံဝတျ တတျကွပါတယျ။ အောကျကနေ Jean Pants ကိုမှ အနကျရောငျအရေးမြားပွီး တဈခြို့ကလညျး cuffed pants တှနေဲ့ တှဲဝတျလရှေိ့ပါတယျ။
ဘောငျးဘီရှေးခယျြရာမှာ Jeans ဆို အနကျရောငျကိုအမြားဆုံးရှေးခယျြလရှေိ့ပွီး တဈခြို့က distressed Jeans တှကေိုရှေးကွပါတယျ။ အမြိုးအစားဆိုရငျ loose fit jeans တှကေိုအရှေးမြားပွီး Jeans Pant အပွငျကိုမှ Jogger တှေ၊ Ankle Pants တှေ Dress Pants နဲ့ Tapered Pant ပုံစံတှကေိုလညျး ဆငျမွနျးလရှေိ့ပါတယျ။ အဲ့လိုဆငျမွနျးတဲ့အခါ ဘောငျးဘီအောကျနားကို ခွအေိတျပျေါအောငျဖျောဝတျလရှေိ့ပါတယျ။ ဖိနပျတှထေဲမှာ အစီးမြားတဲ့အရောငျကတော့ အဖွူနဲ့အနကျတှပေါပဲ။
အင်ျကြီအဝတျအစားနဲ့ပတျသကျရငျ Print ဒီဇိုငျးတှထေဲ EBoy တှအေမွဲရှေးခယျြလရှေိ့တာ အစငျးနဲ့ပတျသကျတာတှပေါ။ T-shirt လကျရှညျအစငျးတှသောမက ရှပျအင်ျကြီအစငျးတှကေိုလညျးဝတျလရှေိ့ကွပါတယျ။ ဒါကိုမှ Layered Fashion သဘောမြိုွးပွနျတှဲစပျကွတာမြိုးပါ။
Eboy တှရေဲ့ outfit တျောတျောမြားမြားဟာ Layered ဘကျကိုပဲသှားပါတယျ။ T-shirt လကျရှညျအစငျးတှပေျေါကနေ တီရှပျလကျတို Oversized ကိုထပျဝတျတာမြိုး၊ Turtle neck လိုလညျပငျးအထောငျဆှယျတာတှပေျေါ ရှပျအင်ျကြီလကျတိုကိုထပျဝတျတာမြိုး၊ Sweatshirt တှနေဲ့ Fake collar တှတှေဲဝတျတာမြိုးတှအေပွငျ Blazer တှေ၊ Fishing Vest တှကေို Layered Fashion ပုံဆငျမွနျးတာမြိုး တှမွေငျတှကွေ့ရမှာဖွဈပွီး Harness Body Belt တှပေတျတာ၊Chest bag တှဆေငျမွနျးတာတှလေညျး လုပျတတျကွပါသေးတယျ။
Jean Jacket တှေ Jumper တှကေလညျး EBoy မှာမှ Soft-Boy တှအေရှေးမြားတဲ့ clothing items တှပေဲဖွဈပါတယျ။ pullover တှေ Sweatshirt တှပေျေါက Layered Fashion အနနေဲ့ Jumper တှထေပျဝတျတတျကွသလို တီရှပျတှပေျေါမှာလညျး Jean Jacket တှကေို ဆငျမွနျးလရှေိ့ပါတယျ။
ထူးခွားတဲ့ Outwear တှအေနနေဲ့ Blazer တှေ၊ Cropped Jacket တှေ၊ Bomber Jacket တှေ၊ Coat တှေ၊ Fishing Vest စတာတှကေို ဦးစားပေးဆငျမွနျးကွပါတယျ။ အဲဒါတှအေပျေါကမှ Chest Bag တှေ၊ Harness Beltတှေထေပျပတျတတျကွပါသေးတယျ။
Accessory တှအေနနေဲ့ Eboy Fashion အတှကျ မရှိမဖွဈတှကေတော့ chain ကွိုးတှနေဲ့ Lock necklace တှပေါပဲ။ အရောငျကိုတော့ ရှနေဲ့ငှမှော ငှကေိုပိုရှေးခယျြကွပါတယျ။ ဒါ့အပွငျအပျေါမှာပွောသလို harness body bet တှေ၊ Chest Bag တှေ၊ Wallet Chain စတာ တှကေိုလညျး ဆငျမွနျးလရှေိ့ကွပါတယျ။
EBoy တှရေဲ့ ဆံပငျပုံစံကတော့ ၉၀ပွညျ့နှဈကခတျေစားခဲ့တဲ့ အလယျခှဲပုံစံနဲ့ ပါးလောကျထိသာအရှညျရှိတဲ့ curtain hairstyle ပုံစံမြိုး ဖွဈပွီး တဈခြို့က အရောငျဆိုးတာ၊ ရှဆေံ့ပငျတှကေို အရောငျခြှတျတာမြိုး လုပျကွပါတယျ။
ရေးသားသူ - မသေျော (I am Fashion)
လက်တွေ့ဘ၀ထက် ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ ပိုရေပန်းစားတဲ့ EBoy Fashion အကြောင်း
ဖက်ရှင်စတိုင်တွေထဲမှာမှ EBoy စတိုင်ဆိုတာ ခုဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေကြားမှာ နောက်ဆုံးခေတ်စားနေတဲ့ ဖက်ရှင်စတိုင်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဒီ trend က TikTok ကနေစခဲ့တာပါ။ EBoy Look ဟာလူတိုင်းနဲ့အဆင်မပြေနိုင်ပေမယ့် Eboy style ထဲက ကိုယ်သဘောကျတဲ့ Fashion Element တွေနဲ့ ကိုယ်အမြဲဝတ်နေကျ အ၀တ်အစားတစ်ချို့နဲ့ ပေါင်းစပ်တွဲချလိုက်တဲ့အခါ Internet Style Icon တစ်ခု ဖြစ်သွားတဲ့သဘောပါပဲ။
EBoy Style ဟာ Edgy တို့ Alternative ဘက်ရောက်တယ်လို့ဆိုနိုင်သလို အဲဒါကိုမှ အပေါ်မှာပြောသလို ဒီနေ့ခေတ် Trendy ဖြစ်နေတဲ့ အ၀တ်အစားဒီဇိုင်းတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး ထူးခြားအောင်ဆင်မြန်းလိုက်တာမျိုးပါပဲ။ ဒါ့အပြင် Eboy Look တွေဟာ ၂၀၀၀ပြည့်နှစ်က Goths နဲ့ Punk ဂီတတွေ၊ ၉၀ပြည့်နှစ်က စကိတ်ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ Kpop မြူးဇစ်တွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုလည်း ရှိနေပြန်ပါတယ်။
တကယ့်အပြင်လောကမှာထက် အွန်လိုင်းနဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာ ခေတ်စားလာခဲ့တဲ့ ဒီ Eboy Fashion မှာလည်း ထပ်ပြီးအမျိုးအစားခွဲထားတာရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ ကိုယ့် outfit မှာ monochrome လို့ဆိုရမယ့်အနက်နဲ့ မီးခိုးတွေ၊ အဖြူ၊ အနက်စတာတွေကိုပဲ တွဲစပ်ဝတ်ဆင်ထားတယ်။ Layer လုပ်ထားတယ်ဆိုရင် သူ့ကို Soft-Boy Aesthetic ရယ်လို့သတ်မှတ်ပြီး အဖြူ အနက်အပြင်ကိုမှ Outfit မှာ အနီတို့၊ နီယွန်ကာလာအစိမ်းမျိုးတွေပေါင်းစပ်ထည့်ထားတာမျိုးဆိုရင်တော့ Cyber Goths ဆိုပြီးခေါ်ကြပါ တယ်။
EBoy Outfit မှာ အများဆုံးတွေ့ရတဲ့ clothing items တွေကတော့ တီရှပ်လက်ရှည်အစင်းတွေ၊ Sweatshirt ၊ turtle neck တွေ၊ ရှေ့ကြယ်သီးတပ်ရှပ်အင်္ကျီတွေ၊ Crewneck ဆွယ်တာတွေ၊ Oversized T-shirt တွေ၊ distressed denim တွေ၊ အနက်ရောင် Jogger တွေ၊ Grey Trouser တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသောအပြင်အဆင်အနေနဲ့ လက်သည်းအမည်းဆိုးတာတွေ၊ ဆံပင်အရောင်ဆိုးတာမျိုးတွေအပြင်ကိုမှ မျက်နှာမှာ Freckle တွေခြယ်ထားပြီး တစ်ချို့ကတော့ heart stamp တွေ ပါးနှစ်ဖက်မှာကပ်တာမျိုးလည်း လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
Eboy fashion အတွက် styling လုပ်မယ်ဆိုရင်
Eboy တွေအတွက် မရှိမဖြစ် clothing item တွေထဲ crewneck sweater, sweatshirt တွေပါပါတယ်။ သူ့ကိုမှ အောက်ကရှပ် အင်္ကျီအဖြူလက်ရှည်ခံပြီး ကော်လာကိုထုတ် layering ပုံစံဝတ်တတ်ကြသလို တစ်ချို့ကျတော့လည်း fake collar တွေနဲ့ခံဝတ် တတ်ကြပါတယ်။ အောက်ကနေ Jean Pants ကိုမှ အနက်ရောင်အရေးများပြီး တစ်ချို့ကလည်း cuffed pants တွေနဲ့ တွဲဝတ်လေ့ရှိပါတယ်။
ဘောင်းဘီရွေးချယ်ရာမှာ Jeans ဆို အနက်ရောင်ကိုအများဆုံးရွေးချယ်လေ့ရှိပြီး တစ်ချို့က distressed Jeans တွေကိုရွေးကြပါတယ်။ အမျိုးအစားဆိုရင် loose fit jeans တွေကိုအရွေးများပြီး Jeans Pant အပြင်ကိုမှ Jogger တွေ၊ Ankle Pants တွေ Dress Pants နဲ့ Tapered Pant ပုံစံတွေကိုလည်း ဆင်မြန်းလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့လိုဆင်မြန်းတဲ့အခါ ဘောင်းဘီအောက်နားကို ခြေအိတ်ပေါ်အောင်ဖော်ဝတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဖိနပ်တွေထဲမှာ အစီးများတဲ့အရောင်ကတော့ အဖြူနဲ့အနက်တွေပါပဲ။
အင်္ကျီအ၀တ်အစားနဲ့ပတ်သက်ရင် Print ဒီဇိုင်းတွေထဲ EBoy တွေအမြဲရွေးချယ်လေ့ရှိတာ အစင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေပါ။ T-shirt လက်ရှည်အစင်းတွေသာမက ရှပ်အင်္ကျီအစင်းတွေကိုလည်းဝတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါကိုမှ Layered Fashion သဘောမျိုး ပြန်တွဲစပ်ကြတာမျိုးပါ။
Eboy တွေရဲ့ outfit တော်တော်များများဟာ Layered ဘက်ကိုပဲသွားပါတယ်။ T-shirt လက်ရှည်အစင်းတွေပေါ်ကနေ တီရှပ်လက်တို Oversized ကိုထပ်ဝတ်တာမျိုး၊ Turtle neck လိုလည်ပင်းအထောင်ဆွယ်တာတွေပေါ် ရှပ်အင်္ကျီလက်တိုကိုထပ်ဝတ်တာမျိုး၊ Sweatshirt တွေနဲ့ Fake collar တွေတွဲဝတ်တာမျိုးတွေအပြင် Blazer တွေ၊ Fishing Vest တွေကို Layered Fashion ပုံဆင်မြန်းတာမျိုး တွေမြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပြီး Harness Body Belt တွေပတ်တာ၊Chest bag တွေဆင်မြန်းတာတွေလည်း လုပ်တတ်ကြပါသေးတယ်။
Jean Jacket တွေ Jumper တွေကလည်း EBoy မှာမှ Soft-Boy တွေအရွေးများတဲ့ clothing items တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ pullover တွေ Sweatshirt တွေပေါ်က Layered Fashion အနေနဲ့ Jumper တွေထပ်ဝတ်တတ်ကြသလို တီရှပ်တွေပေါ်မှာလည်း Jean Jacket တွေကို ဆင်မြန်းလေ့ရှိပါတယ်။
ထူးခြားတဲ့ Outwear တွေအနေနဲ့ Blazer တွေ၊ Cropped Jacket တွေ၊ Bomber Jacket တွေ၊ Coat တွေ၊ Fishing Vest စတာတွေကို ဦးစားပေးဆင်မြန်းကြပါတယ်။ အဲဒါတွေအပေါ်ကမှ Chest Bag တွေ၊ Harness Belt တွေထပ်ပတ်တတ်ကြပါသေးတယ်။
Accessory တွေအနေနဲ့ Eboy Fashion အတွက် မရှိမဖြစ်တွေကတော့ chain ကြိုးတွေနဲ့ Lock necklace တွေပါပဲ။ အရောင်ကိုတော့ ရွှေနဲ့ငွေမှာ ငွေကိုပိုရွေးချယ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အပေါ်မှာပြောသလို harness body bet တွေ၊ Chest Bag တွေ၊ Wallet Chain စတာ တွေကိုလည်း ဆင်မြန်းလေ့ရှိကြပါတယ်။
EBoy တွေရဲ့ ဆံပင်ပုံစံကတော့ ၉၀ပြည့်နှစ်ကခေတ်စားခဲ့တဲ့ အလယ်ခွဲပုံစံနဲ့ ပါးလောက်ထိသာအရှည်ရှိတဲ့ curtain hairstyle ပုံစံမျိုး ဖြစ်ပြီး တစ်ချို့က အရောင်ဆိုးတာ၊ ရှေ့ဆံပင်တွေကို အရောင်ချွတ်တာမျိုး လုပ်ကြပါတယ်။
ရေးသားသူ - မေသော် (I am Fashion)
Labels: Fashion Advice, Opinion, ဆောင်းပါး
ကိုကာကိုလာကွကျတောငျပံ -ငါးခေါငျးမွအေိုးဟငျးအခြို - ငါး ဆားအုံ မီးကငျ
ငါး ဆားအုံ မီးကငျ
အသားကငျကိုမှ ကွိုကျနှဈသကျသူတှအေတှကျ၊ ဒီတပတျတော့ ထိုငျးနိုငျငံမှာ လူကွိုကျမြားတဲ့ ငါး ဆားအုံ မီးကငျဆိုတဲ့ အစားအစာလေးအကွောငျွးေပွောပွခငျြပါတယျ။
ပလာပေါငျကလူယာ့ (Pla Paung Gluea)လို့ ချေါတဲ့ ငါးဆားအုံမီးကငျကို ထိုငျးနိုငျငံမှာတော့ လူတျော တျောမြားမြားက နှဈနှဈ ခွိုကျခွိုကျ စား သောကျလရှေိ့ပွီး၊ ယမကာသမားတှအေတှကျလညျး အမွညျး ကောငျးတခုလို့ ဆိုရမှာပါ။ Street food လို့ ချေါတဲ့ ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ လူစညျ ကားရာလမျးဘေးက စားသောကျဆိုငျတနျးလေးတှေ မှာ မီးဖိုတဖိုနဲ့ ငါးဆားအုံမီးကငျကို ရောငျးခကြွတာ တှမွေ့ငျနိုငျပါတယျ။ ငါးဆိုတာကလညျး လူမှာလိုအပျတဲ့ အသားဓာတျ ကို အကောငျးဆုံးပေးနိုငျရုံသာမက ကနျြဗီတာမငျ တှနေဲ့ သတ်တုဓာတျတှကေိုလညျး အပွညျ့အဝပေးနိုငျ သလို ငါးကထှကျရှိတဲ့ ဉာနါေ ၃ အကျဆဈကလညျး နှလုံးရောဂါ တို့၊ စိတျဖိစီးမှုကွောငျ့ ထှကျလာ တဲ့ ဟျောမုနျးဓာတျတို့ကိုတောငျ ဟနျ့တားကာကှယျ နိုငျတယျလို့ ကနျြးမာရေး အဆိုတှေ ရှိတာကွောငျ့ ဧရာဝတီ စာဖတျပရိသတျကွီးအနနေဲ့ ပွညျ့ဝဆီတှေ မြားတဲ့ ကွကျ၊ ဝကျစတဲ့ အကငျ တှအေစား၊ ငါး ဆားအုံ မီးကငျကို ကိုယျတိုငျ ပြျောပြျောပါးပါးပွုလုပျ မွညျးစမျးနိုငျအောငျ ရေးသားတငျပွလိုကျပါ တယျ။ မွနျမာပွညျမှာလညျး “ခတျေမီသူတိုငျး ပငျလယျငါး စားကွသညျ” ဆိုတဲ့ ကွျောငွာတောငျ ရှိခဲ့ဖူးတယျ မဟုတျလား။ ငါးကို ဆားနဲ့အုံပွီး ကငျတဲ့နညျးက တခွား အဆာပလာတှေ အမြားကွီး ထညျ့စရာမလိုတာ ကွောငျ့ လုပျရတာလညျး အငျမတနျမှ လှယျကူလှပါတယျ။
ငါးကငျဖို့အတှကျတော့ ဝယျ ရတာလညျး လှယျကူ၊ ဈေးနှုနျး လညျး ခြိုသာ၊ အရိုးလညျး နညျးတဲ့ တီလား ဗီးယားငါးကို အသုံးပွုပါမယျ။ တီလားဗီးယားက မွနျမာပွညျမှာလညျး ဈေးခြိုခြိုနဲ့ အလှယျတကူ ဝယျလို့ရနိုငျပါတယျ။ လူ ၂ ယောကျစာအတှကျဆိုရငျတော့ အလေး ခြိနျ ၄၀ ကပျြသားအရှယျ ငါးတကောငျဆိုရငျ လုံ လောကျပါပွီ။ တခွားလိုအပျတဲ့ ပစ်စညျးတှကေတော့ ငါးရဲ့ အညှီနံ့ ပြောကျစဖေို့ စပါးလငျ ၂ ခြောငျး၊ ရှောကျဘီလူးရှကျ ၁၀ ရှကျ၊ ဆား ၁၅ ကပျြသား၊ ဂြုံမှုနျ့ စတီးဇှနျး ၂ ဇှနျးနဲ့ မီးသှေး ၁ ပိဿာ၊ ရေ စတီးဇှနျး ၂ ဇှနျးတို့ ဖွဈပါတယျ။ ငါးကငျနဲ့တှဲဖကျစားမယျ့ အခဉျြအတှကျတော့ ငရုတျသီးစိမျး ၁၅ တောငျ့၊ ကွကျသှနျဖွူ ၃ တကျ၊ သံပရာသီး ၁ လုံး၊ ငါးငံပွာရညျ စတီးဇှနျး ၁ ဇှနျး၊ သကွားနဲ့ ဆားအနညျးငယျတို့ လိုအပျမှာဖွဈပါတယျ။
အရငျဆုံး မီးသှေးမီးဖိုကို မီးမှေးရပါမယျ။ ငါးကငျတဲ့အခါမှာ မီးအရှိနျကို မမြားစဘေဲ မီးသှေး မီးပွာကြ၊ မီးအရှိနျလြော့ နမှေ ပိုပွီးကောငျးမှာဖွဈလို့၊ စောစော မီးမှေးထားရငျတော့ အားလုံးပွငျဆငျပွီးတဲ့ အခြိနျမှာ ကငျလို့ကောငျးတဲ့ မီး အနထေား ကိုရမှာ ပါ။ မီးမှေးပွီးရငျတော့ ငါးကို အကွေးခှံ မခှာဘဲ ဗိုကျဖောကျ၊ အူထုတျ၊ ပါးဟကျထုတျပွီး၊ စငျကွယျ အောငျဆေးကာ ရစေဈထားပါ။ ငါး ရစေဈသှားပွီဆိုမှ စပါးလငျ ၂ ခြောငျးကို အရှညျလိုကျ ထုပွီး ငါးရဲ့ ပါးစပျကနေ ထညျ့ပါ။ ဆကျလကျပွီး ရှောကျဘီလူးရှကျ ၁၀ ရှကျကိုလညျး ဗိုကျထဲကို အစာသှတျသကဲ့သို့ သှတျထားပါ။ ငါးကို ဆားအုံဖို့ ဗနျးတခပျြထဲမှာ ဆားကွမျးနဲ့ ဂြုံမှုနျ့ စတီးဇှနျး ၂ ဇှနျး၊ ရေ စတီးဇှနျး ၂ ဇှနျးထညျ့၊ သမအောငျ အထကျအောကျ စေးပဈြလာတဲ့အထိ နယျပါ။ ဆားနဲ့ ဂြုံမှုနျ့ သမပွီး စေးပဈြလာပွီဆိုရငျ၊ ငါးကို ဆားနဲ့ နှံ့နှံ့စပျစပျ သုတျလိမျးမံထားရပါမယျ။ ဆားနဲ့ ငါးကို အထပျထပျ သုတျလိမျးပွီးရငျ တော့ ငါးကို ၁၀ မိနဈခနျ့ ခွောကျသှအေ့ောငျထားပါ။ ပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ မီးသှေးမီးဖိုပျေါမှာ ဆနျခါ နဲ့တငျပွီး မီးအရှိနျပြော့ပြော့နဲ့ ငါးကို မိနဈ ၂၀ ခနျ့ ကငျလိုကျပါ။
တဖကျကို မိနဈ ၂၀ ခနျ့နဲ့ စုစုပေါငျး မိနဈ ၄၀ ခနျ့အကွာ ကငျရပါလိမျ့မယျ။ ကငျတဲ့နရောမှာ တခု သတိပွုရမှာကတော့ ငါးအရှယျအစားကို မူ တညျပွီး ကငျရတဲ့အခြိနျ အနညျးငယျ ကှာခွားမှု ရှိတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ၂ ဖကျလုံး လှနျကငျပွီးတဲ့အခါမှာတော့ ဆား ငှရေို့ကျပွီး အထဲက ငါးရဲ့အသားဟာ “ပုစှနျအကှေး ငါးအနှေး” ဆိုသလို ကကျြသှားပါပွီ။ ငါးရဲ့အကွေးခှံမှာ ကပျနတေဲ့ ဆားဟာ မီးနဲ့ တှအေ့ခါမှာ တဖွညျးဖွညျး အရညျပြျောပွီး ငါး အသားထဲကို စိမျ့ဝငျသှားလို့ ရရှိတဲ့ ဆားအရသာရယျ၊ ဆားကို မီးကငျ လိုကျလို့ ထှကျလာတဲ့ မှေးတဲ့ အနံ့ ရယျဟာ ထူးခွားတာကွောငျ့ စားရသူ တိုငျးအဖို့ စိတျကနြေပျမှု အပွညျ့အဝ ရရှိသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကငျပွီးပွီးခွငျး၊ ခကျြခငျြးစားသုံးရငျတော့ အရသာ ပိုမိုကောငျးမှနျမှာဖွဈပါတယျ။ ပွငျဆငျစားသောကျတဲ့ အခါမှာ ဆားနဲ့ဂြုံမှုနျ့ တှကေပျနတေဲ့ ငါးကငျရဲ့ အပျေါယံအကွေးခှံကို ကတျကွေးနဲ့ဖွဈစေ၊ လကျနဲ့ဖွဈစေ၊ တဖွညျးဖွညျး ခငျြး ဖယျထုတျလိုကျတယျဆိုရငျ၊ အနံ့အရသာမှေးပွီး နူးညံပြော့ပြောငျးတဲ့ ငါးကငျကို ရမှာ မလှဲပါဘူး။ ငါးကငျနဲ့တှဲဖကျ စားသောကျရမယျ့ အခဉျြ အတှကျ ငရုတျသီးနဲ့ ကွကျသှနျဖွူကိုရောပွီး ကွေ ညကျအောငျ ကွိတျထားတဲ့ အရောထဲကို သံပရာ ရညျ၊ ဆား၊ သကွား၊ ငံပွာရညျနဲ့ ရတေို့ကို အားလုံး ရောမှလေိုကျရငျ တှဲစားရမယျ့ အခဉျြရပါပွီ။
ထိုငျးနိုငျငံ မွောကျပိုငျးမှာတော့ ငါးဆားအုံ မီးကငျကို ညနစေောငျးမှာ ခေါကျညိုလို့ ချေါတဲ့ ကောကျညှငျး၊ ဒါမှမဟုတျ ထမငျးတို့နဲ့ စားသုံးကွပါ တယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး ထမငျးနဲ့တှဲဖကျလို့ ညနစောအဖွဈ စားသုံးနိုငျ သလို ဘီယာယမကာ နှဈသကျ သူတှအေတှကျလညျး အမွညျးအဖွဈ အမြိုးမြိုး စား သောကျနိုငျတာကွောငျ့ အရသာရှိတဲ့ ထိုငျးငါးဆားအုံ မီးကငျ နညျးလေးကို မိမိကိုယျတိုငျ ပွုလုပျမွညျးစမျး ကွညျ့ဖို့ တငျပွလိုကျရပါတယျ။
ငါးကွငျးခေါငျး တဈခေါငျး(၃၀ကပျြသားခနျ့)၊ ပဲပွား တဈတုံး(လေးထောငျ့တုံးလေးမြား တုံးထားပါ)၊ မုနျ့ညငျးဖွူ ခွောကျ ကပျြသား(တဈလကျမအရှယျစီ လှီးထားပါ)၊ တရုတျမှိုခွောကျ ငါးပှငျ့ (ရနှေေးဖွငျ့ စိမျထားပါ၊ အညှာဖယျပဈပါ)၊ ဝကျသား ကငျ ခွောကျကပျြသား (ပါးပါးလှီးထားပါ)၊ မြှဈနုနု သုံးကပျြသားခနျ့ (မထူမပါး လှီးထားပါ)၊ မုနျလာဥနီ သုံးကပျြသားခနျ့ (ပါးပါးလှီးထားပါ)၊ ကွကျသှနျမွိတျ နှဈပငျ ( ခပျရှညျရှညျပိုငျးဖွတျထားပါ)၊ ပဲငါးပိအနှဈ ထမငျးစားဇှနျး တဈဇှနျး၊ ကွကျပွုတျ ရညျ သို့မဟုတျ ရေ ၁.၂ လီတာ၊ ခငျြးပါးပါးလှီး လေးပွား၊ ခရုဆီ ထမငျးစားဇှနျး တဈဇှနျး၊ ဟငျးခကျြဝိုငျ ထမငျးစားဇှနျး တဈဇှနျး ဆား လကျဖကျရညျဇှနျး ၁/၂ ဇှနျး၊ သကွား လကျဖကျရညျဇှနျး တဈဇှနျး၊ပဲငံပွာရညျအကြဲ လကျဖကျရညျဇှနျး တဈဇှနျး + ထမငျးစားဇှနျး နှဈဇှနျး၊ ပဲငံပွာရညျအပဈြ လကျဖကျရညျဇှနျး ၁/၂ ဇှနျး၊ နှမျးဆီ လကျဖကျရညျဇှနျး တဈဇှနျး၊ ငရုတျကောငျးမှုနျ့နှငျ့ ကျောမှုနျ့ အနညျးငယျ။
၁)ငါးခေါငျးကို အကွေးခှံမြားဖယျပွီး ရစေငျအောငျဆေးကာ ထကျခွမျးခွမျးပါ။ ရစေဈပွီး ပဲငံပွာရညျအကြဲ ထမငျးစားဇှနျး နှဈဇှနျးနှငျ့ ကျောမှုနျ့တို့ဖွငျ့နယျပါ။
၂) မွအေိုးထဲတှငျ ဆီအနညျးငယျကို အပူပေးကာ ငါးခေါငျးနှငျ့ ပဲပွားမြားကို ညိုရောငျသနျးသညျအထိ ထညျ့ကွျောပါ။ ပွီးလြှငျ ဆယျယူထားပွီး အိုးထဲသို့ ဆီသုံးဇှနျးထညျ့ပါ။ ဆီပူလြှငျ ခငျြးနှငျ့ ပဲငါးပိထညျ့ ဆီသတျပါ။
၃)မှေးပြံ့လာလြှငျ မုနျ့ညငျးဖွူ၊ မုနျလာဥနီ၊ မှို၊မြှဈနှငျ့ ဝကျသားကငျထညျ့ကွျောပါ။ ထို့နောကျ အရသာမှုနျ့ခတျ၍ ကနျြပစ်စညျးအားလုံးနှငျ့ ရကေိုထညျ့ပါ။ ငါးခေါငျးနှငျ့ ပဲပွားကွျောကိုပါထညျ့ပွီး မီးမြှဉျးမြှဉျးဖွငျ့ မိနဈ ၂၀ခနျ့ ဖုံးအုပျကာခကျြပါ။ ထို့နောကျ ကွကျသှနျမွိတျဖွူးပွီး သုံးဆောငျပါ။
(Ref: Heavenly Claypot Magic by Pang Nyuk Yoon)
တရုတျပွညျမှ စားဖိုမှူးတဈယောကျပွောပွသော ဟငျးခကျြနညျးလေးပါ။ ကွကျကွျောရဲ့အရောငျအဆငျးက နီညိုရောငျ သမျးနပွေီး ပနျးကနျလှလှပပထဲထညျ့ ကီဝီသီးကို အကှငျးလိုကျလှီးပွီးအပျေါကတငျကာ အလှဆငျထားနိုငျပါတယျ။
အသားမြားသောကွကျတောငျပံ (အရငျး+အဖြား) ၃၀ ကပျြသား၊ ကိုကာကိုလာသံဘူး တဈဝကျ (၁၇၀ မီလီလီတာခနျ့)၊ ခငျြးပါးပါးလှီး နှဈပွား၊ ဟငျးခကျြအရကျ ထမငျးစားဇှနျး တဈဇှနျး၊ ပဲငံပွာရညျအကြဲ ထမငျးစားဇှနျး တဈဇှနျး၊ ဆား အနညျးငယျ၊ ဆီ ထမငျး စားဇှနျး နှဈဇှနျး။
(၁) ကွကျတောငျပံမြားကို ရစေငျအောငျဆေးပွီး အရငျးပိုငျးနဲ့ အဖြားပိုငျးတို့ကို သတျသတျစီဖွဈအောငျ အဆဈနရောမှ ခုတျပိုငျးထားပါ။ ခုတျပွီးရငျ ဆား၊ ဟငျးခကျြအရကျ၊ ပဲငံပွာရညျတို့ဖွငျ့ နယျကာ နာရီဝကျခနျ့ နှပျထားပါ။
(၂) ထို့နောကျ အိုးတဈလုံးကို အပူပေး၍ ကွကျတောငျပံမြားထညျ့ကာ ရမွေုပျရုံ လောငျးထညျ့ပွီးခကျြပါ။ ထိုရအေား လုံးခနျးသှားပွီဆိုရငျ ကွကျတောငျပံမြားဆယျယူ ထားပါ။
(၃) ဒယျအိုးတဈလုံးနဲ့ ဆီကိုအပူပေး၍ ခငျြးထညျ့ကာဆီသတျပါ။ ခငျြးနံ့မှေးလာရငျ ကွကျတောငျပံမွုပျရုံလောငျးထညျ့ပါ။ ကိုကာကိုလာ ရညျမြား ခနျးခွောကျခါနီးပွီဆိုရငျ ပနျးကနျထဲဆယျထညျ့ကာ သုံးဆောငျနိုငျပါပွီ။
ပလာပေါင်ကလူယာ့ (Pla Paung Gluea)လို့ ခေါ်တဲ့ ငါးဆားအုံမီးကင်ကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ လူတော် တော်များများက နှစ်နှစ် ခြိုက်ခြိုက် စား သောက်လေ့ရှိပြီး၊ ယမကာသမားတွေအတွက်လည်း အမြည်း ကောင်းတခုလို့ ဆိုရမှာပါ။ Street food လို့ ခေါ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ လူစည် ကားရာလမ်းဘေးက စားသောက်ဆိုင်တန်းလေးတွေ မှာ မီးဖိုတဖိုနဲ့ ငါးဆားအုံမီးကင်ကို ရောင်းချကြတာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ငါးဆိုတာကလည်း လူမှာလိုအပ်တဲ့ အသားဓာတ် ကို အကောင်းဆုံးပေးနိုင်ရုံသာမက ကျန်ဗီတာမင် တွေနဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေကိုလည်း အပြည့်အဝပေးနိုင် သလို ငါးကထွက်ရှိတဲ့ ဥာနါေ ၃ အက်ဆစ်ကလည်း နှလုံးရောဂါ တို့၊ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ထွက်လာ တဲ့ ဟော်မုန်းဓာတ်တို့ကိုတောင် ဟန့်တားကာကွယ် နိုင်တယ်လို့ ကျန်းမာရေး အဆိုတွေ ရှိတာကြောင့် ဧရာဝတီ စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ ပြည့်ဝဆီတွေ များတဲ့ ကြက်၊ ဝက်စတဲ့ အကင် တွေအစား၊ ငါး ဆားအုံ မီးကင်ကို ကိုယ်တိုင် ပျော်ပျော်ပါးပါးပြုလုပ် မြည်းစမ်းနိုင်အောင် ရေးသားတင်ပြလိုက်ပါ တယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း “ခေတ်မီသူတိုင်း ပင်လယ်ငါး စားကြသည်” ဆိုတဲ့ ကြော်ငြာတောင် ရှိခဲ့ဖူးတယ် မဟုတ်လား။ ငါးကို ဆားနဲ့အုံပြီး ကင်တဲ့နည်းက တခြား အဆာပလာတွေ အများကြီး ထည့်စရာမလိုတာ ကြောင့် လုပ်ရတာလည်း အင်မတန်မှ လွယ်ကူလှပါတယ်။
ငါးကင်ဖို့အတွက်တော့ ဝယ် ရတာလည်း လွယ်ကူ၊ ဈေးနှုန်း လည်း ချိုသာ၊ အရိုးလည်း နည်းတဲ့ တီလား ဗီးယားငါးကို အသုံးပြုပါမယ်။ တီလားဗီးယားက မြန်မာပြည်မှာလည်း ဈေးချိုချိုနဲ့ အလွယ်တကူ ဝယ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ လူ ၂ ယောက်စာအတွက်ဆိုရင်တော့ အလေး ချိန် ၄၀ ကျပ်သားအရွယ် ငါးတကောင်ဆိုရင် လုံ လောက်ပါပြီ။ တခြားလိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ ငါးရဲ့ အညှီနံ့ ပျောက်စေဖို့ စပါးလင် ၂ ချောင်း၊ ရှောက်ဘီလူးရွက် ၁၀ ရွက်၊ ဆား ၁၅ ကျပ်သား၊ ဂျုံမှုန့် စတီးဇွန်း ၂ ဇွန်းနဲ့ မီးသွေး ၁ ပိဿာ၊ ရေ စတီးဇွန်း ၂ ဇွန်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ငါးကင်နဲ့တွဲဖက်စားမယ့် အချဉ်အတွက်တော့ ငရုတ်သီးစိမ်း ၁၅ တောင့်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၃ တက်၊ သံပရာသီး ၁ လုံး၊ ငါးငံပြာရည် စတီးဇွန်း ၁ ဇွန်း၊ သကြားနဲ့ ဆားအနည်းငယ်တို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး မီးသွေးမီးဖိုကို မီးမွေးရပါမယ်။ ငါးကင်တဲ့အခါမှာ မီးအရှိန်ကို မများစေဘဲ မီးသွေး မီးပြာကျ၊ မီးအရှိန်လျော့ နေမှ ပိုပြီးကောင်းမှာဖြစ်လို့၊ စောစော မီးမွေးထားရင်တော့ အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ကင်လို့ကောင်းတဲ့ မီး အနေထား ကိုရမှာ ပါ။ မီးမွေးပြီးရင်တော့ ငါးကို အကြေးခွံ မခွာဘဲ ဗိုက်ဖောက်၊ အူထုတ်၊ ပါးဟက်ထုတ်ပြီး၊ စင်ကြယ် အောင်ဆေးကာ ရေစစ်ထားပါ။
ငါး ရေစစ်သွားပြီဆိုမှ စပါးလင် ၂ ချောင်းကို အရှည်လိုက် ထုပြီး ငါးရဲ့ ပါးစပ်ကနေ ထည့်ပါ။ ဆက်လက်ပြီး ရှောက်ဘီလူးရွက် ၁၀ ရွက်ကိုလည်း ဗိုက်ထဲကို အစာသွတ်သကဲ့သို့ သွတ်ထားပါ။ ငါးကို ဆားအုံဖို့ ဗန်းတချပ်ထဲမှာ ဆားကြမ်းနဲ့ ဂျုံမှုန့် စတီးဇွန်း ၂ ဇွန်း၊ ရေ စတီးဇွန်း ၂ ဇွန်းထည့်၊ သမအောင် အထက်အောက် စေးပျစ်လာတဲ့အထိ နယ်ပါ။ ဆားနဲ့ ဂျုံမှုန့် သမပြီး စေးပျစ်လာပြီဆိုရင်၊ ငါးကို ဆားနဲ့ နှံ့နှံ့စပ်စပ် သုတ်လိမ်းမံထားရပါမယ်။ ဆားနဲ့ ငါးကို အထပ်ထပ် သုတ်လိမ်းပြီးရင် တော့ ငါးကို ၁၀ မိနစ်ခန့် ခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။ ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ မီးသွေးမီးဖိုပေါ်မှာ ဆန်ခါ နဲ့တင်ပြီး မီးအရှိန်ပျော့ပျော့နဲ့ ငါးကို မိနစ် ၂၀ ခန့် ကင်လိုက်ပါ။
တဖက်ကို မိနစ် ၂၀ ခန့်နဲ့ စုစုပေါင်း မိနစ် ၄၀ ခန့်အကြာ ကင်ရပါလိမ့်မယ်။ ကင်တဲ့နေရာမှာ တခု သတိပြုရမှာကတော့ ငါးအရွယ်အစားကို မူ တည်ပြီး ကင်ရတဲ့အချိန် အနည်းငယ် ကွာခြားမှု ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ ဖက်လုံး လှန်ကင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဆား ငွေ့ရိုက်ပြီး အထဲက ငါးရဲ့အသားဟာ “ပုစွန်အကွေး ငါးအနွေး” ဆိုသလို ကျက်သွားပါပြီ။ ငါးရဲ့အကြေးခွံမှာ ကပ်နေတဲ့ ဆားဟာ မီးနဲ့ တွေ့အခါမှာ တဖြည်းဖြည်း အရည်ပျော်ပြီး ငါး အသားထဲကို စိမ့်ဝင်သွားလို့ ရရှိတဲ့ ဆားအရသာရယ်၊ ဆားကို မီးကင် လိုက်လို့ ထွက်လာတဲ့ မွှေးတဲ့ အနံ့ ရယ်ဟာ ထူးခြားတာကြောင့် စားရသူ တိုင်းအဖို့ စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝ ရရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ပြီးပြီးခြင်း၊ ချက်ချင်းစားသုံးရင်တော့ အရသာ ပိုမိုကောင်းမွန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ဆင်စားသောက်တဲ့ အခါမှာ ဆားနဲ့ဂျုံမှုန့် တွေကပ်နေတဲ့ ငါးကင်ရဲ့ အပေါ်ယံအကြေးခွံကို ကတ်ကြေးနဲ့ဖြစ်စေ၊ လက်နဲ့ဖြစ်စေ၊ တဖြည်းဖြည်း ချင်း ဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်၊ အနံ့အရသာမွှေးပြီး နူးညံပျော့ပျောင်းတဲ့ ငါးကင်ကို ရမှာ မလွဲပါဘူး။ ငါးကင်နဲ့တွဲဖက် စားသောက်ရမယ့် အချဉ် အတွက် ငရုတ်သီးနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကိုရောပြီး ကြေ ညက်အောင် ကြိတ်ထားတဲ့ အရောထဲကို သံပရာ ရည်၊ ဆား၊ သကြား၊ ငံပြာရည်နဲ့ ရေတို့ကို အားလုံး ရောမွှေလိုက်ရင် တွဲစားရမယ့် အချဉ်ရပါပြီ။ ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းမှာတော့ ငါးဆားအုံ မီးကင်ကို ညနေစောင်းမှာ ခေါက်ညိုလို့ ခေါ်တဲ့ ကောက်ညှင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ထမင်းတို့နဲ့ စားသုံးကြပါ တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ထမင်းနဲ့တွဲဖက်လို့ ညနေစာအဖြစ် စားသုံးနိုင် သလို ဘီယာယမကာ နှစ်သက် သူတွေအတွက်လည်း အမြည်းအဖြစ် အမျိုးမျိုး စား သောက်နိုင်တာကြောင့် အရသာရှိတဲ့ ထိုင်းငါးဆားအုံ မီးကင် နည်းလေးကို မိမိကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်မြည်းစမ်း ကြည့်ဖို့ တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ငါးကြင်းခေါင်း တစ်ခေါင်း(၃၀ကျပ်သားခန့်)၊ ပဲပြား တစ်တုံး(လေးထောင့်တုံးလေးများ တုံးထားပါ)၊ မုန့်ညင်းဖြူ ခြောက် ကျပ်သား(တစ်လက်မအရွယ်စီ လှီးထားပါ)၊ တရုတ်မှိုခြောက် ငါးပွင့် (ရေနွေးဖြင့် စိမ်ထားပါ၊ အညှာဖယ်ပစ်ပါ)၊ ၀က်သား ကင် ခြောက်ကျပ်သား (ပါးပါးလှီးထားပါ)၊ မျှစ်နုနု သုံးကျပ်သားခန့် (မထူမပါး လှီးထားပါ)၊ မုန်လာဥနီ သုံးကျပ်သားခန့် (ပါးပါးလှီးထားပါ)၊ ကြက်သွန်မြိတ် နှစ်ပင် ( ခပ်ရှည်ရှည်ပိုင်းဖြတ်ထားပါ)၊ ပဲငါးပိအနှစ် ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ ကြက်ပြုတ် ရည် သို့မဟုတ် ရေ ၁.၂ လီတာ၊ ချင်းပါးပါးလှီး လေးပြား၊ ခရုဆီ ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ ဟင်းချက်ဝိုင် ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁/၂ ဇွန်း၊ သကြား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ပဲငံပြာရည်အကျဲ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း + ထမင်းစားဇွန်း နှစ်ဇွန်း၊ ပဲငံပြာရည်အပျစ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁/၂ ဇွန်း၊ နှမ်းဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်နှင့် ကော်မှုန့် အနည်းငယ်။
၁)ငါးခေါင်းကို အကြေးခွံများဖယ်ပြီး ရေစင်အောင်ဆေးကာ ထက်ခြမ်းခြမ်းပါ။ ရေစစ်ပြီး ပဲငံပြာရည်အကျဲ ထမင်းစားဇွန်း နှစ်ဇွန်းနှင့် ကော်မှုန့်တို့ဖြင့်နယ်ပါ။
၂) မြေအိုးထဲတွင် ဆီအနည်းငယ်ကို အပူပေးကာ ငါးခေါင်းနှင့် ပဲပြားများကို ညိုရောင်သန်းသည်အထိ ထည့်ကြော်ပါ။ ပြီးလျှင် ဆယ်ယူထားပြီး အိုးထဲသို့ ဆီသုံးဇွန်းထည့်ပါ။ ဆီပူလျှင် ချင်းနှင့် ပဲငါးပိထည့် ဆီသတ်ပါ။
၃)မွှေးပျံ့လာလျှင် မုန့်ညင်းဖြူ၊ မုန်လာဥနီ၊ မှို၊မျှစ်နှင့် ၀က်သားကင်ထည့်ကြော်ပါ။ ထို့နောက် အရသာမှုန့်ခတ်၍ ကျန်ပစ္စည်းအားလုံးနှင့် ရေကိုထည့်ပါ။ ငါးခေါင်းနှင့် ပဲပြားကြော်ကိုပါထည့်ပြီး မီးမျှဉ်းမျှဉ်းဖြင့် မိနစ် ၂၀ခန့် ဖုံးအုပ်ကာချက်ပါ။ ထို့နောက် ကြက်သွန်မြိတ်ဖြူးပြီး သုံးဆောင်ပါ။
တရုတ်ပြည်မှ စားဖိုမှူးတစ်ယောက်ပြောပြသော ဟင်းချက်နည်းလေးပါ။ ကြက်ကြော်ရဲ့အရောင်အဆင်းက နီညိုရောင် သမ်းနေပြီး ပန်းကန်လှလှပပထဲထည့် ကီဝီသီးကို အကွင်းလိုက်လှီးပြီးအပေါ်ကတင်ကာ အလှဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။
အသားများသောကြက်တောင်ပံ (အရင်း+အဖျား) ၃၀ ကျပ်သား၊ ကိုကာကိုလာသံဘူး တစ်ဝက် (၁၇၀ မီလီလီတာခန့်)၊ ချင်းပါးပါးလှီး နှစ်ပြား၊ ဟင်းချက်အရက် ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ ပဲငံပြာရည်အကျဲ ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ ဆား အနည်းငယ်၊ ဆီ ထမင်း စားဇွန်း နှစ်ဇွန်း။
(၁) ကြက်တောင်ပံများကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး အရင်းပိုင်းနဲ့ အဖျားပိုင်းတို့ကို သတ်သတ်စီဖြစ်အောင် အဆစ်နေရာမှ ခုတ်ပိုင်းထားပါ။ ခုတ်ပြီးရင် ဆား၊ ဟင်းချက်အရက်၊ ပဲငံပြာရည်တို့ဖြင့် နယ်ကာ နာရီဝက်ခန့် နှပ်ထားပါ။
(၂) ထို့နောက် အိုးတစ်လုံးကို အပူပေး၍ ကြက်တောင်ပံများထည့်ကာ ရေမြုပ်ရုံ လောင်းထည့်ပြီးချက်ပါ။ ထိုရေအား လုံးခန်းသွားပြီဆိုရင် ကြက်တောင်ပံများဆယ်ယူ ထားပါ။
(၃) ဒယ်အိုးတစ်လုံးနဲ့ ဆီကိုအပူပေး၍ ချင်းထည့်ကာဆီသတ်ပါ။ ချင်းနံ့မွှေးလာရင် ကြက်တောင်ပံမြုပ်ရုံလောင်းထည့်ပါ။ ကိုကာကိုလာ ရည်များ ခန်းခြောက်ခါနီးပြီဆိုရင် ပန်းကန်ထဲဆယ်ထည့်ကာ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Posted by Alex Aung at 2:53 PM No comments:
KPI တှဟော လုပျငနျးတှကေို သူတို့ရဲ့မဟာဗြူဟာမွောကျရညျမှနျး ခကျြ၊ ပနျးတိုငျတှအေပျေါမှာ ဘယျလောကျထိ ဆောငျရှကျနိုငျပွီလဲဆိုတာကို နားလညျဖို့ကူညီပေးပါတယျ။ ဒီထကျပိုပွီးအကယျြတဝငျ့ပွောရရငျ KPI တှဟော လုပျငနျးတှအေနနေဲ့ သူတို့သှားရမညျ့ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျအပျေါမှာ သှားနပွေီလား၊ ဘယျနားရောကျနပွေီလဲလို့ သူတို့နဲ့သကျဆိုငျ သူတှကေို ပွောပွ ပေးတဲ့ အရေးကွီးသတငျးအခကျြအလကျတှပေဲဖွဈပါ တယျ။ ဒါ့အပွငျ KPIs တှဟော လုပျငနျးတှကေို ရှုပျထှေးလှတဲ့နားလညျဖို့ ခကျလှတဲ့လုပျငနျးရဲ့အောငျမွငျစှာစှမျးဆောငျနိုငျမှုတှကေို ပိုမိုနားလညျဖို့လှယျကူတဲ့ Indicators တှအေဖွဈ ပွောငျးလဲပေးပွီး ဆုံးဖွတျခကျြခမြှတျ မှုပိုမိုလှယျကူစမေယျ့အပွငျ လုပျငနျးစှမျးဆောငျရညျကိုပါ တိုးတကျစပေါ လိမျ့မယျ။
ကွညျ့လိုကျရငျ ရှုပျသလိုထငျရတဲ့ KPIs ဟာ တကယျတော့ ကနြျောတို့နစေ့ဉျဘဝမှာ ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ကိစ်စရပျတခြို့နဲ့ အလားသဏ်ဍာနျဆငျပါ တယျ။ ဥပမာကွညျ့အောငျ - ကနြျောတို့နထေိုငျမကောငျးလို့ဆရာဝနျသှားပွတယျဆိုပါစို့။ ဆရာဝနျက ကနြျောတို့က ဘာပွောမလဲ။ သခြောတာက ဘာဖွဈတာလဲ လို့စမေးမယျ။ နောကျပွီး သူဆကျလုပျမှာက ပေါငျခြိနျမယျ၊ သှေးတိုငျး မယျ၊ အဖြားတိုငျးမယျ၊ နှလုံးခုနျနှုနျးတှေ တိုငျးမယျမဟုတျပါ လား။ အဲဒီအခကျြအလကျတှဟော ကနြျောတို့ ဘယျလောကျကနျြးမာ သလဲဆိုတာရဲ့ညှနျးကိနျးတှမေဟုတျပါလား။ အလားတူပါပဲ။ KPIS တှကေိုကွညျ့ပွီး ကနြျောတို့ရဲ့လုပျငနျးကို ကနြျောတို့အကဲဖွတျလို့ ရနိုငျပါတယျ။
တကယျ့လကျတှမှေ့ာတော့ ကနြျောတို့ဟာ KPI ကို သခြောနားမလညျကွသလိုပဲ မလိုအပျဘဲ လြှောကျသုံးနကွေတာမြိုး ဖွဈနကွေပါတယျ။ အမြားအားဖွငျ့ KPI တှကေို ငှကွေေးဆိုငျရာကိနျးဂဏာနျးလောကျပဲ ယူဆထားကွတာမြိုးလဲရှိလရေဲ့။ ဒါပမေဲ့ အဲလိုစဉျးစားတာမှားပါတယျ။ KPI အတှကျ သတငျးအခကျြအလကျတှဟော လုပျငနျးအောငျမွငျဖို့ အတှကျ အကောငျးဆုံးအဖွပေေး နိုငျဖို့နရောပေါငျးစုံကရယူရတာဖွဈပါတယျ။ ရှုပျထှေးပွီး လကျဆုပျလကျကိုငျပွဖို့ခကျတဲ့ လုပျငနျးရဲ့အခကျြအလကျတှေ ကို KPIs တှသေုံးပွီး ခွရောခံတိုငျးတာလို့ရပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ လုပျငနျးအောငျမွငျဖို့အရမျးအရေးကွီးတဲ့အခကျြအလကျတှဟော ဘယျ အခွအေနကေနေ ဘယျအခွအေနအေထိ ရှလြေ့ားနသေလဲ ကွညျ့ပွီး စဉျးစားဆုံးဖွတျလို့ရတာပေါ့။
မကောငျးတာတဈခုက တိုငျးတာလို့ရတဲ့အရာတဈခုနဲ့ တိုငျးတာသငျ့တဲ့အရာတှကေ အမြားအားဖွငျ့ဆကျစပျလို့မရတာပါ။ လိုတဲ့သတငျးအခကျြ အလကျကဘာလဲရှာ၊ ပွီးတော့မှ Performance တိုငျးဖို့ Indicators ကို သခြောဒီဇိုငျးထုတျမယျဆိုရငျ အဲဒါဟာ KPI ပဲဖွဈပါလိမျ့မယျ။ အဲဒီ KPI ကို ဖျောထုတျပွီးအသုံးခရြမယျ့အစား ကုမ်ပဏီတှကေ ဘာလုပျကွသလဲဆိုတော့ရခေဲ (ICE)
နညျးလမျးကို သုံးကွပါတယျ။ အဲဒါက
(၁) Identify everything that is easy to measure and count
ဘယျအရာတှကေ တိုငျးတာလို့အလှယျတကူရရှိနိုငျမလဲ သခြောရှာဖှေ ဖျောထုတျမယျ။
(၂) Collect and report the data on everything that is easy to measure and count
- ပွီးရငျ အဲဒီအရာတှနေဲ့ပတျသကျတဲ့ သ တငျးအခကျြအလကျတှကေို စုဆောငျးပွီး အစီရငျခံစာပွုစုမယျ။
(၃) End up scratching your head thinking, ‘What on earth does this all mean and what are we going to do with all this performance data?’ - ခေါငျးကုတျပွီးစဉျးစားရပွီ (အဲဒီသတငျးအခကျြ အလကျတှကေ ဘာကိုပွောပွနတောလဲ။ အဲဒီအခကျြ အလကျတှကေို ကိုငျ ပွီး ငါဘာဆကျလုပျရမလဲပေါ့)
ကဲ။ မေးစရာရှိတာက မိတျဆှတေို့ကော။KPI ကို တကယျစနဈတကြ အသုံးခနြကွေပွီလား။ ရခေဲတုံးကွီးပဲလုပျနကွေ တာလား။
ဆုံးဖွတျခကျြမှနျမှနျကနျကနျခမြှတျဖို့အတှကျ မရှိမဖွဈ KPI
သခြောထိထိရောကျရောကျသုံးနိုငျမယျဆိုရငျ KPIs တှဟော ပိုကောငျးတဲ့၊ ပိုမှနျတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှကေို စိုးရိမျစိတျ အနညျးဆုံးနဲ့ခမြှတျနိုငျဖို့လိုအပျတဲ့အထောကျအထားတှေ၊ သတငျးအခကျြအလကျတှကေို ပေးစှမျးနိုငျပါတယျ။ စီးပှားရေးမှာ လုပျငနျးအတှအေ့ကွုံတှေ လိုတာမှနျတာပေါ့။နောကျပွီး တဈခါတလကေတြော့ လိုအပျတဲ့သတငျးအခကျြအလကျ တှမေရလိုကျဘဲနဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြခလြိုကျရတဲ့အခြိနျတှအေမြားကွီး ကွုံကွရမှာပါ။ အဲဒီအခြိနျမှာ အမှားအနညျးဆုံးနဲ့ သံသယရှငျးရှငျး၊ အပူအပငျ ကငျးကငျးနဲ့ မှနျကနျတဲ့ဆုံးဖွတျခကျြခဖြို့ကတြော့ KPIs တှမေရှိရငျ ခကျသှားပွီ။
(၁)KPIs တှကေိုသုံးပွီး လုပျငနျးအတှကျ အရေးကွီးတဲ့မေးခှနျးတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး အဖွရှောမယျ။
စီးပှားရေးလုပျငနျးတှအေနနေဲ့ KPI ရှိမှသာ လုပျငနျးအတှကျ အရေး ကွီးတဲ့မေးခှနျးတှကေို အဖွရှောနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ လုပျငနျးရဲ့မဟာဗြူ ဟာအလိုကျ ကိုယျ့လုပျငနျးဟာ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျကိုသှားမယျ့လမျး ကွောငျးပျေါမှာ ရှိနရေဲ့လားဆိုတာ သိရဖို့အတှကျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျပွနျမေး ရမယျ့မေးခှနျးတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ အဲဒီမေးခှနျးတှကေို သိပွီဆိုတာနဲ့ အဲဒီမေးခှနျးရဲ့ အဖွကေိုရှာဖို့ လိုအပျမယျ့သတငျးအခကျြအလကျတှရှောဖို့လှယျသှားပွီပေါ့။ လိုအပျတဲ့သတငျးအခကျြအလကျတှရေပွီဆိုရငျ လုပျငနျး နဲ့ကိုကျညီတဲ့ KPI ကိုဖျောထုတျပွီး လုပျငနျးရဲ့မဟာဗြူဟာထဲမှာထညျ့သုံးလို့ရပွီပေါ့။
KPI တှကေိုအသုံးခပြွီး လုပျငနျးစှမျးဆောငျရညျကို တိတိကကြ တိုငျးတာနိုငျသလိုပဲ တဈဖနျ
- ပွီးခဲ့တဲ့ကာလမှ ဘာရလဒျတှရေခဲ့တယျဆိုတာအခွခေံပွီး အနာဂတျမှာ တိုးတကျအောငျ ဘာတှဆေကျလုပျမယျပွငျဆငျလို့ရသလို
- ကိုယျ့လုပျငနျးရဲ့ Stakeholder တှကေို ရှငျးပွတာ၊ လုပျငနျးရဲ့ Compliance ဘယျလောကျဖွဈသလဲဆိုတာကို ဖျောပွနိုငျတာစတဲh အကြိုးကြေးဇူးတှရေပါလိမျ့မယျ။
- လိုအပျခကျြပျေါမှာ အာရုံစိုကျပွီး အားထုတျလုပျဆောငျစနေိုငျမှာဖွဈတဲ့အပွငျ Output ကိုလညျး ထိနျးခြုပျနိုငျစမှော ဖွဈပါတယျ။
(၂) KPIs ကိုသုံးပွီး စှမျးဆောငျရညျတိုးတကျအောငျလုပျကွမယျ
တကယျလို့သာ လုပျငနျးတှမှော လိုအပျတဲ့သတငျးအခကျြအလကျအပွညျ့အစုံရှိမယျဆို ပိုကောငျးတဲ့ဆုံးဖွတျခကျြတှခေမြှတျနိုငျမယျဆိုတာ ငွငျးစရာမရှိပါဘူး။ အဲဒီသတငျးအခကျြအလကျတှကေတဈဆငျ့ ဘာတှကေအလုပျဖွဈတယျ၊ ဘာတှကေ အလုပျမဖွဈဘူးဆိုတာ သငျယူလို့ရနိုငျမှာဖွဈပွီး စှမျးဆောငျရညျတကျလာစမှောဖွဈပါတယျ။ ဒါအပွငျ KPIs တှေ ဟာ တခွားအပွငျ လောကမှာ ဘာတှဖွေဈနလေဲဆိုတာကို သိစနေိုငျမယျ့အ ပွငျ လုပျငနျးကိုလမျးကွောငျးမှနျပျေါရှိနသေလားဆိုတာကို သခြော သိရှိစပေါလိမျ့မယျ။
(၃) ကိုယျ့လုပျငနျးရဲ့ Stakeholder တှကေို ရှငျးပွခွငျး လုပျငနျးရဲ့ Compliance ဘယျလောကျဖွဈသလဲဆိုတာကို ဖျောပွနိုငျခွငျး
KPIs တှအေနနေဲ့ လုပျငနျးရဲ့ Stakeholder တှကေို လိုအပျတဲ့သတငျးအခကျြအလကျတှပေေးနိုငျစှမျးသလိုပဲ လုပျငနျးဟာ ဘယျလောကျထိ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှနေဲ့အညီ လုပျဆောငျနသေလဲဆိုတာကိုသိစနေိုငျပါ တယျ။ အဲဒီရညျရှယျခကျြအတှကျ တိုငျး တာမယျဆိုရငျတော့ Regulators တှအေတှကျ လိုအပျမယျ့အစီရငျခံစာတှေ ညှနျကိနျးတှေ (ဥပမာအားဖွငျ့နှဈစဉျဘဏ်ဍာရေး စာရငျးတှေ၊ အကောငျ့တှနေဲ့ စှမျးဆောငျရညျအစီရငျခံ စာတှနေဲ့သကျဆိုငျတဲ့ အစီရငျခံစာတှေ) ကို မဖွဈမနပွေုစုရမှာဖွဈပါတယျ။
(၄) လိုအပျခကျြပျေါမှာအာရုံစိုကျပွီး အားထုတျလုပျဆောငျစနေိုငျမှာဖွဈ ခွငျးနဲ့ Output ကိုလညျး ထိနျးခြုပျနိုငျစနေိုငျခွငျး
KPIs တှကေိုသုံးပွီး ဝနျထမျးတှရေဲ့ အလအေ့ထကို အာရုံစိုကျနိုငျမှာ ဖွဈသလို သူတို့ရဲ့ Output ကိုလညျး စောငျ့ကွညျ့ထိနျး ခြုပျနိုငျမှာဖွဈပါ တယျ။ နညျးနညျးတော့ လူသားမဆနျဘူးလို့ ယူဆနိုငျသျောလညျး KPIs တှနေဲ့သာလြှငျ ဝနျထမျးနဲ့လုပျငနျးအကွား အပွုသဘောဆောငျတဲ့ Dialogue တှပွေုလုပျဖို့ပိုမိုအားကောငျးစမှောဖွဈပါတယျ။
ဥပမာအားဖွငျ့ မနျနဂြောတဈယောကျဟာ လုပျနညျးလုပျဟနျတဈခုနဲ့ ပတျသကျပွီး သိပျခေါငျးမာတယျပေါ့။ ဒါပမေဲ့ သူ့လုပျပုံလုပျနညျးနဲ့ပတျသကျ ပွီး သူ့ဝနျထမျးတှကေလညျး နညျးနညျးမှသဘောမတူဘူးဆိုပါစို့။ အဲလိုအ ခွအေနမြေိုးမှာ KPIs ကသာလြှငျ နှဈဘကျစလုံးအတှကျ ဘယျသူ့စဉျးစား ခကျြက မှနျကနျသလဲ၊ ဘယျသူ့ဆောငျရှကျခကျြကမှနျကနျသလဲဆိုတာ ဘကျ လိုကျမှုကငျးကငျးနဲ့ ဆုံးဖွတျပေးနိုငျပါလိမျ့မယျ။ အလားတူပဲ။
ဝနျထမျးတဈယောကျက သူလုပျရမယျ့လုပျငနျးတာဝနျကို သူမလုပျ ဘူးဆိုရငျ KPIs တှေ က သူ့ရဲ့အားသာခကျြ၊ အားနညျးခကျြတှကေို ခကျြနဲ့လကျနဲ့ပွောပွနိုငျစပေါလိမျ့မယျ။ ထငျမွငျယူဆခကျြသကျ သကျဆိုတာက အငွငျးပှားနိုငျစရာတှေ ဖွဈနတောကို။ KPIs နဲ့ကတြော့ ဘယျသူမှငွငျးလို့မရတော့ဘူးပေါ့။¬¬
KPI တွေဟာ လုပ်ငန်းတွေကို သူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ရည်မှန်း ချက်၊ ပန်းတိုင်တွေအပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ထိ ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီလဲဆိုတာကို နားလည်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီးအကျယ်တဝင့်ပြောရရင် KPI တွေဟာ လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ သူတို့သွားရမည့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အပေါ်မှာ သွားနေပြီလား၊ ဘယ်နားရောက်နေပြီလဲလို့ သူတို့နဲ့သက်ဆိုင် သူတွေကို ပြောပြ ပေးတဲ့ အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက်တွေပဲဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါ့အပြင် KPIs တွေဟာ လုပ်ငန်းတွေကို ရှုပ်ထွေးလှတဲ့နားလည်ဖို့ ခက်လှတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အောင်မြင်စွာစွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေကို ပိုမိုနားလည်ဖို့လွယ်ကူတဲ့ Indicators တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ် မှုပိုမိုလွယ်ကူစေမယ့်အပြင် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပါ တိုးတက်စေပါ လိမ့်မယ်။
ကြည့်လိုက်ရင် ရှုပ်သလိုထင်ရတဲ့ KPIs ဟာ တကယ်တော့ ကျနော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စရပ်တချို့နဲ့ အလားသဏ္ဍာန်ဆင်ပါ တယ်။ ဥပမာကြည့်အောင် - ကျနော်တို့နေထိုင်မကောင်းလို့ဆရာဝန်သွားပြတယ်ဆိုပါစို့။ ဆရာဝန်က ကျနော်တို့က ဘာပြောမလဲ။ သေချာတာက ဘာဖြစ်တာလဲ လို့စမေးမယ်။ နောက်ပြီး သူဆက်လုပ်မှာက ပေါင်ချိန်မယ်၊ သွေးတိုင်း မယ်၊ အဖျားတိုင်းမယ်၊ နှလုံးခုန်နှုန်းတွေ တိုင်းမယ်မဟုတ်ပါ လား။ အဲဒီအချက်အလက်တွေဟာ ကျနော်တို့ ဘယ်လောက်ကျန်းမာ သလဲဆိုတာရဲ့ညွှန်းကိန်းတွေမဟုတ်ပါလား။ အလားတူပါပဲ။ KPIS တွေကိုကြည့်ပြီး ကျနော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကို ကျနော်တို့အကဲဖြတ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။
တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ ကျနော်တို့ဟာ KPI ကို သေချာနားမလည်ကြသလိုပဲ မလိုအပ်ဘဲ လျှောက်သုံးနေကြတာမျိုး ဖြစ်နေကြပါတယ်။ အများအားဖြင့် KPI တွေကို ငွေကြေးဆိုင်ရာကိန်းဂဏာန်းလောက်ပဲ ယူဆထားကြတာမျိုးလဲရှိလေရဲ့။ ဒါပေမဲ့ အဲလိုစဉ်းစားတာမှားပါတယ်။ KPI အတွက် သတင်းအချက်အလက်တွေဟာ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ အတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေပေး နိုင်ဖို့နေရာပေါင်းစုံကရယူရတာဖြစ်ပါတယ်။ ရှုပ်ထွေးပြီး လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြဖို့ခက်တဲ့ လုပ်ငန်းရဲ့အချက်အလက်တွေ ကို KPIs တွေသုံးပြီး ခြေရာခံတိုင်းတာလို့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အရမ်းအရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေဟာ ဘယ် အခြေအနေကနေ ဘယ်အခြေအနေအထိ ရွေ့လျားနေသလဲ ကြည့်ပြီး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်လို့ရတာပေါ့။
မကောင်းတာတစ်ခုက တိုင်းတာလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ တိုင်းတာသင့်တဲ့အရာတွေက အများအားဖြင့်ဆက်စပ်လို့မရတာပါ။ လိုတဲ့သတင်းအချက် အလက်ကဘာလဲရှာ၊ ပြီးတော့မှ Performance တိုင်းဖို့ Indicators ကို သေချာဒီဇိုင်းထုတ်မယ်ဆိုရင် အဲဒါဟာ KPI ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ KPI ကို ဖော်ထုတ်ပြီးအသုံးချရမယ့်အစား ကုမ္ပဏီတွေက ဘာလုပ်ကြသလဲဆိုတော့ရေခဲ (ICE)
နည်းလမ်းကို သုံးကြပါတယ်။ အဲဒါက
ဘယ်အရာတွေက တိုင်းတာလို့အလွယ်တကူရရှိနိုင်မလဲ သေချာရှာဖွေ ဖော်ထုတ်မယ်။
- ပြီးရင် အဲဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သ တင်းအချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းပြီး အစီရင်ခံစာပြုစုမယ်။
(၃) End up scratching your head thinking, ‘What on earth does this all mean and what are we going to do with all this performance data?’ - ခေါင်းကုတ်ပြီးစဉ်းစားရပြီ (အဲဒီသတင်းအချက် အလက်တွေက ဘာကိုပြောပြနေတာလဲ။ အဲဒီအချက် အလက်တွေကို ကိုင် ပြီး ငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲပေါ့)
ကဲ။ မေးစရာရှိတာက မိတ်ဆွေတို့ကော။KPI ကို တကယ်စနစ်တကျ အသုံးချနေကြပြီလား။ ရေခဲတုံးကြီးပဲလုပ်နေကြ တာလား။
ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်ချမှတ်ဖို့အတွက် မရှိမဖြစ် KPI
သေချာထိထိရောက်ရောက်သုံးနိုင်မယ်ဆိုရင် KPIs တွေဟာ ပိုကောင်းတဲ့၊ ပိုမှန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို စိုးရိမ်စိတ် အနည်းဆုံးနဲ့ချမှတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အထောက်အထားတွေ၊ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးမှာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေ လိုတာမှန်တာပေါ့။နောက်ပြီး တစ်ခါတလေကျတော့ လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက် တွေမရလိုက်ဘဲနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေအများကြီး ကြုံကြရမှာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ အမှားအနည်းဆုံးနဲ့ သံသယရှင်းရှင်း၊ အပူအပင် ကင်းကင်းနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ကျတော့ KPIs တွေမရှိရင် ခက်သွားပြီ။
(၁)KPIs တွေကိုသုံးပြီး လုပ်ငန်းအတွက် အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဖြေရှာမယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ KPI ရှိမှသာ လုပ်ငန်းအတွက် အရေး ကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေကို အဖြေရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းရဲ့မဟာဗျူ ဟာအလိုက် ကိုယ့်လုပ်ငန်းဟာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုသွားမယ့်လမ်း ကြောင်းပေါ်မှာ ရှိနေရဲ့လားဆိုတာ သိရဖို့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်မေး ရမယ့်မေးခွန်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီမေးခွန်းတွေကို သိပြီဆိုတာနဲ့ အဲဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေကိုရှာဖို့ လိုအပ်မယ့်သတင်းအချက်အလက်တွေရှာဖို့လွယ်သွားပြီပေါ့။ လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေရပြီဆိုရင် လုပ်ငန်း နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ KPI ကိုဖော်ထုတ်ပြီး လုပ်ငန်းရဲ့မဟာဗျူဟာထဲမှာထည့်သုံးလို့ရပြီပေါ့။
KPI တွေကိုအသုံးချပြီး လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိတိကျကျ တိုင်းတာနိုင်သလိုပဲ တစ်ဖန်
- ပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှ ဘာရလဒ်တွေရခဲ့တယ်ဆိုတာအခြေခံပြီး အနာဂတ်မှာ တိုးတက်အောင် ဘာတွေဆက်လုပ်မယ်ပြင်ဆင်လို့ရသလို
- ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ Stakeholder တွေကို ရှင်းပြတာ၊ လုပ်ငန်းရဲ့ Compliance ဘယ်လောက်ဖြစ်သလဲဆိုတာကို ဖော်ပြနိုင်တာစတဲh အကျိုးကျေးဇူးတွေရပါလိမ့်မယ်။
- လိုအပ်ချက်ပေါ်မှာ အာရုံစိုက်ပြီး အားထုတ်လုပ်ဆောင်စေနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင် Output ကိုလည်း ထိန်းချုပ်နိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) KPIs ကိုသုံးပြီး စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်အောင်လုပ်ကြမယ်
တကယ်လို့သာ လုပ်ငန်းတွေမှာ လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံရှိမယ်ဆို ပိုကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်နိုင်မယ်ဆိုတာ ငြင်းစရာမရှိပါဘူး။ အဲဒီသတင်းအချက်အလက်တွေကတစ်ဆင့် ဘာတွေကအလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ဘာတွေက အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာ သင်ယူလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်တက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် KPIs တွေ ဟာ တခြားအပြင် လောကမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကို သိစေနိုင်မယ့်အ ပြင် လုပ်ငန်းကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရှိနေသလားဆိုတာကို သေချာ သိရှိစေပါလိမ့်မယ်။
(၃) ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ Stakeholder တွေကို ရှင်းပြခြင်း လုပ်ငန်းရဲ့ Compliance ဘယ်လောက်ဖြစ်သလဲဆိုတာကို ဖော်ပြနိုင်ခြင်း
KPIs တွေအနေနဲ့ လုပ်ငန်းရဲ့ Stakeholder တွေကို လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးနိုင်စွမ်းသလိုပဲ လုပ်ငန်းဟာ ဘယ်လောက်ထိ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီ လုပ်ဆောင်နေသလဲဆိုတာကိုသိစေနိုင်ပါ တယ်။ အဲဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက် တိုင်း တာမယ်ဆိုရင်တော့ Regulators တွေအတွက် လိုအပ်မယ့်အစီရင်ခံစာတွေ ညွှန်ကိန်းတွေ (ဥပမာအားဖြင့်နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေး စာရင်းတွေ၊ အကောင့်တွေနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အစီရင်ခံ စာတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အစီရင်ခံစာတွေ) ကို မဖြစ်မနေပြုစုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၄) လိုအပ်ချက်ပေါ်မှာအာရုံစိုက်ပြီး အားထုတ်လုပ်ဆောင်စေနိုင်မှာဖြစ် ခြင်းနဲ့ Output ကိုလည်း ထိန်းချုပ်နိုင်စေနိုင်ခြင်း
KPIs တွေကိုသုံးပြီး ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အလေ့အထကို အာရုံစိုက်နိုင်မှာ ဖြစ်သလို သူတို့ရဲ့ Output ကိုလည်း စောင့်ကြည့်ထိန်း ချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်။ နည်းနည်းတော့ လူသားမဆန်ဘူးလို့ ယူဆနိုင်သော်လည်း KPIs တွေနဲ့သာလျှင် ဝန်ထမ်းနဲ့လုပ်ငန်းအကြား အပြုသဘောဆောင်တဲ့ Dialogue တွေပြုလုပ်ဖို့ပိုမိုအားကောင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် မန်နေဂျာတစ်ယောက်ဟာ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိပ်ခေါင်းမာတယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းနဲ့ပတ်သက် ပြီး သူ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်း နည်းနည်းမှသဘောမတူဘူးဆိုပါစို့။ အဲလိုအ ခြေအနေမျိုးမှာ KPIs ကသာလျှင် နှစ်ဘက်စလုံးအတွက် ဘယ်သူ့စဉ်းစား ချက်က မှန်ကန်သလဲ၊ ဘယ်သူ့ဆောင်ရွက်ချက်ကမှန်ကန်သလဲဆိုတာ ဘက် လိုက်မှုကင်းကင်းနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အလားတူပဲ။
ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က သူလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတာဝန်ကို သူမလုပ် ဘူးဆိုရင် KPIs တွေ က သူ့ရဲ့အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေကို ချက်နဲ့လက်နဲ့ပြောပြနိုင်စေပါလိမ့်မယ်။ ထင်မြင်ယူဆချက်သက် သက်ဆိုတာက အငြင်းပွားနိုင်စရာတွေ ဖြစ်နေတာကို။ KPIs နဲ့ကျတော့ ဘယ်သူမှငြင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့။¬¬
ဗုဒ်ဓဘာသာအယူ မှာ မိဘကြေးဇူးဟာ မွငျ့မိုရျ မက ကွီ
“ဗုဒ်ဓဘာသာအယူ မှာ မိဘကြေးဇူးဟာ မွငျ့မိုရျ မက ကွီးမွတျပါတယျ။ တဝကျ မှနျပါတယျ “
ဒါပမေဲ့ အမွဲ မမှနျပါဘူး။
မိဘ ကလညျး မိဘ တာဝနျ ကပြှေနျ မှပါ။ အဲ့အတှကျ ဘာသာတရားနဲ့ ညှိစှနျးလို့ အရှဲ့တိုကျ ပွောဆိုခွငျး မဟုတျပါဘူး။ မိဘ နဲ့ သားသမီး ဆိုတာ ဘဝ ရစေကျ ရှိလို့ ဆုံရတဲ့ သံသယ စကျဝနျးထဲက ခရီးသညျတှပေါ။ ဗုဒ်ဓဘာသာ အယူမှာ လူတဈဦး ကှယျလှနျခွငျး နဲ့ မှေးဖှားခွငျး နိမိတျကွားမှာ မိဘကလဲ နောငျ ဘဝ မှာ ကိုယျမှေးခဲ့တဲ့ ခန်ဓာ ကိုယျ ထဲက သားသမီးရဲ့ သားသမီး ပွနျဖွဈနိုငျတာပါပဲ။ တဘဝ နဲ့ တခန်ဓာကွားမှာ လူဖွဈခွငျးအတှကျ “ ငါ့မိဘ”ဆိုတဲ့ မာနျတှေ ထားနဖေို့မလိုပါဘူး ... မဟုတျလား နော့...
ပေးဆပျတဲ့ ခန်ဓာ ကိုယျရဲ့ နာကငျြမှု နဲ့ တာဝနျကပြှေနျခွငျး ဝတ်တရားတှေ အားလုံး အတှကျ မိဘကြေးဇူးဟာ ဆပျမကုနျအောငျ ကွီးမွတျတယျ လို့ ဆိုလိုခွငျးဖွဈပါလိမျ့မယျ။ မှေးပေးလိုကျရုံနဲ့ မိဘ တာဝနျ မကပြှေနျသှားနိုငျ ပါဘူး။ အမေ တဈယောကျရဲ့ ကလေးမီးဖှားခွငျး နာကငျြ မှု နဲ့ အဖေ တဈယောကျရဲ့ ပခုံး ထမျး တာဝနျတှေ ပွညျ့လာခွငျး အရာ နှဈခုပေါငျးစပျလို့ လူသားတဈယောကျ မှေးဖှားလာတဲ့ အခါ မိဘတာဝနျ ကို ပွညျ့ပွညျ့ဝဝ ယူနိုငျဖို့ သာ ပိုခကျခဲ တာပါ။ ကလေးတဈယောကျအတှကျ Physical Support လို့ချေါတဲ့ ထမငျးကြှေး ကြောငျးထားပေးရုံအပွငျ Mental Support အတှကျ အတှေးအချေါ ပိုငျးဆိုငျရာ ဆုံးမ ပဲ့ပွငျမှုတှေ အပွငျ သငျကွားနားသှငျးမှုတှကေိုပါ သိပျအစှနျး မရောကျနဖေို့ လိုပါတယျ။
အဆုံးမ မတျောရငျ ပရမျးပတာ နဲ့ အောကျခွလှေတျနတေတျသလို အဆုံးမ လှနျပွနျရငျလညျး ကိုယျ့သားသမီးဟာ သာမနျထကျ ခြာ သှားတတျပါတယျ။ သားသမီးရှိတဲ့ မိဘတိုငျး ကိုယျ့ကိုကိုယျ ပွနျမေးကွညျ့ပါ။ ဆုံးမတာ နဲ့ နှိပျစကျတာ ကို သညျးကှဲ ရဲ့လား?
ဆုံးမသလို နဲ့ နှိပျစကျခွငျး လို့ ဆိုတဲ့ အခါ Physically Abuse (ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ အရ)
Mentally Abuse (စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အရ)
အရှတေို့ငျး နိုငျငံနဲ့ အာရှမှာတော့ သားသမီးကို ပွောမရ ဆိုမရ ရငျ ရိုကျနှကျတတျကွတာ သဘာဝပါပဲ။ မွနျမာပွညျမှာလညျး ထို့အတူ ဖွဈသလို အဖေ သို့မဟုတျ အမေ ရိုကျတာ မခံဖူးတဲ့ သားသမီး ရှိမယျတောငျ မထငျပါဘူး။ သားသမီးကို လိမ်မာစခေငျြလို့ ၊ နားလညျစခေငျြလို့ ဆိုတဲ့ စိတျတခုနဲ့ ဆုံးမတဲ့ အခါ ကိုယျ့ရဲ့ အတ်တစိတျ မပါဖို့ အရမျး အရေးကွီးပါတယျ။ အဲ့ဒါဟာ စိတျဖွလေကျပြောကျ သို့မဟုတျ ထှကျပေါကျရှာ ရိုကျနှကျခွငျးပါပဲ။
စိတျထဲမှာ ဖိအားတှေ အရမျးမြားနတေဲ့အခါ
ကလေးက အမှား အသေး လေး လုပျတာမွငျတာနဲ့ လကျပါပွီး တနျးရိုကျ တဲ့ မိဘတှေ ရှိကို ရှိပါတယျ။ ရိုးရိုးတနျးတနျး အပွဈပေးခငျြလို့ ဆိုတာထကျ စိတျထဲက ပါသလို အားရှိပါးရှိနဲ့ ခေါငျးအုံးရိုကျသလို တှယျ တာမြိုး ပါ။ လကျ နဲ့ အားမရလို့ တံမွကျစညျးရိုး ၊ သဈသား တုတျ ၊ နံရံ နဲ့ ဆောငျ့တာတို့ လိုတာထကျ ပိုလာရငျ ၊ သှေးထှကျသံယိုတှထေိ ဖွဈလာရငျ ဒါက အိမျတှငျး ကလေး သူငယျ နှိပျစကျမှု (Child Abuse) ပါ ။ အမေ ဖွဈနလေို့ ၊ အဖေ ဖွဈနလေို့ ရိုကျသမြှ ၊ လုပျသမြှ ခံနရေမယျ ဆိုတဲ့ ဥပဒေ မရှိပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ အရိုးစှဲနတေဲ့ ဓလေ့ တော့ ရှိပါတယျ။ မွနျမာ Logic မှာ မိဘ ပွောသမြှ ၊ လုပျသမြှ အမှနျစကား ခညျြး ပါပဲ ။ ဒါကွောငျ့လဲ တခြို့ မိဘတှရေဲ့ အတ်တအရိပျထဲက စိတျရော ကိုယျပါ အနှိပျစကျခံ လူတှဟော သားသမီး တှေ ဖွဈလာတာပါ။ သူတို့ရဲ့ ဒေါသ တှကေို သားသမီး တှေ အပျေါ တနညျးနညျး နဲ့ ဖှငျ့ခြ လိုကျရတဲ့ အခါ နသောထိုငျသာရှိသှားတတျကွပါတယျ။
ပွောပွောဆိုဆိုနဲ့ သားသမီးကို အပွဈတငျစကားတှေ တောကျလြှောကျဆိုပွီး ကိုယျ ဘဝမှာ ပငျပနျးသမြှ အားလုံး အတှကျ မငျးက တရားခံလို့ သတျမှတျ စကား ဆိုပါလိမျ့မယျ။ ကလေး ဆိုတာ ငို တာ ၊ စားတာ နဲ့ ဆော့တာ ဘာမှ မသိတဲ့ အရှယျပါ ။ ငိုလို့ ပိုရိုကျတယျ၊ ဆော့လို့ ပိုရိုကျတယျ ဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြတှေ က အဓိပ်ပာယျလုံးဝ ကို မရှိတာပါ ။ ငိုလို့ မခြော့နိုငျရငျ ပဈထားလိုကျပါ၊ ငိုတိုငျး မခြော့တာ သိရငျ အငိုရပျပွီး နောကျ အကငျြ့ရလာပါလိမျ့မယျ။ “ငါ ကြှေးတာ စား ၊ ငါ ပွောတာ နားထောငျ ၊ ငါ ရိုကျသမြှခံ “ဆိုလို့ကတော့ ကိုယျမှေးထားတာ နှားလား ၊ လူလား တှေးကွညျ့ပါ။
“ Children are not joke “ ကလေးတှဟော ပြျောစေ ပွကျစေ ဆိုပွီး မှေးထုတျလိုကျတာမဟုတျဘူး။ မိသားစုဘဝ လိုခငျြပါတယျ ၊ အမအေဖေ ဖွဈဖို့ အဆငျ့သငျ့ဖွဈပါပွီ ဆိုပွီး အိမျထောငျပွုခဲ့ကွတာပဲ မဟုတျလား? နှဈဦးနှဈဖကျ ပေါငျးသငျးခဲ့ကွတာပဲ မလား ?
မတျောမဆ ဆိုပွီး ကလေးက ဗိုကျထဲ ဝငျ ဥသှားတာမြိုး မဟုတျဘူး။ ကိုယျတိုငျ ကိုယျကြ ဒီလူသား ဖွဈအောငျကို လိငျမှုကိစ်စကို ပွုခဲ့လို့ ကလေး ဆိုတာ ဖွဈတညျလာတာပဲ။ အဲ့ အတှကျ အခြိနျမတနျသေးဘူး ထငျရငျ ၊ တာဝနျမခံနိုငျသေးဘူး ထငျရငျ ကာကှယျခဲ့ပါ။ ဆေးပညာ လောက ဆရာဝနျတှေ နဲ့ သခြောတိုငျပငျပွီး ဖကျြခခြဲ့လိုကျပါ။ မှေးပွီးမှ တော့ “ နငျ့ကို မလိုခငျြပဲ ရတယျ ၊ နငျ့ကွောငျ့ ငါပိုပငျပနျးရတယျ “ လို့ မြား ကိုယျ့သှေးသားကို ဘယျတော့မှ အပွဈ မတငျပါနဲ့။ ကလေး တဈယောကျအတှကျ လူဖွဈရခွငျး အဓိပ်ပာယျမဲ့ အမြားကွီး မဲ့သှားစပေါတယျ။ လူကွီးတှလေိုတော့ ကလေးတှကေ မတှေးတတျပါဘူး၊ သူဘာလို့ လူ ဖွဈလာသလဲ ဆိုတာကို ပေါ့ ။ အဲ့ အတှကျ “ငါ ရှိနလေို့ ငါ မိဘ ပငျပနျးရတယျ၊ ငါ့မိဘက ငါ့ကို မခဈြဘူး “ လို့ ပဲ တှေးမှာပါ။ ကိုယျ့ကို မကွိုကျနှဈသကျဘူး လို့ ထငျရတဲ့ ပတျဝနျးကငျြနဲ့ မိဘ အရိပျအောကျမှာ ကွီးပွငျးလာရတဲ့ သားသမီးတှဟော စိတျပိုငျးဆိုငျရာ မှာ အမြားကွီး ခြို့တဲ့ သှားပါတယျ။ သိမျငယျစိတျ ၊ အားငယျစိတျ၊ ကိုယျ့ကိုကိုယျ အထငျမကွီးတဲ့ စိတျ ၊ မြှျောလငျ့ခကျြ မဲ့နတေဲ့ စိတျ ၊ မူမမှနျတဲ့ စိတျ၊ တောငျစဉျရမေရ တှေးနတေတျတဲ့ စိတျ၊ လူကွောကျတဲ့ စိတျ ၊ သှေးသားထကျ သူစိမျးကို ပိုမငျတဲ့ စိတျ၊ အပွငျလောက ကိုပိုခုံမငျတဲ့ စိတျ ၊ အပေါငျးအသငျး မကျတဲ့ စိတျ နဲ့ အဆိုးဆုံးက အရာရာတိုငျးမှာ ပြော့ညံ့သှားတဲ့ စိတျ တို့လို မြိုး သားသမီး သို့မဟုတျ လူငယျ တဈဦးရဲ့ စိတျဟာ မိဘက ပေးခဲ့တဲ့ စိတျဒဏျရာ သို့မဟုတျ Mentally Abuse လုပျခံရခွငျး ရဲ့ Side Effect တှပေါ။
မိဘ ဖွဈနရေခွငျး ရဲ့ အကွောငျးအရာဟာ ကိုယျတိုငျရှေးခယျြမှုပါပဲ။ မိဘ ကြေးဇူး ဘယျလောကျကွီးပါတယျ ပွောပွော ...၊ မိဘ တာဝနျ ဟာ သားသမီးအတှကျ စိတျရော ကိုယျအတှကျပါ ကနြေိုငျမှပဲ ကြေးဇူးကွီးနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ကိုယျ့ သားသမီး ကံကွီးထိုကျဖို့ အကုသိုလျ တှေ ခညျြး အလုံးလိုကျ အရငျးလိုကျ နဲ့ စတငျခဲ့ပွီး မှ တခြိနျက ကွောငျဟာ ကြား ဖွဈလာရငျ “ အသား နဲ့ ငါး “ ခြော့ ပေးလို့ရတဲ့ အရှယျ ကြျောသှားပွီး ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ စံပွ မိဘ ဖွဈခွငျး / မဖွဈခွငျးထကျ ကိုယျ့ ရှေးခယျြမှု အတှကျ ကိုယျ့ Generation မှာ တာဝနျကပြှေနျ ဖို့ပါပဲ။ ဘာသာတရားတိုငျး မှာတော့ လိမျတဲ့သူဟာ လိမျတာပဲ၊ ခိုးတဲ့သူက ခိုးတာပဲ ၊ ဆိုးတဲ့သူက ဆိုးတာပဲ .. မကောငျးတဲ့သူက မကောငျးတာပါပဲ။ မိဘ ဖွဈလို့ သားသမီး ဖွဈလို့ ဆိုတဲ့ အောကျက အမွဲမှနျခွငျး ၊ ကောငျးခွငျး ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ “သားသမီး မကောငျး ၊ မိဘ ခေါငျး “ဆိုကွပမေဲ့ ဒါဟာ လောကီလောက ထဲက “သောကျပိုစကား”ပါ ။ ဗုဒ်ဓဘာသာအယူ မှာ တော့ Karma (ကံကွမ်မာ) ဆိုတာ - “ကိုယျ မကောငျး ကိုယျခံ၊ ကိုယျ ကောငျး ကိုယျခံ” ပါပဲ ။ ဘယျသူ မှအမွဲ မမှနျပါဘူး ...။
“ဗုဒ္ဓဘာသာအယူ မှာ မိဘကျေးဇူးဟာ မြင့်မိုရ် မက ကြီးမြတ်ပါတယ်။ တဝက် မှန်ပါတယ် “
ဒါပေမဲ့ အမြဲ မမှန်ပါဘူး။
မိဘ ကလည်း မိဘ တာဝန် ကျေပွန် မှာပါ။ အဲ့အတွက် ဘာသာတရားနဲ့ ညှိစွန်းလို့ အရွဲ့တိုက် ပြောဆိုခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ မိဘ နဲ့ သားသမီး ဆိုတာ ဘဝ ရေစက် ရှိလို့ ဆုံရတဲ့ သံသယ စက်ဝန်းထဲက ခရီးသည်တွေပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အယူမှာ လူတစ်ဦး ကွယ်လွန်ခြင်း နဲ့ မွေးဖွားခြင်း နိမိတ်ကြားမှာ မိဘကလဲ နောင် ဘဝ မှာ ကိုယ်မွေးခဲ့တဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ် ထဲက သားသမီးရဲ့ သားသမီး ပြန်ဖြစ်နိုင်တာပါပဲ။ တဘဝ နဲ့ တခန္ဓာကြားမှာ လူဖြစ်ခြင်းအတွက် “ ငါ့မိဘ”ဆိုတဲ့ မာန်တွေ ထားနေဖို့မလိုပါဘူး ... မဟုတ်လား နော့...
ပေးဆပ်တဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ်ရဲ့ နာကျင်မှု နဲ့ တာဝန်ကျေပွန်ခြင်း ဝတ္တရားတွေ အားလုံး အတွက် မိဘကျေးဇူးဟာ ဆပ်မကုန်အောင် ကြီးမြတ်တယ် လို့ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မွေးပေးလိုက်ရုံနဲ့ မိဘ တာဝန် မကျေပွန်သွားနိုင် ပါဘူး။ အမေ တစ်ယောက်ရဲ့ ကလေးမီးဖွားခြင်း နာကျင် မှု နဲ့ အဖေ တစ်ယောက်ရဲ့ ပခုံး ထမ်း တာဝန်တွေ ပြည့်လာခြင်း အရာ နှစ်ခုပေါင်းစပ်လို့ လူသားတစ်ယောက် မွေးဖွားလာတဲ့ အခါ မိဘတာဝန် ကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ယူနိုင်ဖို့ သာ ပိုခက်ခဲ တာပါ။ ကလေးတစ်ယောက်အတွက် Physical Support လို့ခေါ်တဲ့ ထမင်းကျွေး ကျောင်းထားပေးရုံအပြင် Mental Support အတွက် အတွေးအခေါ် ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးမ ပဲ့ပြင်မှုတွေ အပြင် သင်ကြားနားသွင်းမှုတွေကိုပါ သိပ်အစွန်း မရောက်နေဖို့ လိုပါတယ်။
အဆုံးမ မတော်ရင် ပရမ်းပတာ နဲ့ အောက်ခြေလွတ်နေတတ်သလို အဆုံးမ လွန်ပြန်ရင်လည်း ကိုယ့်သားသမီးဟာ သာမန်ထက် ချာ သွားတတ်ပါတယ်။ သားသမီးရှိတဲ့ မိဘတိုင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးကြည့်ပါ။ ဆုံးမတာ နဲ့ နှိပ်စက်တာ ကို သည်းကွဲ ရဲ့လား?
ဆုံးမသလို နဲ့ နှိပ်စက်ခြင်း လို့ ဆိုတဲ့ အခါ Physically Abuse (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရ)
Mentally Abuse (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရ)
အရှေ့တိုင်း နိုင်ငံနဲ့ အာရှမှာတော့ သားသမီးကို ပြောမရ ဆိုမရ ရင် ရိုက်နှက်တတ်ကြတာ သဘာဝပါပဲ။ မြန်မာပြည်မှာလည်း ထို့အတူ ဖြစ်သလို အဖေ သို့မဟုတ် အမေ ရိုက်တာ မခံဖူးတဲ့ သားသမီး ရှိမယ်တောင် မထင်ပါဘူး။ သားသမီးကို လိမ္မာစေချင်လို့ ၊ နားလည်စေချင်လို့ ဆိုတဲ့ စိတ်တခုနဲ့ ဆုံးမတဲ့ အခါ ကိုယ့်ရဲ့ အတ္တစိတ် မပါဖို့ အရမ်း အရေးကြီးပါတယ်။ အဲ့ဒါဟာ စိတ်ဖြေလက်ပျောက် သို့မဟုတ် ထွက်ပေါက်ရှာ ရိုက်နှက်ခြင်းပါပဲ။
စိတ်ထဲမှာ ဖိအားတွေ အရမ်းနေတဲ့အခါ
ကလေးက အမှား အသေး လေး လုပ်တာမြင်တာနဲ့ လက်ပါပြီး တန်းရိုက် တဲ့ မိဘတွေ ရှိကို ရှိပါတယ်။ ရိုးရိုးတန်းတန်း အပြစ်ပေးချင်လို့ ဆိုတာထက် စိတ်ထဲက ပါသလို အားရှိပါးရှိနဲ့ ခေါင်းအုံးရိုက်သလို တွယ် တာမျိုး ပါ။ လက် နဲ့ အားမရလို့ တံမြက်စည်းရိုး ၊ သစ်သား တုတ် ၊ နံရံ နဲ့ ဆောင့်တာတို့ လိုတာထက် ပိုလာရင် ၊ သွေးထွက်သံယိုတွေထိ ဖြစ်လာရင် ဒါက အိမ်တွင်း ကလေး သူငယ် နှိပ်စက်မှု (Child Abuse) ပါ ။ အမေ ဖြစ်နေလို့ ၊ အဖေ ဖြစ်နေလို့ ရိုက်သမျှ ၊ လုပ်သမျှ ခံနေရမယ် ဆိုတဲ့ ဥပဒေ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အရိုးစွဲနေတဲ့ ဓလေ့ တော့ ရှိပါတယ်။ မြန်မာ Logic မှာ မိဘ ပြောသမျှ ၊ လုပ်သမျှ အမှန်စကား ချည်း ပါပဲ ။ ဒါကြောင့်လဲ တချို့ မိဘတွေရဲ့ အတ္တအရိပ်ထဲက စိတ်ရော ကိုယ်ပါ အနှိပ်စက်ခံ လူတွေဟာ သားသမီး တွေ ဖြစ်လာတာပါ။ သူတို့ရဲ့ ဒေါသ တွေကို သားသမီး တွေ အပေါ် တနည်းနည်း နဲ့ ဖွင့်ချ လိုက်ရတဲ့ အခါ နေသာထိုင်သာရှိသွားတတ်ကြပါတယ်။
ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ သားသမီးကို အပြစ်တင်စကားတွေ တောက်လျှောက်ဆိုပြီး ကိုယ် ဘဝမှာ ပင်ပန်းသမျှ အားလုံး အတွက် မင်းက တရားခံလို့ သတ်မှတ် စကား ဆိုပါလိမ့်မယ်။ ကလေး ဆိုတာ ငို တာ ၊ စားတာ နဲ့ ဆော့တာ ဘာမှ မသိတဲ့ အရွယ်ပါ ။ ငိုလို့ ပိုရိုက်တယ်၊ ဆော့လို့ ပိုရိုက်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ က အဓိပ္ပာယ်လုံးဝ ကို မရှိတာပါ ။ ငိုလို့ မချော့နိုင်ရင် ပစ်ထားလိုက်ပါ၊ ငိုတိုင်း မချော့တာ သိရင် အငိုရပ်ပြီး နောက် အကျင့်ရလာပါလိမ့်မယ်။ “ငါ ကျွေးတာ စား ၊ ငါ ပြောတာ နားထောင် ၊ ငါ ရိုက်သမျှခံ “ဆိုလို့ကတော့ ကိုယ်မွေးထားတာ နွားလား ၊ လူလား တွေးကြည့်ပါ။
“ Children are not joke “ ကလေးတွေဟာ ပျော်စေ ပြက်စေ ဆိုပြီး မွေးထုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ မိသားစုဘဝ လိုချင်ပါတယ် ၊ အမေအဖေ ဖြစ်ဖို့ အဆင့်သင့်ဖြစ်ပါပြီ ဆိုပြီး အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်လား? နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပေါင်းသင်းခဲ့ကြတာပဲ မလား ?
မတော်မဆ ဆိုပြီး ကလေးက ဗိုက်ထဲ ဝင် ဥသွားတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ ဒီလူသား ဖြစ်အောင်ကို လိင်မှုကိစ္စကို ပြုခဲ့လို့ ကလေး ဆိုတာ ဖြစ်တည်လာတာပဲ။ အဲ့ အတွက် အချိန်မတန်သေးဘူး ထင်ရင် ၊ တာဝန်မခံနိုင်သေးဘူး ထင်ရင် ကာကွယ်ခဲ့ပါ။ ဆေးပညာ လောက ဆရာဝန်တွေ နဲ့ သေချာတိုင်ပင်ပြီး ဖျက်ချခဲ့လိုက်ပါ။ မွေးပြီးမှ တော့ “ နင့်ကို မလိုချင်ပဲ ရတယ် ၊ နင့်ကြောင့် ငါပိုပင်ပန်းရတယ် “ လို့ များ ကိုယ့်သွေးသားကို ဘယ်တော့မှ အပြစ် မတင်ပါနဲ့။ ကလေး တစ်ယောက်အတွက် လူဖြစ်ရခြင်း အဓိပ္ပာယ်မဲ့ အများကြီး မဲ့သွားစေပါတယ်။ လူကြီးတွေလိုတော့ ကလေးတွေက မတွေးတတ်ပါဘူး၊ သူဘာလို့ လူ ဖြစ်လာသလဲ ဆိုတာကို ပေါ့ ။ အဲ့ အတွက် “ငါ ရှိနေလို့ ငါ မိဘ ပင်ပန်းရတယ်၊ ငါ့မိဘက ငါ့ကို မချစ်ဘူး “ လို့ ပဲ တွေးမှာပါ။ ကိုယ့်ကို မကြိုက်နှစ်သက်ဘူး လို့ ထင်ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မိဘ အရိပ်အောက်မှာ ကြီးပြင်းလာရတဲ့ သားသမီးတွေဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မှာ အများကြီး ချို့တဲ့ သွားပါတယ်။ သိမ်ငယ်စိတ် ၊ အားငယ်စိတ်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်မကြီးတဲ့ စိတ် ၊ မျှော်လင့်ချက် မဲ့နေတဲ့ စိတ် ၊ မူမမှန်တဲ့ စိတ်၊ တောင်စဉ်ရေမရ တွေးနေတတ်တဲ့ စိတ်၊ လူကြောက်တဲ့ စိတ် ၊ သွေးသားထက် သူစိမ်းကို ပိုမင်တဲ့ စိတ်၊ အပြင်လောက ကိုပိုခုံမင်တဲ့ စိတ် ၊ အပေါင်းအသင်း မက်တဲ့ စိတ် နဲ့ အဆိုးဆုံးက အရာရာတိုင်းမှာ ပျော့ညံ့သွားတဲ့ စိတ် တို့လို မျိုး သားသမီး သို့မဟုတ် လူငယ် တစ်ဦးရဲ့ စိတ်ဟာ မိဘက ပေးခဲ့တဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာ သို့မဟုတ် Mentally Abuse လုပ်ခံရခြင်း ရဲ့ Side Effect တွေပါ။
မိဘ ဖြစ်နေရခြင်း ရဲ့ အကြောင်းအရာဟာ ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်မှုပါပဲ။ မိဘ ကျေးဇူး ဘယ်လောက်ကြီးပါတယ် ပြောပြော ...၊ မိဘ တာဝန် ဟာ သားသမီးအတွက် စိတ်ရော ကိုယ်အတွက်ပါ ကျေနိုင်မှပဲ ကျေးဇူးကြီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့် သားသမီး ကံကြီးထိုက်ဖို့ အကုသိုလ် တွေ ချည်း အလုံးလိုက် အရင်းလိုက် နဲ့ စတင်ခဲ့ပြီး မှ တချိန်က ကြောင်ဟာ ကျား ဖြစ်လာရင် “ အသား နဲ့ ငါး “ ချော့ ပေးလို့ရတဲ့ အရွယ် ကျော်သွားပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ စံပြ မိဘ ဖြစ်ခြင်း / မဖြစ်ခြင်းထက် ကိုယ့် ရွေးချယ်မှု အတွက် ကိုယ့် Generation မှာ တာဝန်ကျေပွန် ဖို့ပါပဲ။ ဘာသာတရားတိုင်း မှာတော့ လိမ်တဲ့သူဟာ လိမ်တာပဲ၊ ခိုးတဲ့သူက ခိုးတာပဲ ၊ ဆိုးတဲ့သူက ဆိုးတာပဲ .. မကောင်းတဲ့သူက မကောင်းတာပါပဲ။ မိဘ ဖြစ်လို့ သားသမီး ဖြစ်လို့ ဆိုတဲ့ အောက်က အမြဲမှန်ခြင်း ၊ ကောင်းခြင်း ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ “သားသမီး မကောင်း ၊ မိဘ ခေါင်း “ဆိုကြပေမဲ့ ဒါဟာ လောကီလောက ထဲက “သောက်ပိုစကား”ပါ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာအယူ မှာ တော့ Karma (ကံကြမ္မာ) ဆိုတာ - “ကိုယ် မကောင်း ကိုယ်ခံ၊ ကိုယ် ကောင်း ကိုယ်ခံ” ပါပဲ ။ ဘယ်သူ မှအမြဲ မမှန်ပါဘူး ...။
Labels: Opinion, psychology, ကလေးသူငယ်
ကိုကာကိုလာကွကျတောငျပံ -ငါးခေါငျးမွအေိုးဟငျးအခြို -...